Nicole Prause သည် Porn စက်မှုလုပ်ငန်း၏လွှမ်းမိုးမှုခံရသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
သူမနိုးထနေသောအချိန်များကိုသူတစ်ပါးအားအနှောင့်အယှက်ပေးနေစဉ် Prause သည်ပါးနပ်စွာပျိုးထောင်ခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား - သူမကခဲ့ကြောင်းဒဏ္thာရီ “ သားကောင်” porn ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်လက်ရှိသုတေသနအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏ပြောဆိုချက်များကိုသဘောမတူဝံ့သူမည်သူမဆိုအများဆုံး (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏ပုံသဏ္groundာန်များသည်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်) ။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများအားတန်ပြန်ရန် YBOP သည် Prause ၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ (နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်များမှာကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause ၏သားကောင်များသည်ထပ်မံအပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်ကြီးကြပ်မှုမှကင်းလွတ်ပြီးယခုတွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ Prause သည်မီဒီယာမန်နေဂျာနှစ် ဦး မှထပ်တိုးခဲ့သည် မီဒီယာ2×3ကုမ္ပဏီရဲ့သေးငယ်သောတည်ငြိမ်မှုကို "ပူးပေါင်းသူများ" သို့ (မီဒီယာ2×3သမတ Jesse Ponce ကဖော်ပြသည် သူသည်ဟောလိဝုဒ်မီဒီယာနည်းပြနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်.) သူတို့အလုပ်သူတို့ ဆောင်းပါးတွေကိုစာနယ်ဇင်းတွေမှာထားဖို့ဖြစ်တယ် Prause featuring, သူ့ကိုရှာဖွေ စကားပြောတွေ့ဆုံမှု လိုလားတဲ့ porn နှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနေရာများ။ တစ်ပါမယ်ဘက်မလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်ထူးဆန်းနည်းဗျူဟာ။
လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့်အခြားနေရာများတွင်လူအများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုဆိုက်ဘာနှောင့်ယှက်မှုများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကတည်းက Prause ၏အဓိကပစ်မှတ်မှာ Gary Wilson ဖြစ်သည် (ရာနှင့်ချီသောဆိုရှယ်မီဒီယာမှမှတ်ချက်များသည်နောက်ကွယ်မှအီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူမှတ်ချက်ပေးသည်) Prause ၏တွစ်တာနှင့်ပို့စ်များကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သူမသည်သူမ၏သားကောင်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အနာဂတ်ဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသည်။ မှတ်ချက်။ ။ ဤစာမျက်နှာ၏လအနည်းငယ်အတွင်း Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုဖြင့်စတင်ဝင်ရောက်လာသည်။Donald ဟီလ်တန်, MD & Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodes), တစ်ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စနှင့် ကိစ္စတွင်ကီထိုင်တံဆိပ်.
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်း၏သွယ်ဝိုက်ထောက်ခံမှု: အသရေဖျက်မှု & ကြော်ငြာ hominem သူမက "ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ" (မကြာခဏကဤပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သားကောင်ဖြစ်ဟုဆိုကာ) အဖြစ်အမည်တပ်ထားသောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထားမှတ်ချက်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5, စာမျက်နှာ 6.
ဤစာမျက်နှာတွင်နံပါတ် ၂ နှင့်ပတ်သက်သောတွစ်တာများနှင့်မှတ်ချက်များ - သူမသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ရွေးချယ်ထားသည့်ရာထူးများကိုအားသွန်ခွန်စိုက်ပံ့ပိုးပေးသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာသက်သေအထောက်အထားများပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးသည့်နောက်၊ YBOP သည် Prause ၏တစ်ဖက်သတ်ကျူးကျော်မှုသည်မကြာခဏနှင့်မဆင်မခြင်သောအသရေဖျက်မှုအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်ဟူသောအမြင်ရှိသည် (သူမ၏သားကောင်များကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း "၏ကိုယ်ထိလက်ရောက်သူမ၏နောက်ယောင်","တကယ","သူမကိုမုဒိမ်းကျင့်ရန်အခြားသူများကိုအားပေးသည်, "နှင့်"နာဇီလက်သစ်ဖြစ်ခြင်း"), ငါတို့သူမ၏ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ရင်းဆန်းစစ်ရန်အနိုင်အထက်ဖြစ်ကြောင်း။
ဤစာမျက်နှာကိုအဓိကအပိုင်း ၄ ပိုင်းခွဲထားသည်။
အပိုင်း ၁ - နီကိုးလ်ချီးမွမ်း & ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း -
မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲ အခြားသူများကို porn စက်မှုလုပ်ငန်းဟု၏ ရန်ပုံငွေများ သူမ၏သုတေသနအချို့ (သို့သော်မည်သူမျှမပြောခဲ့ပါ)
2015 ထဲမှာ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း သူမက Prop 60 ကိုလက်ခံပြီးချက်ချင်းတိုက်ခိုက်သည်
အဆိုပါ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း သူမက Prause လေ့လာမှုအတွက်သူမသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်
Prause သည် porn & sex စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု (FSC, AVN, XBIZ, xHamster, PornHub, BackPage.com စသည်)
Prause ၏ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအနုပညာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး
နီကိုးလ် Prause porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆုတက်ရောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (XRCO, AVN)
အပိုင်း 2: နီကိုးလ် Prause "PornHelps" ခဲ့သလား (PornHelps က်ဘ်ဆိုက်, Twitter ပေါ်တွင် @pornhelps, ဆောင်းပါးများအောက်မှာမှတ်ချက်) ။ Prause အဖြစ် outed ခဲ့သည်တစ်ချိန်ကအားလုံးအကောင့်ကိုဖျက်လိုက်ပါ "PornHelps ။ "
အပိုင်း ၃။ နီကောလ်ပုံဥပမာသည်သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အကျိုးစီးပွားကိုထောက်ပံ့ပေးသောဥပမာများ။
အပိုင်း ၄–“ RealYBOP” - Prause၊ ဒန်နီယယ်ဘာဂေ့စ်နှင့်အပေါင်းအသင်းများသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုပြောဆိုသောသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်အသရေပျက်စေရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကိုချီးမွမ်းသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆယ်စုနှစ်များအတွက် sexology အလုပ်အကိုင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ကြောင်းခြောသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ Sexology ရဲ့အစီအစဉ်နေဆဲ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအစေခံရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအထောက်အထားပိုကြီးတဲ့အခြေအနေတွင်ကြည့်ရှုအားပေးရပါမည်။ မြင် Hugh Hefner, လိင်သုတေသနနိုင်ငံတကာအကယ်ဒမီနှင့်၎င်း၏တွေ့ရှိခဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ porn-စက်မှုလုပ်ငန်းဖော်ရွေ sexologists အဆိုပါ Kinsey Institute မှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက်နားလည်ရန်။ Prause တစ် Kinsey grad ဖြစ်ပါတယ်။
Update ကို (နိုဝင်ဘာ၊ 2019): နောက်ဆုံးတွင်အမှတ်စဉ်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲသူ၊ အသရေဖျက်မှု၊ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ "Porn စွဲလမ်းလား?"
နောက်ဆုံးသတင်းများ (သြဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀): ဂယ်ရီ Wilson သည်အမှတ်စဉ်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ အသရေဖျက်မှု၊ cyberstalker Nicole Prause အားတရားစွဲဆိုမှုတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အသေးစိတ်များ - တရား ၀ င်အောင်နိုင်မှုက Prause အားသားကောင်ကိုမဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်သည်။ သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုလိမ်လည်မှုကြောင့်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး၊.
အပိုင်း ၁ - နီကိုးလ်ချီးမွမ်း & ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း
မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲ အခြားသူများကို အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေများသူမ၏သုတေသနအချို့ကိုဟု၏
Prause ၏အကြိုက်ဆုံးနည်းဗျူဟာတစ်ခုမှာမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်းဖြစ်သည် အခြားသူများကို အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်း (လိုလားတဲ့ porn ကောက်ရောက်ရှိအားလုံးပေးသော၏) သူမ၏သုတေသနအချို့ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဟု၏။ ဤသည်အခြေအမြစ်မရှိစွပ်စွဲချက်သူမ၏တွစ်တာနောက်လိုက်ဖို့ကောင်းစွာကစား (အဘယ်သူကိုများစွာကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၌ရှိကြ၏) နှင့်နေသည့်ှှသူမ၏လုပ်ကြံဒဏ္ဍာရီသို့ feeds ။ သို့သော် Prause သူမသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းများကငွေကြေးထောက်ပံ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်မည်သူမဆိုမဆိုအမှန်တကယ်စာရွက်စာတမ်းများပေးအပ်ဘယ်တော့မှသိရသည်။
Prause ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုကျွန်ုပ်တို့မဖော်ထုတ်မီဤပရိယာယ်နမူနာအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပထမ ဦး စွာ Linda Hatch PhD သို့အခြေ ပြု၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာမှကောက်နုတ်ချက် -
Linda Hatch Prause အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ဘယ်တော့မှနှင့် Prause သူမ၏စွပ်စွဲချက်များဖြစ်စေ၏ထောက်ခံမှုမစာရွက်စာတမ်းများပေးအပ်။ ကြည့်ရှုပါ: အတုမရှိသော“ အဆက်အသွယ်မရှိသော” တောင်းဆိုချက်များ၊ အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာများနှင့်လူများကိုနှုတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုချီးမွမ်းပါ
နောက်ထပ်အတုအယောင် Gary Wilson ထံသို့, ရပ်ဆိုင်း & ရပ်တန့်စာကို:
အထက်ဖော်ပြပါအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးစာတွင်ပါ ၀ င်သောတောင်းဆိုချက် ၄ ခုစလုံးသည်အခြေအမြစ်မရှိပါ။ လုံးဝ Prause ကလုပ်ကြံ။ ကြည့်ပါ အောက်တိုဘာလ, 2016 - Prause သူမ၏ spurious အောက်တိုဘာလ, 2015 "အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်" ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအက္ခရာ။ Wilson က Prause ၏ရှေ့နေအားမိမိစာတစ်စောင်ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်။
Prause ကဤကဲ့သို့သောတွစ်တာများကိုတင်ခဲ့သည်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကသူသို့မဟုတ်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှငွေကြေးထောက်ပံ့ကြသည်ဟုဆိုသည် (Prause သည်ဥပမာတစ်ခုတည်းနှင့်လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိ)
2018) တစ်ဦးထံမှတစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်: နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများအပြား 1 tweets အတူတူစာသားနဲ့အတူတူနှစ်ခု screenshots များပါဝင်သော FTND ပစ်မှတ်ထား နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးအရ FTND သည်“ Mormon ဘုရားကျောင်းမှဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်”၊ ၂) FTND မှပေးပို့ခြင်းမပြုနိုင်သောအီးမေးလ်မှကောက်နှုတ်ချက် -
နှစ်တွေကျနော်တို့က Mormonism ဘုရားကျောင်းထဲကနေမျှရန်ပုံငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် FTND ပြည်နယ်မြင်ကြပြီ။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, နိုင်ငံရေး ဒီပြောဆိုချက်အဘို့အဘယ်သူမျှမစာရွက်စာတမ်းများ (အခြားထိခိုက်အပိုင်းအစဖို့မပင် link တစ်ခု) သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာလုပ်ကြံ, ဒါမှမဟုတ်ရန်တိုက်ကျွေးခဲ့သည် နိုင်ငံရေး ၏တဦးတည်းအားဖြင့် နှစ် စာနယ်ဇင်းဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူများ Prause ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏သေးငယ်သောန်ထမ်းအပေါ်?
သူမ Mormon ရန်ပုံငွေအခိုင်အမာထောက်ခံချက်မပေးသည့်အပြင် Prause ၏အီးမေးလ်၏မျက်နှာပြင်များကိုအနည်းငယ်သိလိုသည်။ တစ် ဦး ၏ဖန်သားပြင်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစား တစျခုလုံးကိုအီးမေးလ်က, Prause တစ် letterhead တစ်စခရင်ပုံနှင့်တစ်ဦး Out-of-အခြေအနေတွင်အပိုဒ်တစ်စက္ကန့်မျက်နှာပြင်ပုံပေးပါသည်။
ပြင်ပမှအပိုဒ်ခွဲအရ Prause ၏သုတေသနကိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းမှထောက်ပံ့သည်ဟုမဖော်ပြထားပါ။
Prause ၏သုတေသနကိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သောအီးမေးလ်ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဟုဆိုမည့်အစား အံ့ဩ ချီးမွမ်းခံရလျှင်အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းတစ်စုံတစ်ဦးကလွှမ်းမိုး။ " စိတ်ထဲမှတ်ထားပါ၊ ဤအီးမေးကိုနီကိုးလ်ပရာ့စ်သည်သူမ၏နှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမပြုမီ၊ emailပြီလ ၂၀၁၆ ရက်စွဲပါဖြစ်သည် (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း)
Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှရန်ပုံငွေများရရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်မှာမည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမှမရှိပါ။ is ဧကန်အမှန်ထိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကလွှမ်းမိုး။ အဆိုပါ Prause စာမကျြနှာ ဒီ website တွင်အလွန်ကြီးမား Prause ရေခဲတောင်၏ရုံအစွန်အဖျားဖြစ်ကြသည်။ သူမသည်လူတိုင်းနှင့်ညစ်ညမ်းပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အကြံပြုသူမည်သူမဆိုတိုက်ခိုက်ခြင်း, အဆထောင်ပေါင်းများစွာ၏တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (Prause မကြာသေးမီက 3,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ခံယူထားတယ် tweets သူမရဲ့ twitter အကောင့်ပြေတတ်။ ) သူမသည်တစ်ဦးပေးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေး-ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်တာအဖြစ်တိုင်းအလှည့်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းကာကွယ်ခဲ့သည်။
ရှင်းနေသည်မှာ LA ကတှငျနထေိုငျသူမြား Prause သည်, ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူပျူငှါနွေးထွေးသောဆက်ဆံရေးမျိုးရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ။ ဒီကိုကြည့်ပါ သူမ၏၏ပုံရိပ် (ဝေးညာ) ပုံ X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်ခေါ်ဆောင်သွား။ အဆိုအရ ဝီကီပီးဒီးယား,
"ဒီ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူများ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး ထိုသို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။"
2016 XRCO ဆုများမှရရှိသောဓာတ်ပုံများ (အောက်ခြေ - ဘယ်ဘက်ရှိနာမည်ကြီး porn ကြယ်ပွင့် Melissa Hill) ၏ချီးကျူးခြင်းနှင့်ခန်းမ)
2015 ထဲမှာ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း သူမကကယ်လီဖိုးနီးယား၏ကျားကန် 60 (ညစ်ညမ်းကွန်ဒုံးများ) ကိုချက်ချင်းလက်ခံပြီးချက်ခြင်းတိုက်ခိုက်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားစီမံခ 60 (2016 ရွေးကောက်ပွဲတွင်) ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုပြဌာန်းခဲ့ကြပေသည်။ ဒါဟာ AIDS ရောဂါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း (AHF), တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်မယူခ်ျအိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းကထောက်ခံနှင့်ပြင်းထန်စွာအလုံအလောက်စိတ်ဝင်စားစရာ porn ထုတ်လုပ်သူများနှင့်, နီကိုးလ် Prause နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဒါဝိဒ်သည် Ley အားဖြင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2016 ရွေးကောက်ပွဲကိုဖို့ run ကိုဖွင့်မှာတော့ Prause နှင့် Ley ထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အကိုင်အဖြစ် graver ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးမစိုက်စဉ်ကျားကန် 60 အနိုင်ယူပြီးနှင့်အတူစွဲလမ်းပုံရသည်။ Prause နှင့် Ley နှစ်ဦးစလုံးကျားကန် 60 အပေါ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှု Tweet နဲ့ re-tweet တိုက်ခိုက်မှုသုံးစွဲလျက်, ထောက်ခံ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်းအဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်, ဧည့်ခန်းလက်မောင်း (tweet1, tweet2, tweet3, tweet4, tweet5, tweet6, tweet7, tweet8, tweet9, tweet10, tweet11 - မှတ်ချက်: Prause ဧပြီလ 2016) တွင်ဤ tweets များစွာကိုဖျက်ပစ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် (လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်အတွက်သန်းနှင့်ချီသောငွေများကိုသုံးစွဲသော) FSC သည်သူမကို“ အနိုင်ကျင့်သူများ” နှင့် ပတ်သက်၍ Prause အကူအညီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ဒီနေရာမှာအစစ်အမှန်နိုငျကငျြ့သူ Prause ခဲ့သည် သူမ၏ပထမဆုံးတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ပိတ်ပင်ထား နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာ-နောက်ယောင်ခံသည်။ အစားအချက်အလက်များထုတ်ဖော်၏ (၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်မှုမှာတော့တွစ်တာသူမ၏ဒုတိယတွစ်တာအကောင့်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ), Prause ယောဟနျသ Adler MD (စတန်းဖို့ဒ်) တစ်နည်းနည်းနဲ့သူမ၏တွစ်တာချွတ်ကန်တယ်တဲ့အရပ်ရှည်ရှည်-ပုံပြင်လုပ်ကြံ။ Adler ကဤအတူဘာမှခဲ့။ မုသာစကားအပျေါမှာတည်ရှိသည်။
သူမ၏စိတ်ကူးယဉ်အနိုင်ကျင့်များနှင့်သူတို့၏“ ကူညီမှု” ကိုလက်ခံရန် Prause က FSC သို့အီးမေးလ်ပို့ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Prause သည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကောင့်တစ်ခုနှင့်အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောကွန်ဒုံးများသည်မကောင်းသောအယူအဆ (ဘာကြောင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်း၏ရပ်တည်ချက်) နှင့်စတင်ဆွေးနွေးရန်စတင်ခဲ့သည်။
Prause ထို့နောက် (? ဒီအကျိုးတူဆက်ဆံရေးမျိုး၏အချုပ်အခြာဖြစ်၏) ကို FSC ဖို့အကူအညီကမ်းလှမ်း:
ထိုအချိန်မှစ၍ Prause သည် FSC ကိုအကြိမ်ကြိမ်လူသိရှင်ကြားကူညီခဲ့သည်၊ ဥပမာ FSC ၏ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံခဲ့သည် ကယ်လီဖိုးနီးယား၏မကျေနပ်ကြသောအဆိုပြုချက် ၆၀ (porn တွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုခြင်း)
ဤတွင်သူမ FSC ဝါဒဖြန့် retweets ။ (နောက်တစ်ကြိမ်၊ Prause ၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာ FSC တွစ်တာများစွာကို ထိုအချိန်မှစ၍ ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ ):
Smearing AIDS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း, ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ဘက်သို့ယူစဉ်:
နောက်ထပ်ကျားကန် 60 tweet:
နောက်ထပ် ၆ ခုကတော့ Prause က AVN ၏ Prop 60 တွင်ရပ်တည်ချက်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
Prause Retweet XBIZ ဝါဒဖြန့်, တိုက်ခိုက်မှုများ AIDS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း၊ ညစ်ညမ်းသောကွန်ဒုံးများကိုထောက်ခံသည့် (prop 60): https://twitter.com/AIDSHealthcare
ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့သည့်အနေဖြင့်၊ တိုက်ခိုက်မှုများကိုချီးမွမ်း AIDS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း (သောကျားကန် 60 ထောက်ခံပါတယ်):
ကျားကန် 60 အကြောင်းကို porn စက်မှုလုပ်ငန်းဝါဒဖြန့် retweeting, FSC Tagging:
porn အဆိုတော်များအတွက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းထောက်ခံသူတစ်ဦး UCLA ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တိုက်ခိုက်နေစဉ် (60 ကျားကန်) FSC Tagging:
ဤအပိုင်းရှိ Prause ၏ FSC လိုလားသည့်လုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်း နိုဝင်ဘာလ 2016: Prause မေးတယ် Vice ကျားကန် 60 (porn အတွက်ကွန်ဒုံး) ထောက်ပံ့ဘို့ကူးစက်ရောဂါအထူးကု Keren Landman, MD မီးမဂ္ဂဇင်း။ တစ်ဦးအတွက် tweets ၏စီးရီး, Prause သည်“ အရွယ်ရောက်ပြီးသူသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး” တစ် ဦး အားတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းသည် Keren Landman, ကူးစက်ရောဂါအထူးပြုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်။
ဤတွင်အကျပ်အတည်းအရှိဆုံးသောအရာဖြစ်သည် Vice မီးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ Landman မှမဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသား ကျားကန် 60 ထောက်ပံ့:
အလွတ်? Prause ရဲ့ဒီဂရီစာရင်းဇယား၌တည်ရှိ၏နေစဉ်, Keren Landman MD တစ်ချိန်ကရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့ကိုအမေရိကန်စင်တာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်သူတစ်ဦးသုတေသီ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါနှင့်ကူးစက်ရောဂါအထူးကုဖြစ်ပါတယ်။ HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုလယ်ပြင်၌ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအများအပြားစာတမ်းများရှိခြင်း, သူမ၏အထူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူသူမ၏အနေအထားကိုထောကျပံ့ဖို့ပျက်ကွက်နေချိန်မှာပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ကျနော်တို့ Prause ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတစ်ဦးလယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများတိုက်ခိုက်ခြင်းရှိသည်။ (မည်သူမဆို "အဲဒီ Prause ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုယုံကြည်ပါသလားတိုင်း လွတ်လပ်သောသိပ္ပံပညာရှင် "ကျားကန် 60 ဆန့်ကျင်?) မည်သူမဆိုကျားကန် 60 ဒေါက်တာ Landman ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ဘာပဲ အနေအထားထောက်ခံနေသည် သုတေသနအသုံးပြုပုံနှင့်နီကိုးလ် Prause ရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
Prause သည် Gary Wilson ၏တွစ်တာတွင် ၀ င်ရောက်လာပြီး prop 60 ကိုအနိုင်ယူရာတွင်သူ၏အခန်းကဏ္ role နှင့် ပတ်သက်၍ ကြွားဝါသည်။ သူမ၏ယူဆအမည်ရှိ RealYBOP Wilson ၏တွစ်တာများကိုမကြာခဏ trolls (Wilson သည်အကောင့်နှစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း)
အဆိုပါ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း သူမအနေဖြင့်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Prause ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမဆုတ်မနစ်ထောက်ခံမှုသည် quo pro quo (သို့) တစ်ခုထက်ပိုစွာပေါ်ပေါက်လာသလား။ သေချာတာပေါ့, အများပြည်သူမျက်နှာသာလဲလှယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် လာသောအခါ 2015 ခုနှစ် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း (ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းလော်ဘီ) သည် Prause အကူအညီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးသူလက်ခံခဲ့သည်။ သူမသည် Prop 60 ကို (စက်မှုလုပ်ငန်းမလိုချင်သောညစ်ညမ်းကွန်ဒုံးများဖြင့်) တိုက်ခိုက်သည်။.
ဒုတိယဖြစ်နိုင်သမျှ quo လိုလားသောပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေသည် ၂၀၁၆ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ပိုက်ဆံတစ်လှည့်စီပေးခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” (OM) အစီအစဉ် (ပုံအောက်မှာ FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး). Orgasmic ဘာဝနာ, ကြောင်းတစ်ခု MLM Pseudo- အစွန်းရောက် ကြီးမားတဲ့နှစ်ကောင်အားသွင်း အမျိုးသားများအားအမျိုးသမီးများမည်သို့ရှူရှိုက်နိုင်သည်ကိုသင်ပေးရန်။ OM တွင်ပါဝင်နေသောစုံတွဲတစ်တွဲအားစောင့်ကြည့်နေသည့်ဤနေရာတွင် Prause ကိုပုံဖော်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါ၊ သို့သော် Clitoris diddling (OM) လေ့လာမှုသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်လောက်သောဆိုးဝါးသောထိရောက်မှုရှိနိုင်သည် - လိုချင်သောအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များကိုရှာဖွေခြင်း သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါပွတ် စက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုတေသီများကစောင့်ကြည့်နေစဉ်။ သူမ၏ OM စုံတွဲ ၂၅၀ ၏ပစ်မှတ်ကိုရောက်ရန် Prause ရှိနိုင်သည် ဘာသာရပ်အဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော်porn စက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုကတဆင့် s အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ အဆိုပါ FSC ဖို့မျက်နှာသာ? ထို့နောက်နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာတွင် Prause သည်သူမ၏မကြာမီလာမည့် OM လေ့လာမှု (အပြာနှင့်လုံးဝမပတ်သက်သော) သည်စွဲလမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းစေမည်ဟုလူသိရှင်ကြားစတင်ခဲ့သည်။ ဒီအရေးအသား (နိုဝင်ဘာ, 2020) ၏အဖြစ် OM လေ့လာမှုပေါ်လာသေးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေ ပတ္တမြားကြီး Rubousky, လူကြီးအဆိုတော်များအစည်းအရုံး၏ဒုတိယဥက္က္ဌ, Prause ကြောင်းဖော်ပြထား လေ့လာမှုဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အထင်ရှားဆုံး porn စက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စု / လော်ဘီမှတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ (Prause ကတည်းကဒီတွစ်တာကိုဖျက်ပစ်သည်။ )
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လေ့လာမှု (သို့မဟုတ်လေ့လာမှုများ) ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းကိုခံရဟု OneTaste, အကျိုးအမြတ်အတွက်အကျိုးအမြတ်အတွက်ကုမ္ပဏီ, Clitoral ခြယ်လှယ်သင်ယူဖို့သုံးရက်ကြာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွက် $ 4,300.00 အားသွင်း။ အဖြစ် ဒီ Bloomberg.com အတွက်ဖော်ထုတ်ဖော်ပြထား, OneTaste သည်မတူညီသော packages များကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
လောလောဆယ်, ကျောင်းသားများအနေနဲ့များအတွက်နည်းပြအစီအစဉ်အတွက်တစ်ဦးဆုတ်ခွာနေ, $ 499 များအတွက်တစ်ဦးတနင်္ဂနွေသင်တန်းကိုများအတွက် $ 4,000 $ 12,000 ပေးဆောင်နှင့် $ 16,000 "အထူးကြပ်မတ်။ " 2014 ခုနှစ်, OneTaste ဝယ်လက်အားလုံးယူပေးနိုင်ပါတယ်သော yearlong $ 60,000 အဖွဲ့ဝင်, ရောင်းချစတင် အဆိုပါသင်တန်းများကိုသူတို့လိုချင်တဲ့နှင့်မျက်နှာစာတန်း၌ထိုင်။
ဤသည် OM လေ့လာမှုနှင့်စာမျက်နှာ ၃ မှထောက်ပံ့သူအားတရားဝင်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည် နီကိုးလ်ပရပ်စ်၏စာမျက်နှာ ၂၀ ရှိသော CV (Prause သည်သူ့ကိုယ်သူ“ အဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကိုသတိပြုပါ)
တရားရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ တွစ်တာများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုခြိမ်းခြောက်နေသောမုသာစကားများ (ဂယ်ရီ Wilson) တွင်၊ Prause သည်ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏ပထမဆုံး Orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းလေ့လာမှုကို OneTaste Foundation မှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သည်ဟုဖော်ပြခြင်းဖြင့်သူမကိုရှုတ်ချခဲ့သည်။။ သူမသည်လတ်တလောအသစ်ပေါ်ထွက်လာသည့် OM Foundation ၏သိပ္ပံနည်းကျရန်ပုံငွေမှသူမအားငွေကြေးထောက်ပံ့နေဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်သူမ၏ CV သည် Prause ကဲ့သို့ပင်မလိမ်ပါ။
Greg Siegle ၏ CV တွင် OneTaste သည် Orgasmic Meditation Research ကိုရန်ပုံငွေအဖြစ်စာရင်းပြုသည်။
မကြာသေးမီကမေလ ၂၀၂၀ တွင်စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သောယခုပျောက်ဆုံးနေသော OneTaste ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Prause & Siegle ကို Orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းကို“ သုတေသနပြုခြင်း” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
A 2017 ယောဂဂျာနယ် ဆောင်းပါး OM လေ့လာမှုအတွက်ရန်ပုံငွေအဖြစ် OneTaste ကိုလည်းအမည်ပေးထားသည်။
Prause ကိုကောင်းစွာတည်ထောင်ထားပါတယ် မှန်မှန်မုသာ, အသရေနှင့်ပင် မိမိကိုယ်ကိုအနာပျောက်စေ၏, သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအလွယ်တကူ debunked မှားယွင်းသောပြောပြ? သူမသည်သူမကိုယ်တိုင်သုတေသနပြုရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သော OneTaste နှင့်ဝေးကွာရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည် အ ဘလွန်းဘာ့ဂ် ဆောင်းပါး ရိပ်မိစစ်ဆင်ရေးတစ်ခု, ဖြစ်ကောင်းလိင်လိင်အစွန်းရောက်အဖြစ်။
OM သည်ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သော“ OneTaste” နှင့်ဝေးကွာရန်ကြိုးစားနေပုံရသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် OneTaste ဝက်ဘ်ဆိုက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။အင်တာနက်မှတ်တမ်းဗားရှင်း) နှင့်အစားထိုးခဲ့သည် "OM Institute မှ။ " အသစ် OM "သိပ္ပံစာမျက်နှာ ချီးမွမ်း & Siegle featuring ယခင် OneTaste သိပ္ပံစာမျက်နှာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် -
မဟာဗျူဟာအရ၊ နာမသစ်တွင် OneTaste ကိုနှိမ်နင်းသည့်ဆောင်းပါးများစွာတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သော“ Orgasmic Meditation” နှင့်“ OneTaste” ဟူ၍ မပါ ၀ င်ပါ။ Hosts များက OneTaste ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးအသစ်နှစ်ခုထပ်မံဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ OM LLC ၏ Institute နှင့် “ OM ဖောင်ဒေးရှင်း” (ပုံအရသုတေသနကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသည်။ ) စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက OM Foundation ကို Bloomberg ဖော်ထုတ်ပြီး ၅ လအကြာမှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။
အဓိကအချက် - Prause ၏ Orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်မှုသုတေသနကိုလက်ရှိအနေဖြင့်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးနေသည်ကို OneTaste က Prause & Siegle မှ OM လေ့လာမှုများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
ယခုအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သောအကြောင်းလူသိရှင်ကြား Prause & Siegle လေ့လာမှု (များ) အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိရန် OM ဖောင်ဒေးရှင်း၏ဌာန ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် (“ ရှုတ်ချထားသော“ OneTaste” နှင့်ပတ်သက်သည့်ဝေါဟာရတစ်ခုမျှမရှိ)):
အဆိုပါ 2018 အတွက် ဘလွန်းဘာ့ဂ်ဆောင်းပါး အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Joanna Van Vleck OneTaste သည် Prause ၏ OM နှင့်ပတ်သက်သောလာမည့် EEG လေ့လာမှုများအပေါ်တွင်မှီခိုနေရသည်ဟုတော်တော်များများပြောပါသည်။
အဆိုပါ newish CEO ဖြစ်သူလေ့လာမှု OneTaste strokers နှင့်လေဖြတ်ခြင်း၏ 130 အားလုံးထံမှဦးနှောက်-လှုပ်ရှားမှုဖတ်ယူထားပြီးဖြစ်သော OM ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်အလောင်းအစားဖြစ်ပါတယ်လတ်ဆတ်သောလူအစုအဝေးဆွဲပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ, ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကဦးဆောင် လေ့လာချက် ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမျိုးစုံစာတမ်းများ၏ပထမဦးဆုံးလိုက်လျောရန်မျှော်လင့်နေသည်။ ဗန် Vleck ပြောပါတယ် "ဤသူကားအဘယျသို့ back မှထှကျလာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကျိုးကျေးဇူးများများမှာချုံ့ချဲ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြီးမားသောဖြစ်သွားသည်င့်သောသိပ္ပံ"
ရိုးရှင်းစွာ ထား. , Prause ၏စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုအားကောင်းရန်ငှားရမ်းထားခဲ့သည် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်အငြင်းပွားဖွယ် မည်သည့်အမည်ဖြင့်ကျော်လွှားပါစေကုမ္ပဏီ (နောက်ဆောင်းပါး - The 'fingering' အစွန်းရောက် - OneTaste ၏စာရှုသူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံသည်အလွန်အရသာမရှိပါ).
ထပ်မံ၍ OM လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ရန် Prause သည်သုတေသီများကသူတို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုလေ့လာသည့်အနေဖြင့်စက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်လိင်အင်္ဂါနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသောသင်တန်းသားများကိုလိုအပ်သည်။ Prause ရဲ့ရုံးခန်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ guinea ဝက်များအဖြစ်လုပ်ဆောင်လိုသောအမျိုးသမီးများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲကြောင်းစိတ်ကူး။ မရ။ မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်, ပတ္တမြားအခိုင်အမာ Prause အဆိုပါ FSC မှတဆင့်သူမ၏ OM လေ့လာမှုများအတွက်ဘာသာရပ်များရရှိသောနှင့် Prause အဆိုပါ FSC နဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ကွောငျး:
အထက်ပါအချက်များမှန်ကန်ပါက၎င်းသည် Prause နှင့် FSC အကြားအလွန်ပျော့ပျောင်းသောအလုပ်လုပ်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြသည်။ Prause တုန်းက ၂၀၁၅ မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေး လူသိရှင်ကြား (နှင့်ပုံတူလက်ခံခဲ့သည်) နက်ရှိုင်းသောအိတ်ကပ် FSC ထံမှအကူအညီကို။ ထို့နောက် Prause သည် FSC ၏အဓိကအစီအစဉ်များကိုသိပ္ပံနည်းကျအလေးထားခဲ့သည် (အဆိုပြုချက် ၆၀ 'ညစ်ညမ်းကြယ်များကိုကုန်ပစ္စည်းများမပျက်စီးစေ'၊ 'ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္'ာရီ'၊ 'porn သည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းမဟုတ်' '၊ အများအားဖြင့်အကျိုးရှိသည် 'စသည်တို့)
အဆိုပါကြံစည်မှု thickens ။ မူလကလေ့လာမှုကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခဲ့သည် သာ ၏အကျိုးကျေးဇူးများorgasm တှေးတောဆငျခွ"ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ထို့နောက်နက်နဲသောအရာ (ဆက်ဆက် FSC ရဲ့အကျိုးစီးပွားအစေခံလိမ့်မည်ဟုသော) porn စွဲလမ်းဖျက်သိမ်းရန်လေ့လာမှုသို့အသွင်ပြောင်း!
လေ့လာမှုသည် ၂၀၂၀၊ ဇွန်လအထိမပြီးဆုံးသေးသော်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Prause ကသူမသည် Orgasmic Meditation လေ့လာမှုကိုညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုအား“ အတုအယောင်” အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးလေ့လာမှု porn အသုံးပြုမှုနှင့်မပတ်သက်ခဲ့ကြပုံရသည်နှင့်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းစွဲမပါဝင်ခဲ့ဖွယ်ရှိ။
သူမ၏တွစ်တာနှင့်မှတ်ချက်များတွင် Prause ကသူမအနေဖြင့်သူမ၏လိင်တူချစ်သူစုံတွဲများကိုလိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်များ (သူမ၏ထင်မြင်ချက်အရ) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုပြိုကွဲစေခဲ့သည်။ တိုတိုပြောရရင်, Prause ၏ OM လေ့လာမှုသည်“ လိင်ဆက်ဆံသည့်လိင်” စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု မှနေ၍ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာသူမ၏လာမည့်“ မိတ်ဖက်လိင်” (OM) လေ့လာမှုကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအားဖယ်ထုတ်ရန်ပြောဆိုနေသည့် Prause ၏နမူနာများဖြစ်သည်။
နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း - ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နွေ ဦး ရာသီတွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲ ICD-2019 ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ " “ အကောင်အထည်ဖော်မှုဗားရှင်း” ကိုမထုတ်ဝေမီ၊ ICD-11 ၏ beta မူကြမ်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တင်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်မှတ်ချက်ပေးရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (ကြည့်ရှုရန်နှင့်ပါ ၀ င်ရန်ရိုးရှင်းသော sign-up လိုအပ်သည်။ )
အံ့သြစရာကောင်းတာက Prause ဟာနောက်ထပ်မှတ်ချက်များကိုတင်ခဲ့သည် beta-မူကြမ်းမှတ်ချက်အပိုင်း ပေါင်းစပ်သည်အခြားမှတ်ချက်ပေးသူထက်။ ထဲမှာ အခုအသစ်အဆိုပြုအောက်မှာမှတ်ချက်တွေအပိုင်း, Prause သည်သူမ၏ OM လေ့လာမှု (လက်တွဲဖော်လိင်၊ N = ၂၅၀) အကြောင်းသုံးကြိမ်တိုင်တင်ခဲ့သည်။ Prause ၏မှတ်ချက်များသည်သူမ၏ OM လေ့လာမှုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားများမတွေ့ရပါ။ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များကသူမရှိသည်ဟုဆိုကြသည်):
နောက်ထပ် ICD-11 မှတ်ချက်
သူမကြိုးပမ်းမှုပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ICD-11 အသစ် သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများအတွက်သင့်တော်သည် - "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
သို့သော်သူမအနေဖြင့် ICD-11 ၏ CSBD ရောဂါကိုရှာဖွေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်သူမသည် Orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်မှုလေ့လာမှုသည် porn / sex စွဲလမ်းမှုပုံစံကို“ မှားယွင်းစေခဲ့သည်” ဟု WHO၊ APA နှင့် AASECT တို့အား WHO၊
တရားဝင်အဘယ်အရာကိုသုတေသီတစ်ဦး debunked ရှိသည်ဟုအစဉ်အဆက်တောင်းဆိုမယ်လို့ သုတေသနတစ်ခုလုံးကိုလယ်ပြင် နှင့် "အတု" ခံရဖို့ အားလုံးယခင်လေ့လာမှုများ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူများကိုမစုဆောင်းသည့်စွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာများ၊ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းမထားသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်အတူလား။ Prause သည်သူမကိုယ်တိုင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာအလုပ်ကို အခြေခံ၍“ အတု” နှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူပြောဆိုမှုများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထိုးဖောက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်မှု ၁၀ ​​ခုကသူသည်သူမ၏တွေ့ရှိချက်များကို“ တလွဲကောက်ချက်ချ” ခဲ့သည်.
ဤ tweet တွင် Prause ကသူမ၏လာမည့် OM လေ့လာမှုသည်လိင်စွဲလမ်းသူများအားဖြင့်“ မုသာစကား” အားလုံးကိုပြင်ဆင်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
ဒီ 2018 Slate ဆောင်းပါးမှာတော့ "အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause အားဖြင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးသည် Prause ၏ OM လေ့လာမှုကိုစောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်းပင်ပြောခဲ့သည်။
ပို. အရေးကြီးသည်ကျနော်တို့ကဒီအခက်အခဲသတင်းပို့သောသူတို့အားအတွက်အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများရှိသည်။ အဆိုပါ compulsive မော်ဒယ်စမ်းသပ်ထားတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းအတွက်ပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုသိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်မှာသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ (ထုတ်ဖော်။ ဤဆောင်းပါးကိုရဲ့ Co-စာရေးဆရာများထဲမှတစ်ဦး, နီကိုးလ် Prause သောလေ့လာမှု၏ဦးဆောင်ရေးသားသူဖြစ်ပါသည်) အဆိုပါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဆိုသိပ္ပံကျန်းမာလူများ pathologizing သန်းပေါင်းများစွာဒီလောက်စွန့်ရှေ့တော်၌မိမိတို့ဝတ္ထုရောဂါထောက်ပံ့လျှင်ကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Prause ၏ဥပမာများကကမ္ဘာပေါ်တွင်သူမ၏လာမည့်“ လက်တွဲဖော်လိင်” လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုအမြဲတမ်းဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးနောက် သူမ၏လာမည့် Orgasmic တရားအားထုတ်ရန်လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း၊ မတ်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင် OM လေ့လာမှုကိုချီးမွမ်းကြလော့ ယခုအကဲဖြတ်အဖြစ် "လိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှု၏စွဲမော်ဒယ်များ။ " အများစုမှာမမှန်။
Prause ကဒီမှာလုပ်ခဲ့တာနဲ့ဆန့်ကျင်လျက်၊ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်နည်းလမ်း ထို အမှန်တကယ်ဒေတာစုဆောင်းမီသင်၏စာတမ်း၏နိဒါန်းနှင့်နည်းစနစ်များကိုအခြားသူများအားဝေမျှသည်။ Prause သည်သူမ၏ OM လေ့လာမှုကို ၂ နှစ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသည် ပြီးနောက် ဒေတာစုဆောင်းနှင့်တစ်နှစ် ပြီးနောက် သူမ၏“ တွေ့ရှိချက်များ” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပြိုကွဲစေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Prause ၏ OM လေ့လာမှုကိုထုတ်ဝေသောဂျာနယ်သည်ဤစာတမ်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောအပြုအမူများကိုအနီးကပ်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလည်းဒီအတိုင်းပဲ။
Prause သည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားမျှပြောခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သူမသည် FSC ၏စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည့်လက်မှုပညာ FSC မှထောက်ပံ့ပေးသောညစ်ညမ်းဖျော်ဖြေသူများကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသုံးနှစ်အစောပိုင်းကသူမ၏အကူအညီကိုကမ်းလှမ်းသောတူညီသော FSC တွစ်တာအကောင့်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးမှုအတွက်အမြဲပိတ်ပင်ထားသည်။ (Prause ၏တွစ်တာအခြေပြုအနှောင့်အယှက်ပေးခံရမှုခံရသူ။ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုပုံစံပေါ်ရှိစာပေများကိုအကိုးအကားပြုဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခု၏ ဦး ဆောင်ရေးသားသူ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015).)
အောက်ဆုံးလိုင်း: Frause ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး FSC ၏အကူအညီကိုလက်ခံခဲ့ပုံရသည်။ Prause သည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏အကျိုးစီးပွားကိုမြှင့်တင်ရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာ (နှင့်အီးမေးလ်များ) ကို အသုံးပြု၍ ညစ်ညမ်းမှုအပေါ်မကောင်းသောထင်မြင်ချက်များကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူမသည်“ ညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ” အဖြစ်သူသတ်မှတ်ထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
မေးခွန်း: ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ Prause အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဝါဒဖြန့် tool ကိုသို့၎င်း၏လေ့လာမှုလှည့်ထားပြီးပုံကိုသိသလား အဆိုပါ OM လေ့လာမှုပုံက၎င်း၏လက်ခံရရှိ Pittsburgh မှတဆင့် IRB ခွင့်ပြုချက် နှင့် Co-သုတေသီ ဒေါက်တာ Greg ဂျေ Siegle။ တက္ကသိုလ် Prause စွပ်စွဲကွောငျးသိရပါဘူး အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်းကနေတဆင့်ရရှိသောဘာသာရပ်များ? Pittsburgh တက္ကသိုလ်ကညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် Prause ၏အနီးကပ်ဆက်ဆံမှုကိုသိသလား။ Pittsburgh တက္ကသိုလ်က Prause ကိုသတိထားမိလား ရှည်လျားသောသမိုင်း ညစ်ညမ်းသော၊ တခါတရံတွင်တရားမ ၀ င်သောအပြုအမူများ (ရဲတပ်ဖွဲ့မှမှားယွင်းသောအစီရင်ခံစာများ၊ အသရေဖျက်မှု၊ အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့သို့မှားယွင်းသောအစီရင်ခံစာများ) ကိုညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတွက်အထောက်အကူပြုသလား။
၂၀၂၀ - ဘီဘီစီမှအပိုင်း ၁၀ ပိုင်း - Orgasm Cult: ကျန်းမာရေးအတွက်သင်ဘယ်လောက်အထိသွားရမလဲ။ ကျန်းမာရေးကုမ္ပဏီ One Taste ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောမေးခွန်းများမေးခြင်း.
၂၀၂၁ - ဟောလိဝုဒ်မှထောက်ခံသည့်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအော်ဂဇင်ဝတ်ပြုရေးအတွင်း၌ (The Telegraph, UK)
Prause ရဲ့ တိုက်ရိုက် porn & sex industry အတွက်ထောက်ပံ့မှု (FSC, XBIZ, Xhamster, etc) ။
ဤအခန်းတွင် FSC, AVN၊ porn ထုတ်လုပ်သူများနှင့် porn ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသည့် Prause နမူနာအနည်းငယ်ပါရှိသည်
မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် - သိပ္ပံပညာကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြရန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကိုသုံးမည့်အစား၊ Prause သည် 2019 နှင့် 2020 အတွင်းသူမ၏ alias shill အကောင့် @BrainOnPorn ကိုသီးသန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ထပ်စာမျက်နှာ ၁၀၀၀ ကျော်သည်ဤစာမျက်နှာ ၃ ခုတွင်ရှိသည်။
RealYourBrainOnPorn (@BrainOnPorn) သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအထူးသဖြင့် Pornhub ကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသည်။
RealYourBrainOnPorn (@BrainOnPorn) တွစ်တာ၊ စာမျက်နှာ ၂ - ဒန်နီယယ်ဘာဂေ့စ်၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်လိုလားသူများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောမည်သူမဆိုကိုအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်အသရေဖျက်ရန်တွစ်တာအကောင့်တွင်ပူးပေါင်းကြသည်။
2019 ၏Aprilပြီလတွင် Prause နှင့် Daniel Burgess တို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သောဆိုက် (“ RealYourBrainOnPorn”) နှင့်၎င်းနှင့်အတူလိုက်ပါပါလာသည် တွစ်တာအကောင့်။ RealYBOP သည်အဓိကအားဖြင့်အစီအစဉ်ကို ဦး ဆောင်သည့်စုပေါင်းအဖွဲ့အနေဖြင့်ပွင့်လင်းစွာလုပ်ဆောင်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သည်။RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက")
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်လူသိများသော RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူ” သုံး ဦး သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောဒေးဗစ်လိုင်၊ Justin Lehmiller နှင့် Chris Donaghue တို့နှင့်ပွင့်လင်းစွာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံး 2019 အပေါ်ဖြစ်ကြသည် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ထောငျခါ၏ လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဗြောင်ကျကျဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများတွင်, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် SHA များမှာ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်! မြင် "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns။ "အ xHamster / SHA မိန်းမပျိုခရီး၌တည်၏ Ley xHamster ဖောက်သည်ကိုပြောပြမယ့် အဘယ်အရာကို "ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအမှန်တကယ် porn, camming နှင့်လိင်အကြောင်းကိုပြောပါ":
Ley xHamster ဖောက်သည်ကြောင်းပြောပြလိမ့်မယ် (70 ခန့်) အစဉ်အဆက်ယောက်ျားအပေါ်ထုတ်ဝေတိုင်းလေ့လာမှု ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စပ်လျဉ်းကျေနပ်မှုမှလင့်များပိုပြီး porn အသုံးပြုမှု? Ley သမျှသောသူတို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ် 55 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ porn သုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲမူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံတင်ပြ? သူက porn အသုံးပြုသူ% 50 သူ၏ပရိသတ်ကိုအသိပေးပါလိမ့်မယ် သူတို့ယခင်ကစိတ်မဝင်စားသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တွေ့ရှိခဲ့ပစ္စည်းမှမြင့်တက်အစီရင်ခံစာ? တစ်နည်းနည်းနဲ့ငါသံသယ သူတို့ရဲ့မြှင့်တင်ရေးတွစ်တာမှာဆိုရင် SHA ဦး နှောက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကအသုံးပြုသူရဲ့“ porn စိုးရိမ်စိတ်” နဲ့“ ရှက်စရာ” တွေကိုသက်သာအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ် (Ley နဲ့အခြား SHA“ ကျွမ်းကျင်သူများ” ဟာ ဦး နှောက်ကိုကျွမ်းကျင်သူတွေအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကွာဝေးနေပြီ) ။
David Ley ၏နောက်ထပ်ဟောပြောချက်ဖြစ်သော No-NutNovember (အမှန်တကယ်ပစ်မှတ်မှာ Nofap) ဖြစ်ပြီး RealYBOP မှရာထူးတိုးခဲ့သည်။
RealYBOP (Nicole Prause alias) ကို Stripchat မှမည်ကဲ့သို့မှတ်သားသည်ကိုကြည့်ပါ။ ဤနေရာတွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ၊
ရိုးရိုးလေးပြောရရင် Prause / Burgess ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကိုညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုမရှိဘူး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုပြuseနာမရှိစေတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလျော်ကြေးငွေပေးတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။ Prause ၏ alias ကိုအကောင့် (RealYBOP) သည် David Ley ၏ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်ချက်တင်များကိုအားပေးသည်။
Prause ၏တရားဝင် Twitter အကောင့်မှတွစ်တာများသို့
Prause porn အဆိုတော်အပေါ်ရှုံးသောအခါသုတေသနတိုက်ခိုက်ခြင်းသူမ၏ tweet ထဲမှာ FSC Tags:
သူမသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ပံ့ရန်သုတေသနပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း ACLU သို့အကြောင်းကြားသည်
ဒီ tweet အတူကတက်အောက်ပါအတိုင်း:
porn ထုတ်လုပ်သူများက Tweet လုပ်ခဲ့ခဲ့သောတစ်ဦး XBIZ ဆောင်းပါး (Retweeting @MOXXX)
tweets Prause tags များ @XBIZ တစ်စီးရီးအတွက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းအတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်), သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်များမှသူမ၏ထောက်ခံမှုချေး:
Prause ၏နိဂုံးကိုကျင်းပနေ, XBIZ retweets အဆိုပါပန်းရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ (သောညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမုန်းခဲ့ပါတယ်):
နောက်တကြိမ်, Prause သူတို့ရဲ့ဆင်ခြေအားကောင်းရန် porn အဆိုတော်များ၏ချည်ဝင်သော:
Prause porn အဆိုတော်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ဒဏ်ရာသတင်းပို့လေ့လာမှုများတိုက်ခိုက်ခြင်း tweet:
နောက်တကြိမ် FSC retweeting, နှင့်ရောနှောသူမကိုလှည့်ဖျားချေး။ ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, Prause အငြင်းပွားမှုကိုမဆိုသိပ္ပံသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စဉ် disreputable ဖြစ်ပါသည် အကြီးအကျယ်ဝေဖန်သုတေသန ကကျွမ်းကျင်သူသက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်ဆန့်ကျင်လျှင်ပင်တာတော့သေချာတယ်ဖြစ်ပါသည်:
တစ်ဦး FSC blog post: Retweeting သူ FSC အသနားခံစာလက်မှတ်ရေးထိုးဘယ်လို crowing:
အဲရစ်သည်ပေါလု Leue အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါသည်
ဒီနှင့်အတူလက်ချင်းတွဲသွားသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာဤ Quora မေးခွန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ Prause ၏မူလအဖြေကိုဖော်ပြထားသည်။ အဘယ်သို့ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် porn စွဲကျော်လွှားနိုင်မလဲ? အကောင်းဆုံးကိုနည်းလမ်းများဘာတွေလဲ? ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ထံလည်ပတ်ရန် Prause ၏အကြံပြုချက်သည်နောက်ဆုံးစာပိုဒ်ဖြစ်သည်။
ကယ်လ်ဖိုးနီးယားလိုင်စင်ရစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး သည်ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး ထံသွားရန်လူနာအားအကြံပေးရန်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်အတိုင်း ချီးမွမ်းမှုကို Hilton အသရေဖျက်မှုတွင်လိမ်ခဲ့သည် သူမကအထက်ပါ posted ဘယ်တော့မှကြောင်းဝတ်စုံ။
Dallas မြို့ကသူတို့စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုငြင်းပယ်အကြောင်းကိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သူ Prause Re-tweeting AVN:
ဒီ tweet ခုနှစ်, Prause porn အဆိုတော်နှင့် ပတ်သက်. ဒေတာစုဆောင်းရန်ကြိုးစားနေသည်သူတစ်ဦး grad ကျောင်းသားတိုက်ခိုက်:
AVN သတင်း Retweeting:
ထပ်မံ၍ အနုပညာရှင်များအနေဖြင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်ဟူသောညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏အခိုင်အမာထောက်ခံမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက်အလွန်သေးငယ်သောနမူနာတစ်ခုနှင့်အတူပြင်ပလေ့လာမှုတစ်ခုကို ကိုးကား၍ -
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းမ sexism ရှိကွောငျးကမ်ဘာပြောနေ, porn စက်မှုလုပ်ငန်းဝါဒဖြန့် Retweeting:
Prause ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးဆိုက်ဘာ-နောက်ယောင်ခံခြင်းနှင့်အလက်ဇန်းဒါး Rhodes နှင့် Nofap ၏အသရေဖျက်မှုကိုဆက်လက်။ ပုံ Prause ရဲ့စျေးကြီးတဲ့ PR စနစ်ကုမ္ပဏီတခုနှင့်မီဒီယာဆိုင်များတွင်၏မေးမြန်းမှု bombardments (Lauren Vinopal ကရေးသား) Fatherly.com ထုတ်ဝေသောသေးသည်အခြားထိခိုက်အပိုင်းအစအတွက်ရလဒ်။ အဆိုပါ "သတင်းစာဆရာ" ကမ္ဘာ့ Nofap.com, reddit / nofap မှဆက်စပ်အရာအားလုံးကိုအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေယောက်ျားအဖြစ်သူမ၏ကိုးကား, Prause ရဲ့တွစ်တာဟာ Thread copy နဲ့ paste ထက်အနည်းငယ်သာ သာ. ပြု၏။ ပထမဦးစွာကဒီမှာ (ဟမ်?) စာနယ်ဇင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး "porn ဖြတ်ဖက်ဆစ်ဝါဒကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်" ဒီတူညီတဲ့အတွက်ယခင်ကလက်ခံ drivel ကိုထင်ဟပ်ထားတဲ့ unprovoked tweets များ၏တရစပ်, ပါပဲ။ Prause ရဲ့ ပထမဦးဆုံးအ tweet Nofap smearing အဆိုပါ Xhamster ချည်ပေါ်သည်။ Prause မဟုတ်မမှန် Rhodes Vice တည်ထောင်သူ Gavin McGinnes "နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့က" ဤသို့ဆို၏
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Rhodes သည်“ Proud Boys” မတိုင်မီက McGinnes မှတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ (McInnes လူသိရှင်ကြား Proud Boys ကနေသူ့ကိုယ်သူကွာရှင်းထားပြီးကတည်းက။ ) မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဖြစ် အလက်ဇန်းဒါး Rhodes Twitter ပေါ်တွင်ကရှင်းပြခဲ့သည်, အင်တာဗျူး၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်ဝေးသူနှင့်အခြားသူများ McGinnes ရိုးရှင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်သိတယ်အဖြစ် Vice Media ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ။ သို့မဟုတ် Proud Boys - Rhodes McGinnes နှင့်အတူရာထူးတိုးသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Prause အထက်ပါ tweet နှင့်အတူ Xhamster ရဲ့ချည်မျှင်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဒီသူမတစ်ဦးညစ်ညမ်း-ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ် (နောက်တဖန်) တိုက်ခိုက်ရန်အဓိက porn site ကို "နဲ့အလုပ်လုပ်နေ" ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုပါသလား? Xhamster သောကမ္ဘာသို့တိုင်ကြားပြီးနောက်ဤသည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် NoNut နိုဝင်ဘာလက၎င်း၏အောက်ခြေလိုင်းထိခိုက်ခဲ့သည်:
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးရဲ့ ဒုတိယ Prause tweet သူမကသူမ၏အဆိပ်သတင်းမှားပိုမိုပြန့်နှံ့ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ကို Message သူမ၏မှ Xhamster ပြောထားသည်ရှိရာ Xhamster ချည်အတွက်:
FBI က Prause FBI ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တင်သွင်းကြသူမ၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလဲလျောင်းလျက်ရှိသည်အတည်ပြု: နိုဝင်ဘာလ 2018: FBI ကအသေရေဖျက်တောင်းဆိုမှုများပတျဝနျးကငျြနီကိုးလ် Prause ရဲ့လိမ်လည်မှုခိုင်မာသွား။ သူမဂယ်ရီ Wilson ကကိုယ်ထိလက်ရောက်သူမ၏သွားရမည်ပြောပါတယ်သည့်အခါ Prause လည်းမုသာစကားကိုဖြစ်ပါတယ်: Los Angeles မြို့ရဲဌာနနှင့် UCLA ရဲ့ကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့ Prause ဂယ်ရီ Wilson ကအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာများဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြုပါ။
ဘာ is စစ်မှန်တဲ့? နီကိုးလ် Prause Nofap အဲလက်စ် Rhodes နှင့်ဂယ်ရီ Wilson ကအကြောင်းကိုအမှားကိုအမှန်ပြန့်နှံ့ဖို့ Xhamster "နဲ့အလုပ်လုပ်နေ" ခံရဖို့ပုံရသည်။
ထိုနေ့တွင် Prause ပြန်လုပ်ပါ တစ်ဦးအပေါ်သူမ၏မုသာစကား စာရာသည် Manavis အဆိုပါ Manavis ဆောင်းပါး, Nofap တိုက်ခိုက်ခြင်း Xhamster supporting နှင့် Prause ယခင်3ရက်သတ္တပတ် Tweet လုပ်ခဲ့ထားပြီးအရာအားလုံးကို parroting မြှင့်တင်ရန်ချည်:
ဒါဟာသူမထိခိုက်အပိုင်းအစနီးကပ်စွာ Prause ပြောနေတာအချက်များကိုထင်ဟပ်နှင့် Manavis မှတ်ချက်ပေးရန်အလက်ဇန္ဒား Rhodes သို့ဆက်သွယ်ဘူးကြောင်းကိုစာရာ Manavis တစ်နည်းနည်းနဲ့ကျပန်း xHamster တွစ်တာချည်အကြောင်းကိုသိအလွန်အမင်းသံသယဖြစ်ဖွယ်ပါပဲ။ Prause နောက်ကွယ်မှ Sara Manavis "နဲ့အလုပ်လုပ်" ခဲ့သလား
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ Prause ကျီးကန်း အဆိုပါ Fatherly.com အပိုင်းအစအကြောင်းကိုသူမနှင့်အတူကူညီပေးခဲ့သည်:
ထို့ကြောင့် Fatherly.com ဆောင်းပါးသည် Ley & Prause ၏ဆောင်းပါးများအပေါ်တွင်မူတည်သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဖက်ဆစ်အဖြစ်ဆောင်းပါးတံဆိပ်ကပ် porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်, စာရာသည် Manavis ရဲ့ hit-piece အများနှင့်အပေါငျးတို့သ Prause tweets နှင့် စိတ်ပညာယနေ့တွင် မှတ်ချက်များ။ အဆိုပါ Fatherly.com hit-piece အစေတနာစိတ် Nofap.com နှင့်ညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့သူယောက်ျားအပေါ်ကမ္ဘာ့ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် Prause ကိုးကား:
“ No Nut November ဆိုတာသိပ္ပံပညာဆန့်ကျင်တဲ့အရာလို့ထင်တယ်” ဟု psychophysiologist နှင့် neuroscientist Nicole Prause က Fatherly သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီသစ်ကို, ထိုသို့အစဉ်အလာခဲခဲ, အမြတ်အစွန်းများကအများဆုံးထောက်ခံပုံပေါ်ပါတယ် NoFap ကုမ္ပဏီ, အချို့သောဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့် Proud Boys များကဲ့သို့အုပ်စုများ။ ဤရွေ့ကားအကြီးအကျယ်သူတို့ရဲ့အလွန်ငယ်ရွယ်အထီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် misogyny လူသိများကြပါတယ်။ "
NoFap.com NoNutNovember နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့နဲ့ဖြတ် porn နှင့် misogyny အကြား link တစ်ခုအရာကိုအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ရှိပါတယ်ရဲ့မလုပ်ပဲအဖြစ်ကိုပိုမိုမုသာစကား သုတေသနပြပွဲ နှင့် အဆိုပါဖိုရမ်အစီရင်ခံစာအပေါ်အဘယ်အရာကိုယောက်ျား.
ရမှာဖြစ်ပါတယ် Prause မှ up ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဒါဟာ၏အကူအညီနှင့်အတူပုံ သူမ၏ PR စနစ်ကုမ္ပဏီတခုနှင့်ပုံ Xhamster, သူမ၏မဆုပ်မနစ်အလုပ်ကိုပယ်ပေးဆောင်။ ဒါဟာအားလုံး L ကိုနဲ့စတင်ey ရဲ့ (နှင့်သူမ၏) ရောင်ရမ်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ်... နောက်ဆုံးမှာတော့တစ်ဝါဒဖြန့် meme သို့မှို "ငယ် ol '' porn စက်မှုလုပ်ငန်းမရှိတော့ porn စောင့်ကြည့်သူကိုဘေးဥပဒ်ကို younguns ၏သားကောင်ဖြစ်၏။ " ဝမ်းနည်းစရာ, ဒီလုပ်ကြံ meme ယခုဆငျမခွကိုမထီမဲ့မြင်မပြုနိုင်နေသောတာဝန်မဲ့ "ဂျာနယ်လစ်" ကတက် pumped ထားပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်များ, ဘုံအသိနှင့် သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများ.
Prause PornHub အားဖြင့် tagged ။ အလွန်ရဲ့ buddy-ရဲ့ buddy convo:
Prause တရားစွဲမှုမှ porn ထုတ်လုပ်သူများဖွင့်လှစ်မယ့်အဆိုပြု Utah ဥပဒေကြမ်းဆန့်ကျင်, porn ထုတ်လုပ်သူများ၏ဘေးထွက်အပေါ်သက်သေခံရန်ကမ်းလှမ်း:
မှတ်ချက်: တစ်ခုမှာငွေကြေးထောက်ပံ့ (သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းအတွက်ထောက်ခံ) (ထိုကဲ့သို့သော Lab ထဲမှာစောင့်ကြည့်ခံနေရစဉ်လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆန္ဒရှိဘာသာရပ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ကဲ့သို့) သုတေသနတိုက်ရိုက်ရန်ပုံငွေမပါဘဲနိုင်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏အစီအစဉ်ကိုထပ်မံထောက်ပံ့ခြင်း၊ Prause ပြောပါတယ် သြဂုတ်လအမ်မစ်၏စိတ်ဓာတ်ကျမှုသည်သူမအလုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ (မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်) ။ ဘာကြောင့် Prause ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်လုပ်ရေးကိုခုခံတွန်းလှန်ရတာလည်းမဖြစ်မနေမဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
Prause ကသူမသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆိုတော်များအား“ သင့်တော်သောလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသူ” များကိုရှာဖွေရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် (porn တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကပိုမိုဆိုးရွားသည့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုဘယ်တော့မှမပြောသော code) ။ Prause သည်ဖျော်ဖြေသူများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ပြinနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည့်မည်သည့်ကုထုံးပညာရှင်ကိုမဆိုပြောကြားရန်သတိပေးသည်။
နက်ဖြန်နေ့၌ Prause ဆက်လက် အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကိုထောကျပံ့ ဒီတူညီတဲ့ချည်အပေါ်:
အဆိုပါ နောက်ကျောနှင့်ထွက်ဆက်လက်, Prause (အဘယ်ကြောင့်သူမကဒီကြေညာဖို့မဖြစ်မနေခံစားရခဲ့ဘူး?) သူမညစ်ညမ်းကနေသုညပိုက်ဆံလက်ခံရရှိဟုဆိုကာနှင့်အတူ:
ချီးမွမ်းပြောဆိုချက်သည်အနတ္တဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုအတော်များများကညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များအကြားဆက်စပ်မှုများကိုအကဲဖြတ်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ခဲထိုကဲ့သို့သောဆက်စပ်မှုကိုရှာပါ။ သာဓကအားဖြင့်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုသည်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု: 75 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်.
Prause ဂယ်ရီ Wilson ကနှင့်အလက်ဇန်းဒါး Rhodes ရှုတ်ချတဲ့ twitter ချည်ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်း (ဒီကအရမ်းစာမျက်နှာ link တစ်ခုနှင့်အတူတုံ့ပြန်နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်?)နှင့် Prause နှင့်သူမ၏ porn-ကြယ်ပွင့်သူငယ်ချင်းများတဲ့စခရင်ပုံ Tweet လုပ်ခဲ့။ Prause အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောအမည်များနှင့်အတူသူမ၏အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးဟာကွာရှင်းပြဖို့ disingenuous gibberish နှင့်အတူတုံ့ပြန်:
အဆိုတော်များအပါအ ၀ င်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်း၏ရှုထောင့်အားချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းသည်ဘယ်တော့မှမလေ့လာခဲ့ပါ။ ဝါဒဖြန့်ခြင်း
Prause ရဲ့ Quora မှတ်ချက်များ၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းနောက်ဆုံးမှာ Prause Wilson ကနှောင့်ယှက်ဘို့ပိတ်ပင်ထားခံခဲ့ရသည် (ဂယ်ရီ Wilson ကအပေါ်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရ: မတ်လ 5, 2018 - Prause အပြီးအပိုင်ဂယ်ရီ Wilson ကနှောင့်ယှက်ဘို့ Quora ကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်) ။ ဒီ Quora ခုနှစ်တွင်သူမညစ်ညမ်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူလျှင်အဖြစ် Prause တုံ့ပြန်ဖြေဆို:
သူမသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းတခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူလျှင်အဖြစ်ဤတွင်သူမနောက်တဖန်ဖွကွေား။ Prause ရဲ့ဝါဒဖြန့်ကြောင်း porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆင်းရဲသောသူတို့သည်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်များစွာသော "နှောင့်ယှက်" သူမ၏သုတေသန porn စက်မှုလုပ်ငန်းများကငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်ဆို:
Prause သူမသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းများကငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်ဟုအဘယ်သူကိုမျှမဆိုစာရွက်စာတမ်းများပေးအပ်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ သူမ၏ချို့ယွင်းချက်လေ့လာမှုများနှင့်သူတို့အကြောင်းကိုသူမ၏မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ၏ 14 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုရှိပါတယ်အဖြစ်သူမ၏သိပ္ပံစိန်ခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသောပြောဆိုချက်ကိုရယ်စရာကောင်းသောဖြစ်ပါသည်: မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး။
အထက်ပါဥပမာတွင်ထည့်ရန်, ဆိုရှယ်မီဒီယာတိုက်ခိုက်မှုရာပေါင်းများစွာ (အများအပြားနောက်ထပ်ဥပမာ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဒ်မ3အတွက်) နှင့်မဆိုသုတေသီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း porn အသုံးပြုမှုကြယ်သက်ရောက်မှုထက်လျော့နည်းသတင်းပို့သို့မဟုတ် porn အတွက်ဖျော်ဖြေ၏မြင်ကွင်းများနှောင့်ယှက်နောက်ကွယ်မှ။ 2,000 သို့မဟုတ် (ကတည်းကဖျက်ပစ်ခဲ့ကြပါဆုံးအရာ၏) ပိုပြီးဆင်တူ tweets ၏အနည်းငယ်ဥပမာ:
ဒဏ်ဍာရီ။ porn အစီရင်ခံစာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအပေါ်တရားဝင်လေ့လာမှုများ၏ကျယ်ပြန့်သဘောအရဆိုလျှင်: https://www.yourbrainonporn.com/research/
ပိုပြီးဒါခေါ်သာတူညီမျှအမြင်များအစီရင်ခံကြောင်း Prause ကိုးကားနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုပုံလိုချင်သောရလာဒ်များထုတ်လုပ်ရန်အလုပ်အချို့အလွန်ဖန်တီးမှုနည်းစနစ်နဲ့တေလာ Kohut လေ့လာမှုသည်: "အမြိုးသမီးမြားမှအမုန်းတရား Making" babyish အကြောင်းကိုတကယ် Is "၏ဝေဖန်မှု? ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများတစ်ကိုယ်စားလှယ်အမေရိကန်နမူနာ "(2016) တွင် Nonusers သန်းနောက်ထပ်ကျားသာတူညီမျှသဘောထားများကိုကိုင်ထားပါ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ Kohut ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဘာသာရပ်အပေါ်နီးပါးသည်အခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများကဆန့်ကျင်ကြသည် (ကြည့်ရှု ကျော် 35 သဘောထားတွေလိင်အရအခွင့်အရေးမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများ, objectification နှင့်လျော့နည်း၏ဤစာရင်း သာတူညီမျှ). စာပေ၏ဤ 2016 ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုပါ: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015.
RealYBOP အသုံးပြုသူများအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်မလုပ်ပဲလာသောအခါအဘယ်ကြောင့် RealYBOP နာတာရှည်, အညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ထောက်ခံမှုအတွက် tweets ရေးသားရသနည်း
အဖြေသိသာသည်။ RealYBOP Prause ဖွယ်ရှိသည်။
သူမညစ်ညမ်းတဲ့ပန်ကာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ RealYBOP New York Times ကို OBGYN Jen Gunter trolling ။ တို့ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှ RealYBOP လင့်များ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်းန်ထမ်း Lotus အိပျ။ အခါတိုင်းတတ်နိုင်သမျှ porn စက်မှုလုပ်ငန်းထွက်ကူညီပေးနေ:
RealYBOP ကဒီမှာ debunked နေကြတယ် "အများစုကကြည့်ရှုလည်းတိုးတက်လာသောခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုတွေ့ကြုံခံစား" အဲဒီမလုပ်ပဲ: ခန္ဓာကိုယ် Image ကိုပုဒ်မ။
porn စက်မှုလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့နေစဉ် Prause & Ley သည် Gottman's ကိုရှုတ်ချသည်
အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး Prause နှင့် Daniel Burgess ၏တရားဝင်အကြံပေးချက် ကာကွယ်ရေးအဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သူဝိန်းခ Giampietro ဖြစ်ပါတယ် backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည် (USA Today ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ) Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်) ။ စွဲချက်တင်မှုကဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြည့်တန်ဆာပြစ်မှုများကိုသိသိသာသာလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် backpage ပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားသူများအားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကလူကုန်ကူးခံရသူအချို့သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများပါ ၀ င်သည်ဟုပြောဆိုကြသည်။ Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. ဖြစ်ရပ်များ၏ထူးဆန်းအလှည့်၌, backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
ညစ်ညမ်းသောသရုပ်ဆောင်ဂျွန်ဟမ်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေတစ် ဦး ၏ပြန်လည်တင်ပို့ချက်အပေါ်မှတ်ချက်များ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်သူ၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဖွင့်ဟခဲ့သည်.
RealYBOP သည်ဤညစ်ညမ်းစတူဒီယိုရုပ်ရှင်များကို https://twitter.com/adulttimecom တွင်မြှင့်တင်ပေးသည်
ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုတိုက်ရိုက်မြှင့်တင်ခြင်း - လူသိများသော porn ကြယ်ပွင့်နှင့်ဒါရိုက်တာ Tommy Pistol နှင့်အတူပြည့်နှက်နေသည်
XYBY မှ RealYBOP retweeting ဆောင်းပါး (ဆိုလိုသည်မှာဝါဒဖြန့်ခြင်း) (RealYBOP / Prause ကလူတိုင်းကိုဆန့်ကျင်သောအစွန်းရောက်အစွန်းရောက်များဟုခေါ်ဆိုသည်ကိုသတိပြုပါ):
RealYBOP (alias) - ယခင်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်ဟောင်းကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှု၊
အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး Prause နှင့် Daniel Burgess ၏တရားဝင်အကြံပေးချက် ကာကွယ်ရေးအဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သူဝိန်းခ Giampietro ဖြစ်ပါတယ် backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည် (USA Today ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ) Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်) ။ သူမသည်ဆက်လက် သူမ၏ရှေ့နေဟောင်း client ကိုခုခံကာကွယ် (BackPage.com):
လူတွေဟာ Pornhub ကိုပိတ်ပြီး၎င်းရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိများကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အသနားခံစာကိုစတင်ရန်ကျွန်တော့်ကိုတောင်းဆိုနေကြတယ်။ ဒီမှာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးမျှဝေပါ https://t.co/llzoBsr1Jd
- Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020
လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုကိုမနှစ်သက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဖယ်ရှားရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် Pornhub ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှလူအများအားဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူကိုအကြီးတန်းဗီဒီယိုကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Pornhub အားဝေဖန်မှုများဖြစ်သည်။@RepSpeier၎င်းအပြင်၊ သင်ပိုမိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ https://t.co/60vKLhArpv
- Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) မတ်လ 11, 2020
RealYBOP နှင့်အဖွဲ့ ၀ င်များသည် PornHub ကိုထောက်ပံ့ရန်တွစ်တာသို့သွားခဲ့သည်။ ပထမအနေဖြင့် RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောအပြုအမူမျိုးမဟုတ်ဟုပြောရန် (တင်လိုက်သောတွစ်တာသည်လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်သော) ဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ကားများသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ လိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းအမြောက်အများကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်။ ရှင်းလင်းသောနှုတ်ဖြင့်သဘောတူညီမှုသည်သဘာဝမဟုတ်၊ အမျိုးသမီးများမှာသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများမှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလက်ခံခြင်းသည်မည်သည့်အရာမျှလုပ်ခြင်းဖြင့်သဘောတူနိုင်သည်။ ကြည့်ရှုသူများအနေဖြင့်ဤ scripts များကိုဝယ်ယူခြင်း၊ activate လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျင့်သုံးခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်သည်။ လိင်ပညာရေးအစီအစဉ်များသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ခွင့်ပြုချက်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုမည်သို့ပုံစံပြုသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေဆိုင်ရာစာတတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းသင်ကြားပေးခြင်းအားဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်သည်။
RealYBOP ကဆက်ပြီး။ Laila ၏အားထုတ်မှုကိုတုန့်ပြန်သောအနေဖြင့် RealYBOP သည် Tracy Clark-Flory ၏အပိုင်းအစတစ်ခုကိုတွစ်တာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ဗီဒီယိုများကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းများကိုဘာကြောင့် Pornhub နည်းနည်း ol 'Porn Hub နှင့် RealYBOP သည်အဘယ်ကြောင့်သက်ဆိုင်သနည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ RealYBOP က အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် shill ။ PornHub သည်အမှန်တကယ် misogyny နှင့်ပတ်သက်သည်မဟုတ်ပါ RealYBOP မှဖွင့်ဟပြောဆိုသောလုပ်ကြံမှားသောအမှားများကိုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်.
မတ်လ ၁၀ ရက် - အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါမှဥပဒေပြုသူများက Pornhub အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုသည်
မနေ့ကကနေဒါနှင့်အမေရိကန်မှလွှတ်တော်အမတ်များနှင့်လွှတ်တော်အမတ်များသည်၎င်းတို့၏အစိုးရများသို့ MindGeek & အကြောင်းရေးသားခဲ့သည် #ကလေးသူငယ်ရှာဖွေမှု, #လူကုန်ကူးမှု, & လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု။ ၎င်းသည်နယ်စပ်နှင့်ပါတီများအကြားဤအရေးတကြီးသဘောထားကိုထင်ဟပ်သည်။ pic.twitter.com/n1giZ5F3Lr
- Arnold Viersen၊ အမတ် (@ArnoldViersen) မတ်လ 10, 2020
PornHubs ကာကွယ်ရေးကိုဘယ်သူလာတာလဲ။ RealYBOP twitter နှင့် RealYBOP အသင်းဝင်များ! ပထမ၊ RealYBOP အသင်းဝင်နှင့် Prause ၏မဟာမိတ်ဖြစ်သော David Ley သည် PornHub ကိုကာကွယ်သည်။ မုန့် buttered သည်အဘယ်မှာရှိသိတယ်)
RealYBOP သည်နောက်ထပ် David Ley tweet ကို Pornhub ကိုထောက်ခံသည်။
RealYBOP မှ Pornhub အတွက် RealYBOP အသင်းဝင်တေလာ Kohut ၏ထောက်ခံမှုကိုတွစ်တာ:
ဤတွင် Kohut အားဖြင့်အချို့ကျောက်မျက်ဖြစ်ကြသည် အဆိုပါ CBC ဆောင်းပါးကနေ:
ဒီရက်စက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုမိမိကိုယ်ကိုလိုလိုလားလားဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမရှိဘူးလို့မယုံဘူး” ဟု Walker ကဆိုသည်။
လူကုန်ကူးခြင်း၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိကြောင်းအစိုးရအားအစိုးရမှပြောကြားလိုသည်။ သူတို့အားလုံးအတူတူပဲ”
အနောက်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာဌာနမှသုတေသနတွဲဖက်တေလာကိုဟွတ်က“ အလွန်ရယ်စရာကောင်းသည်” ဟုဆိုသည်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ဆိုးသွမ်းမှုသို့မဟုတ်ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်း၊ အဲဒါကအမျိုးသမီးဆန့်ကျင်ရေးသဘောထားတွေနဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူး” ဟုသူကရှင်းပြသည်။
အကယ်၍ အမှန်တကယ်ရည်မှန်းချက်မှာအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များလူကုန်ကူးမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီးမှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ပြalternativeနာကိုဖြေရှင်းရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများရှိသည်။
သူ့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးဆန့်ကျင်ရေးရလဒ်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း Kohut မှအချို့သောဆက်စပ်မှုများကအခြားသူများမှအစီရင်ခံသည်ဟုဆိုသည်
“ ဒီနယ်ပယ်မှာနည်းစနစ်ကျဉ်းကျပ်မှုမရှိခြင်းနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှအတည်ပြုချက်ဘက်လိုက်မှုဖြစ်စေသည့်ထင်ရှားသောနိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုများရှိနိုင်ပါတယ်” ဟုသူကရှင်းပြသည်။
“ အားလုံးကိုအတူတကွထားခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့သက်သေအထောက်အထားမရှိပါဘူး။ ရရှိနိုင်တဲ့အထောက်အထားကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအဲဒါကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာပဲ။ ”
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတရားမ ၀ င်ပိတ်ပင်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည်လက်တွေ့မကျဘဲကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်ဟုသူကအကြံပြုခဲ့သည်။
သူက Pornhub ၏ရုန်းကန်မှုကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်သတင်းမှားအတုများဖြန့်ဝေမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
Kohut သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထားများနှင့် ပတ်သတ်၍ မှားယွင်းသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း RealYBOP အသင်း ၀ င် တေလာ Kohut ရဲ့စက္ကူ လိုချင်သောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုအချို့အလွန်ဖန်တီးမှုနည်းစနစ်ပါရှိသည်။ တကယ်တော့ Kohut ၏တွေ့ရှိချက်များကိုအခြားထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုအားလုံးနီးပါးကဆန့်ကျင်နေသည်။ စာပေ၏ဤ 2016 သုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015. အဆိုပါစိတ္တဇ:
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး - RealYBOP နှင့် ၄ င်း၏“ကျွမ်းကျင်သူများက"၏ဘေးထွက်ယူပြီးနေကြသည် လိင် - လူကုန်ကူးခံရသူများအပေါ် Pornhub။ RealYBOP ၏သစ္စာရှိမှုမှာသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိ - ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
RealYBOP သည် Cry Cry ကိုတိုက်ခိုက်သည်။ Propaganda 101 - မင်းရဲ့ရာထူးကိုခုခံကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုရင်၊ တမန်ကိုရှုတ်ချလိုက်ပါ။ RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို“ မုန်းတီးမှုအုပ်စုများ” ဟုခေါ်ဆိုကာလိင်လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ဗီဒီယိုများကိုခွင့်ပြုသည့် Pornhub ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အလေ့အကျင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
Prause သည်ယခင်က Exodus Cry နှင့် Laila Mickelwait ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2019: Prause မဟုတ်မမှန်လိမ်လည်မှုထှကျမွောကျရာ Cry စွပ်စွဲပါတယ်။ CEO ဖြစ်သူရဲ့ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန်တွေ့မြင်, (spurious အကြောင်းပြချက်များအတွက်) သည်မစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်မှ non-အမြတ်အစီရင်ခံရန် Twitter ကိုနောက်လိုက်မေးတယ်.
pornhub ကိုထောက်ပံ့သော RealYBOP ဝါဒဖြန့်မှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိသည်
“ YouPorn” porn site ကိုထောက်ပံ့သောတွစ်တာတစ်ခု -
PornHub ဖြစ်နေစဉ် လိင်လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ဗီဒီယိုများရှိသည်ဟုဖော်ထုတ်ခံရခြင်း, RealYBOP သည် MindGeek ကိုကာကွယ်လျက်ရှိပါသည်။
မတ်လ 25, 2020: NoFap ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒုတိယ tweet ။ ဒီတစ်ခုမှာ XBIZ ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များပါ ၀ င်သည် (RealYBOP ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နီးကပ်သည့်မဟာမိတ်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံဖော်ပြသည်) ။ XBIZ ဆောင်းပါး RealYBOP မတိုင်မီနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် National Review နှင့် NoFap ကို twitter ပေါ်တွင်ရှုတ်ချခြင်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုလား။ RealYBOP သည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားသည့် XBIZ နှင့်မည်သို့ပတ်သက်ခဲ့သနည်း။ စိတ်ကိုမေးမြန်းသိလိုကြသည်။
အကြောင်း Tweeting Las Vegas မှာ AVN စည်းဝေးကြီး
ရက်ရာဇာ XBIZ ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့် hit-piece
XBIZ ဆောင်းပါးသည် theguardian.org ကိုရှုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းနေသောရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် XBIZ ကဖော်ပြရန်လျစ်လျူရှုထားတာကဆိုးဝါးတဲ့အရာဖြစ်သည် theguardian.org Humanity United မှပံ့ပိုးသည်သာမက Open Society Foundation မှလွဲ၍ အခြားကစားသမားများလည်းပါ ၀ င်သည်။ စက်ရုံရှိမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းသည် OSF / Soros ထက်စီးပွားဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲ။ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးဟာကဒ်ပြားတစ်ခုပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာပါ။
ဖြစ်ခဲ့သော pornhub, မြှင့်တင် မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကို၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ငွေရှာသည်:
Pornhub သည် RealYBOP အကြောင်းပထမဆုံးတွစ်တာရေးသားခဲ့သည်!
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံနေရသည့်တိုင် Pornhub ကိုမြှင့်တင်ခြင်း ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုနှင့်မုဒိမ်းမှုဗွီဒီယိုများကိုပုံမှန်လက်ခံသည်! အစဉ်အမြဲသစ္စာစောင့်သိ RealYBOP ။
Pornhub ကိုဝေဖန်သောအမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားမှုကို RealYBOP ကပြုလုပ်သည် လိင်လူကုန်ကူးမှုနှင့်အမှန်တကယ်အဓမ္မပြုကျင့်မှုဗီဒီယိုများကိုငွေရှာရန်ဖြစ်သည်:
RealYBOP (@BrainOnPorn) သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဝါဒဖြန့်သည့်စာအိတ်ကိုတွန်းအားပေးနေသည် -
ဤ RealYBOP ကဲ့သို့အမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ https://twitter.com/LailaMickelwait/status/1251171998895652867
RealYBOP သည် Mindgeek ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ Pornhub ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် Laila ၏ Real tweet တိုက်ခိုက်သည့်တွစ်တာမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
Pornhub ကိုပိုင်တဲ့ Mindgeek ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကကျွန်တော့်ကိုစလိုက်ပါတယ်။ ငါအကြောင်း Tweet လုပ်ပြီးနောက်သူသည်သူ၏အမည်နှင့်တည်နေရာကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။ #လူကုန်ကူးမှုဗဟို pic.twitter.com/9NhOMMMFxZ
- Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) ဧပြီလ 19, 2020
ဤတွင် RealYBOP သည် Laila ကို တိုက်ခိုက်၍ Mindgeek ၏စီအီးအိုကိုကာကွယ်သည်။ (RealYBOP သည်သူမအကောင့်သည် Mindgeek ၏စီအီးအိုမဟုတ်ဟုဆိုလျှင်တည်ရှိသည်။ကျနော်တို့ကနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများရှိသည်!)
ဧပြီလ 23, 2020: ဝိုး။ NoFap (အသရေဖျက်မှုအတွက် RealYBOP ကိုတရားစွဲသူ) Pornhub ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှု။
သူကပြောတယ် PornHub ကိုသူမကကြီးကြပ်သူတစ်ယောက်လိုရိုက်နှက်တယ်။
XBIZ သတင်းအယ်ဒီတာ Gustavo Turner ရဲ့ XBIZ ရဲ့ဝါဒဖြန့်မှု
PornHub ကိုထောက်ခံသည့်“ လိင်လုပ်သား” ၏ဝါဒဖြန့်မှုကိုတွစ်တာ:
ဟုတ်ပြီ 50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများမှာဖော်ပြထားတဲ့အာရုံကြောတွေ့ရှိချက်များကိုထင်အဖြစ်စွဲမော်ဒယ်များအတွက်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုပေး။
pornhub (အဖြစ် outed လျက်ရှိသည်ရာ) ကိုဆက်လက်ထောက်ခံမှု မြောက်မြားစွာသောကလေးများ၏ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်း):
Prause နှင့် Ley တို့သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းလူအများနှင့်စကားပြောနေကြသည်။ သို့သော် ee သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကို၎င်း၏ဝါဒဖြန့်မှုနှင့် Prause ပုံမှန်ပစ်မှတ်များအားတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဟုအမြဲသံသယရှိသည်။ ဒါ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ XBIZ hit-piece RealYBOP ၏ buddy Gustavo Turner မှ RealYBOP (Prause မှ ဦး ဆောင်သည်) သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းနေသည်ကိုသက်သေပြသည်။ XBIZ ဆောင်းပါးတွင် RealYourBrainOnPorn သည် YBOP နှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မှုများအတွက်၎င်းတို့၏ရင်းမြစ်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ XBIZ က YBOP သည်“ ရန်ပုံငွေရှာခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ စင်ကြယ်သော bullshit, ငါ 10 နှစ်ကြာဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ YBOP ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်ကြော်ငြာဝင်ငွေရရှိသွားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်မှရရှိသောကျွန်ုပ်၏ဝေစုသည်လှူဒါန်းမှုသို့သွားသည်။
XBIZ / RealYBOP ၏အဆိုအရ YBOP သည်“ သိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီသော” ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါ အဓိက YBOP သုတေသနစာမျက်နှာ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောများပြားလှသောဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အဖြစ်မှန်၌၊ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည် RealYBOP သည်သိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီသော“ အဖွဲ့အစည်း” ဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာကို RealYBOP ၏သုတေသနစာမျက်နှာဟုချယ်လှယ်ထားသည့်များမကြာခဏဆီလျှော်သောစာရွက်စာတမ်းများ (များစွာသောလေ့လာမှုများမဟုတ်ပါ)၊
အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ရာ၌ RealYBOP ပါဝင်သည်
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသဖြင့် Pornhub ၏နောက်ဆုံးဝါဒဖြန့်မှုနှင့်မယုံကြည်ပါနှင့် #BlackLivesMatter။ ဒေါက်တာ @GailDines of @CultureReframed ညစ်ညမ်းမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်နေသည်ကို Dr. Carolyn West နှင့်ပြောဆိုသည်။ https://t.co/9SqSIwTel8
- Liz Walker မှ (@LizWpresents) ဇြန္လ 11, 2020
ကျွန်ုပ်၏ tweet တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြယ်ပွင့်ကိုစိတ်ဆိုး
RealYBOP သည် PornHub ၏ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးသည် (ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်လူကုန်ကူးမှုဗွီဒီယိုများကိုလက်ခံသည်):
Jerry Barnett (တစ်ချိန်ကညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သူ) ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုလူတိုင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။
သူမ၏ဆောင်းပါးကိုဤနေရာတွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က.
NB ၏ပုံမှန်ပစ်မှတ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် XBIZ ကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်ခြင်း
Sasse နှင့် Merkley ၏ဥပဒေကြမ်း၏ကျဆင်းခြင်းကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် the အင်တာနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုအက်ဥပဒေကိုရပ်တန့်ပါဗွီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်သူတိုင်းအတွက်သဘောတူညီမှုပုံစံများကိုပလက်ဖောင်းအားလုံးအပေါ်ချမှတ်လိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပါ ၀ င်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ဗွီဒီယိုကူးယူခြင်းကိုတားမြစ်သည်၊ ၂၄ နာရီ hotline ကိုလူများအားဗီဒီယိုဖယ်ရှားခြင်းပြုလုပ်ရန်နှင့်ဗီဒီယိုများအားအလံလွှင့်ထုတ်သူများအားနှစ်နာရီအတွင်းဖယ်ရှားပေးရန်လည်းပြဌာန်းထားသည်။
Podcast တခုတွင် Prause သည် Pornhub အားကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဗီဒီယိုများမှအမြတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းထားသည်။Laila Mickelwait ၏ '' ဖော်ထုတ် ဦး ဆောငျရနျဖြစ်ပါတယ် Pornhub ၏မဆင်မခြင်နှင့်တရားမဝင်အကြောင်းအရာ) ။ Prause သည် Pornhub ကိုချိတ်ဆွဲထားပုံရသည်။ သူမသည် Laila ကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့် Pornhub ကိုကာကွယ်ရန်သူမ၏ RealYBOP alias ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ - RealYourBrainOnPorn (@BrainOnPorn) သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအထူးသဖြင့် Pornhub ကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသည်။
ထို့ကြောင့် hard core porn နှင့်ပြွန်ဆိုဒ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည် (ဘာမျှမဖော်ပြသည်):
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုပြစ်မှုကြောင်းအရအရေးယူခြင်းကိုထောက်ခံသည့် tweets ၂ ခု
လိင်မှုကိစ္စကိုထောက်ပံ့ပေးသောတွစ် ၂ ခုအထူးသဖြင့် camming:
Laila သည်သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုလိမ်ပြောခြင်း Porn သည်ဘာလို့ Pornhub ၏တရားမ ၀ င်သောယုတ်မာသောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သော Kristof ကိုနှောင့်ယှက်သနည်း။
Prause tweets များသည် Pornhub ၏သားကောင်တစ် ဦး ၏ဗီဒီယိုအောက်တွင်ရှိနေခြင်းသည်မည်မျှစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသနည်း။
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ မေ၊ Pornhub ၏ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထောက်ခံမှုဖြင့် Prause ကကူညီသည် XBIZ ပြီးနောက် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း TraffickingHub နှင့် Laila Mickelwait တို့ကိုဆန့်ကျင်။ သူတို့၏ smear ကင်ပိန်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
အခြားအခန်းများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း၊ Prause နှင့်သူမ၏တားမြစ်ထားသော alias (@BrainOnPorn) Laila Mickelwait ၏အယောင်ဆောင်မှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့သည် တရားမ ၀ င်သောတရားမဝင်သောအကြောင်းအရာများအတွက် PornHub အားတာ ၀ န်ယူရန်အသနားခံစာ။ The လြှောကျထားခကျြ လက်မှတ်ပေါင်း ၂ သန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ ဦး ဆောင်သူအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ် နယူးယော့ Times သတင်းစာ TraffickingHub & Laila မှတင်ပြသောပြောဆိုချက်များအားအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆောင်းပါးတစ်ခုထုတ်ဝေရန် The Children of Pornhub - ကနေဒါသည်ဤကုမ္ပဏီအားခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ချေမှုန်းခြင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်အဘယ်ကြောင့်ခွင့်ပြုသနည်း။.
၁၈ လလုံးလုံးချီးမွမ်းပါ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်သူမ၏ @BrainOnPorn alias ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် Mickelwait, Exodus Cry နှင့်အသနားခံစာ။ ပြီးနောက် @BrainOnPorn ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပင်ထားသည် နှောင့်ယှက်မှုအတွက် Prause သည်သူမအမည်ကိုအသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော: Pornhub သည်လူကုန်ကူးခံရသောအမျိုးသမီးများအားဗီဒီယိုများနှင့်လူကုန်ကူးခံရသူအမျိုးသမီးများ၏ဗွီဒီယိုများကိုလက်ခံကျင်းပရန်အတွက် TraffickingHub လှုပ်ရှားမှုကိုအစပြုပြီးနောက် Laila Mickelwait အားအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်အသရေဖျက်ရန် @BrainOnPorn နှင့် @NicoleRPrause ကိုအသုံးပြုသည်။ Prause သည် Laila အားသေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲသည်.
Mickelwait တစ် ဦး op-ed ရေးသားခဲ့သည် သူမနှင့် Exodus Cry ကိုရှုတ်ချရန်နှင့်သူမကိုနှောင့်ယှက်ရန်နှင့်အသရေဖျက်ရန်အတွက်ညှိနှိုင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်။ သူမ၏ဆောင်းပါးမှအနည်းငယ် bits:
အများပြည်သူသိရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းသည်ရေခဲစ့်၏အစသာဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Mindgeek နှင့်၎င်း၏အငှားများသည်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သူများအားအသရေဖျက်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်ရန်နှင့်ခြိမ်းခြောက်ရန်အလွန်မှောင်မိုက်။ လျှို့ဝှက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤကာလအတောအတွင်းကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်မိသားစုသည်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အသရေပျက်ခြင်းနှင့်ခွဲစိတ်ခြင်းခံထားရသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီးအများစုမှာကျွန်ုပ်တို့သည် Mindgeek နှင့်၎င်း၏အတိုင်ပင်ခံများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ရင်းနှီးသောမိသားစုဝင်များသည်သူတို့၏အီးမေးလ်များ၊ ဘဏ်စာရင်းများနှင့်တိမ်တိုက်သိုလှောင်မှုကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ ပုဂ္ဂလိကမိသားစုဓါတ်ပုံများသည်သူတို့ကိုငါကိုယ်တိုင်နှင့်ခြိမ်းခြောက်ရန်ထင်ရှားသောကြိုးပမ်းမှုဖြင့်သူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခဲ့သည်။
Prause သည်လျှို့ဝှက်အများပြည်သူဆိုင်ရာသရုပ်ဖော်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် (Vra's Samantha Cole ကဲ့သို့သောနောက်ခံနောက်ကွယ်မှစာနယ်ဇင်းသမားများကို Prause ကကူညီနေသလား) ။
XBIZ (Gustavo Turner) TraffickingHub ၏အသနားခံစာကိုရှုတ်ထွေးစေရန်အကူအညီတောင်းသည်။ Prause သည်အလုပ်သို့သွားသည်။ အသနားခံလွှာကိုနာမည်နှစ်မျိုးဖြင့်လက်မှတ်ထိုးရန်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် TraffickingHub ၏အသနားခံစာကိုထိုအခြေခံပေါ်တွင်ရှုတ်ချသည်။
XBIZ's Turner ကိုနောက်ထပ် ၂ ခုပြန်ကြားချက်တွင်သူမကလက်မှတ်အတုများကိုဂုဏ်ယူစွာပြသသည်။ သူမ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော၊ လူကုန်ကူးခံရသူများအကြောင်းမှတ်ချက်ပေးပါ။
အခြားအာရုံမခံစားနိုင်သော၊ ဆိုးယုတ်သောတွစ်တာတွင် Prause သည်လက်မှတ် ၂ ခုအတုကိုအသနားခံစာထဲသို့အောင်မြင်စွာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ နှင့် Pornhub သည်ကလေးညစ်ညမ်းလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗွီဒီယိုများကို upload လုပ်ရန်နှင့်ငွေရှာရန်ခွင့်ပြုခြင်း (မကြာခဏပြစ်မှုကျူးလွန်သောဗီဒီယိုများကိုဖယ်ရှားရန်ငြင်းဆန်ခြင်း)!
ထို့နောက် Prause ကထောက်ခံရန်အတွက်လက်မှတ် ၂ ခုအတုတင်ခဲ့သည် ပြည်သူ့ရေးရာဒါရိုက်တာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်းညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (porn interest interest group) Mike Stabile ပါ NCOSE နှင့် TraffickingHub ကိုသူမုန်းတီးခဲ့သည်။ တဖန်သူမသည်အသနားခံစာလက်မှတ် ၂ ခုကို Pornhub ၏တရားမဝင်၊
အလို။ တ ဦး တည်းပါသောဗွီဒီယိုတစ်ခုအောက်တွင် Tweets များကိုချီးမွမ်းပါ Pornhub ရဲ့သားကောင်များ.
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Free Speech Coalition သည် Prause အထောက်အပံ့ကိုပေးခဲ့သည်။ သူမသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျားကန် ၆၀ (ညစ်ညမ်းကွန်ဒုံးများ) ကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်သည်။
အခမဲ့မိန့်ခွန်းညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြယ်ပွင့်များအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲကာနီကိုးလပ် Prause လေ့လာမှုတွင်သူသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်
Mindgeek ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထောက်ခံမှုပေးနေသည်။ စုံစမ်းမှုကိုထောက်ခံသည့် tweet တစ်ခုအောက်တွင်လက်မှတ် ၂ ခုအတုတင်နေသည်။
သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ချည်ကိုတီထွင်ပြီးလက်မှတ် ၂ ခုကိုဂုဏ်ယူစွာပြသသည်။ Mindgek သန်းကြွယ်သူဌေးများအားလိင်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောသားကောင်များအားထောက်ပံ့ရန်အတွက်“ တော်တော်ကြောက်မက်ဖွယ်” ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ Prause ကသူမဘာကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာလူအများကဘာကြောင့်ထင်လဲ။
NCOSE ကိုမရှုတ်ချရန် Free Speech Coalition တွင်အားနည်းချက်များရှိနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NCOSE က Pornhub ရဲ့သားကောင်များကိုတရားဝင်ထောက်ပံ့ပေးနေလို့ပါ
FSC နှင့် Pornhub ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
porn သည်စွဲလမ်းမှုမရှိသော FSC tweets များကိုထောက်ခံရန် Prause သည်ခုန်ချသည်။ လူသိများသော porn ကြယ်ပွင့်သည်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည် -
ထို့နောက်သူသည် FSC ၏ Mike Stabile အောက်တွင်တိုက်ရိုက်တွစ်တာစာတိုပို့သည်။
Prause ၏စက္ကူသည်ဤတွင်လုံးဝဖျက်သိမ်းခံရသည် - လေ့လာခြင်း (Prause et al ။ , 2017) "ဒေတာများကိုစွဲလမ်းအဖြစ်လိင်ကိုထောကျပံ့ဘူး"
Prause သည် porn အဆိုတော်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးကိုဖော်ထုတ်သည်။ Prause ၏“ ဓာတ်ခွဲခန်း” နှင့်နေထိုင်မှုသည် Los Angeles မြို့၏အလယ်တွင်ရှိသည်။
နှစ်ခုလူသိများတဲ့ porn ကြယ်ပွခွငျးအားဖွငျ့တည်ရှိနေပေမယ့်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ Prause:
လူသိများတဲ့ porn သရုပ်ဆောင် / ထုတ်လုပ်သူ (တွစ်တာမှ Prause ကြိုဆိုဇူလိုင်လ, 2014) ။ သူမရဲ့အသွင်အပြင်ကို hashtag မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ် (သူမ misogyny ကိုဘာလို့မခေါ်တာလဲ။ )
ဇူလိုင်လ, 2014: Porn ထုတ်လုပ်သူက Nicole Prause နဲ့တွေ့ဆုံရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ သူမကြောင့် Prause ၏တွစ်တာကိုမရနိုင်ပါ အဟောင်းကို twitter account ကိုအပြီးအပိုင်နှောင့်ယှက်ဘို့ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်.
သြဂုတ်လ 2014: Porn မင်းသမီးက Melissa Hill & Prause ကိုသူစွန့်ခွာချင်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။
သူမကြောင့် Prause ၏တွစ်တာကိုမရနိုင်ပါ အဟောင်းကိုတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်နှောင့်ယှက်ဘို့ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်.
porn ထုတ်လုပ်သူ / စာရေးဆရာ, fPrause နှင့်အတူ lirting (ဘာကြောင့်သူမ misogyny ကိုခေါ်ခဲ့တာလဲ။ ) RedditIAmA - ငါ Adam Christopher / Tarantino XXX အရွယ်ရောက်ရုပ်ရှင်စာရေးဆရာ / TarantinoXXX.com အတွက်ဒါရိုက်တာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Quentin Tarantino AMA အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။
porn ရငျးနှီးလဲလှယ်နှင့်အတူနောက်တဖန်ထုတ်လုပ်သူ / ဒါရိုက်တာ:
Prause က“ Science over Stigma” ကိုလူကြီးအဆိုတော်များအားစုရုံးနေသောအားပေးသည်။
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးပါမယ်ဘက်မလိုက်သုတေသီတစ်ဦးညစ်ညမ်းသဘင်သမဂ္ဂနှင့်ပတ်သက်ပြီး tweeting လိမ့်မလဲ?
ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသူမသည်ညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လိင်လုပ်သားများကိုခုခံကာကွယ်။ ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာ၌တည်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်။
FSC နှင့်ညစ်ညမ်းထုတ်လုပ်သူများက Retweeted ။
နှစ်ခု porn အဆိုတော်များ၏တွစ်တာချည်တွင်, Prause ကြောင်း porn ကြယ်ပွပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိသည်နှင့် (causation သရုပ်ပြနိုင်လျှင်ကဲ့သို့) porn ဖျော်ဖြေအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မဟုတျကွောငျးပါဘူးသူတို့ကိုပြောထားသည်:
မှတ်ချက်: Prause သူမ၏အခိုင်အမာထောက်ခံရန်မရှိလေ့လာမှုများကိုးကား။
Prause ကိုခေါ်သောအဓိက porn ထုတ်လုပ်သူက“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ superheroine” ဖြစ်သည်။ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းသည်သူမ၏မြင့်မြတ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လေးကိုတင်သည်။
အနီးကပ် Prause မဟာမိတ်ဒါဝိဒ်သည် Ley လည်း (ကျနော်တို့က porn-စက်မှုလုပ်ငန်းရန်သူ၏အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးကိုအတည်ပြုပိုပြီးအများအပြား Ley tweets ရှိသည်) အများအပြား porn ထုတ်လုပ်သူ သိ. ရန်ဝန်ခံသည်
အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး tweet ခုနှစ်, Prause ၏မိသားစုမှသူမ၏ဝမ်းနည်းကြောင်းပို့ပေး ဝီလျံ Margoldအဆိုပါ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း တစ်ဦးကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူသူကိုခဲ့တယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ (XRCO):
ဘဏ္Yာရေးနှစ် - NBC ရုပ်သံလွှင့်စဉ်ကာလအတွင်း မနက်ဖြန်ကမ်းခြေ-to-ကမ်းခြေတွမ် Snyder နှင့်အတူ, Marigold မိမိသမီးနဲ့လိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖျော်ဖြေစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ သူကသူ၏သမီး porn စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မေးသောအခါ Margold replied, သူမအသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မှီ ပြီးတော့ငါသူမကိုယ်တိုင်ပင်အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။"
porn အဆိုတော် / ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူ Convo "Anti- porn" misogynist ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ porn အဆိုတော်မဟုတ်:
Prause က porn ထုတ်လုပ်သူ“ Ms Naughty” မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတွစ်တာတင်သည်
အဆိုပါ porn ထုတ်လုပ်သူ (မစ္စဆိုး) ဆူ McLean, သူတို့ကအွန်လိုင်းကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုန်းမှာလူငယ်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်သောသူတစ်ဦးဖက်ဒရယ်အစိုးရဆိုက်ဘာလုံခြုံမှုကိုအကြံပေးသိက္ခာချရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Daily Mail က ဒီဖုံးအုပ်ဆောင်းပါး။ Prause က“ ထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်း” လို့ခေါ်တယ်။
AVN / ညစ်ညမ်းပြပွဲမြှင့်တင်ရေး:
2017 အတွက်သူမကဖြစ်မလုပ်ပဲ "porn အဆိုတော်များသမဂ္ဂအဘို့ (မရတဲ့) ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်":
ကောင်းမြတ်ခြင်း porn ကြယ်ပွင့်ပြည်ထောင်စု၏ဘုတ်အဖွဲ့တွင်။ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောဆိုပါ။
ညစ်ညမ်းဒါရိုက်တာအပေါ် Prause ရွှင်လန်း သူ Mike Quazar (porn ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း ၅၀၀ ကျော်)၊တရားကိုဟောပြောporn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရား -
Prause ၏ဆက်သွယ်မှုသည်သူမ၏တစ် ဦး တည်းသောအမှားအယွင်းမရှိသော EEG လေ့လာမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Prause et al ။, 2015။ ရလဒ် -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသူများ” နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် vanilla porn ဓါတ်ပုံများကိုတစ်စက္ကန့်ထိအနည်းငယ်သာ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုနည်းသည် Prause ကဒီရလဒ်တွေကို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှု” ကိုပြသသည်။ အဘယ်အရာကိုတရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင်သူတို့ရဲ့တစ် ဦး တည်း Anomalous လေ့လာမှုတစ်ခု debunked ထားပြီးကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ် လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်? EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ ရှစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015 ။
နိဒါန်း, Prause တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ သူမသည်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သော်လည်းထုတ်ဖော်ပြသသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင် Prause ကပြင်ဆင်သည် ရေဖျက်မှုဘလော့ဂ်အပိုင်းအစသူမကအရွယ်ရောက်စက်မှုလုပ်ငန်း website တွင်တင်ထားရာ။ (မူရင်း url: http://mikesouth.com/scumbags/dr-nicole-prause-destroys-yourbrainonporn-dont-fall-22064/) ။ အောက်ပါအတိုင်း site ကိုသူ့ဟာသူဖော်ပြထားတယ်:
သူ Mike တောင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းဘလော့ဂ်သည် 1998 ကတည်းကအရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းများအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးတည်ရာ။ သူ Mike တောင်နှစ်ခု AVN ဆုအနိုင်ရသူတစ်ဦးသေးငယ်တဲ့အချိန် porn ထုတ်လုပ်သူခဲ့, အရွယ်ရောက်သတင်းဘလော့ဂ်ရှေ့ဆောင်လှည့်။ တောင်ပိုင်းကအဓိကသတင်းက်ဘ်ဆိုက်များတစ်အိမ်ရှင်အပေါ်ကိုးကားနှင့် Gawker.com "အဖြစ်သူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်porn အတင်းအဖျင်းများ gonzo မင်းကြီးသည်။"
အောက်တွင်ညာဘက်ပြီးနောက် MikeSouth.com မှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည့် Prause ရဲ့အသေရေဖျက်ပို့စ်၏မျက်နှာပြင်ပုံဖြစ်ပါသည် Wilson ကဒီ Tweet လုပ်ခဲ့။ Mike South နှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် Prause ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောရှင်းလင်းသောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။
ထိုနေ့တွင်, Prause လည်း Quora ပေါ်မှာဤတူညီသော porn-စက်မှုလုပ်ငန်း blog post: တင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ရလဒ် သူမ၏အမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်ဘို့ပိတ်ပင်ထားခံရခြင်းအတွက်။ သူမ၏အသရေဖျက်မှုအပိုင်း၌သူမကသိလျက်၊
[ဂယ်ရီ Wilson က]a"ကဇီဝဗေဒအတွက်ပါမောက္ခ။ " တကယ်တော့ပါပြီမှမလုပ်ပဲသူတစ်ဦးတက်ရောက်နည်းပြဆရာ, မနျ Southern အော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်ကဓာတ်ခွဲခန်းအပိုင်းများအတွက်ပါမောက္ခဖြစ်လို့ယူဆတယ်ခဲ့သည်။ သူကပင်လေးပုံတစ်ပုံဖြည့်မတိုင်မီချက်ချင်းလစာမပါဘဲပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
သူမ၏အတွက် အသေရေဖျက်ဆောင်းပါးများ, tweetsနှင့် Quora ရေးသားချက်များ Prause သိလျက်နှင့်မဟုတ်မမှန်ဂယ်ရီ Wilson က "အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်" "ဇီဝဗေဒအတွက်ပါမောက္ခ" သို့မဟုတ်တစ်ဦးဖြစ်ပြောဆိုထားသည်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သည်သူ၏အထောက်အထားများ "ကိုဖြည်းဖြည်းချင်း" ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဘော်သကဲ့သို့ဤသူတို့သ2ကဏ္ဍများပြီးသား Prause ရဲ့တောင်းဆိုမှုများထိတွေ့ကြပြီ
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - Prause မဟုတ်မမှန် Wilson ကမိမိအအထောက်အထားများအတုမူကြောင်းကိုမလုပ်ပဲ
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019: Prause လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာကွန်ဖရများအတွက်ဥရောပလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စီစဉ်ရန်လိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြုချက်သည် ESSM ဒုံးပျံဂယ်ရီ Wilson ကန့်ပြောရမှာလိပ်စာဖျက်သိမ်းစေ။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဂယ်ရီတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှတွဲဖက်နည်းပြကြီးနှင့်အခြားနေရာများမှာလူ့ခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ရောဂါဗေဒသင်ပေးတယ်။ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောသတင်းထောက်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသူ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအမှားအတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခင်းကျင်းတာဝန်ပေးခဲ့ကြပေမယ့်လည်း (ကအပါအဝင် အများအပြား TEDx ဆွေးနွေးပွဲ pirates တဲ့ website တွင်ယခု-အသုံးမဝင်တော့စာမျက်နှာ မည်သူမဆိုပထမဦးဆုံးကသူတို့ကိုဆက်သွယ်မပါဘဲတစ်ဦးပီဖော်ပြရန်နိုင်သောနေရာ) သူကအမြဲသူခန္ဓာဗေဒ, ရောဂါဗေဒနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်ဆုံးမသွန်သင်သောဖော်ပြထားခဲ့ပါသည် (YBOP ကြှနျုပျတို့အကွောငျးစာမျက်နှာ) ။ သူဟာတစ်ဦးပါရဂူဘွဲ့ခဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ပါမောက္ခကပြောပါတယ်ဘယ်တော့မှသိရသည်။
ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အသေးစိတ်: ဂယ်ရီ Wilson ကပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသရေဖျက်မှုအရေးဆိုမှု (မတ်လ, 2018)
မေလ, 2019: ကိုလည်းညစ်ညမ်းအဆိုတော်နှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ထုတ်ဝေကြားကြားခံအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, porn အဆိုတော်မှ tweet ။
Prause အားပေးအားမြှောက် EAN (“ ဥရောပတိုက်စားရောင်းဝယ်မှုအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှု”) ကိုသူမ၏အင်တာဗျူး။
screenshot: Prause အင်တာဗျူး အဆိုပါ Ean ရှေ့စာမျက်နှာပေါ်တွင် featured:
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းပိုမိုမြှင့်တင်ရေး:
Retweet မှပထမဦးဆုံးတစ်ခုမှာ PornHub ဖြစ်ခဲ့သည်။
Prause twitter alias“ RealYBOP” ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထုတ်လုပ်သူ၏တွစ်တာကိုပြန်လည် retweets နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု tweets:
porn အဆိုတော်အကူအညီအတွက် Prause မေးဖို့သူမတုံ့ပြန်:
Tweet LA ရှိအများဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ထံသို့ - သူ Mike Quasar.
နောက်ကျော Prause tweet အပေါ်မြေပြင်: မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (အလားတူနှောင့်ယှက်၏ 1 သည်အခြား Prause သားကောင်များအနေဖြင့် (2) ဆေးစစ်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုအန္တရာယ်ရှိတဲ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့, (3) မှားယွင်းသောဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများလိမ်ခဲ့ကွောငျးစွပ်စွဲချက်များနှင့် (9) ကျမ်းကျိန်လွှာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad.)
အရေးကြီးသည်မှာ Prause ၏ Don Hilton ကိုအပြစ်တင်ရန်အတွက်“ တရားမျှတမှု” သည် Hilton မှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆု (Prause မှငြင်းဆိုသည့်) တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Prause နှင့် Ley သည်ဟီလ်တန်၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အားသူ့ကိုသိပ္ပံပညာနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်အရည်အချင်းမပြည့်မှီဟုနာတာရှည်ညွှန်းဆိုသောကြောင့်၊ Hilton (သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများကိုရေးသားသူ) သည်၎င်းတို့၏ဘက်လိုက်မှုကိုထောက်ပြရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆခဲ့သည် (သုတေသနအထောက်အထားအပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ရန်) ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူမှုမီဒီယာတင်ဆက်မှုများသည် Prause ၏လိုလားသောဘက်လိုက်မှုများကိုသက်သေပြသော်လည်း Hilton သည်သူ၏တင်ဆက်မှုများ၌အချိန်ကုန်သက်သာစေသည့်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Prause ၏တင်ပို့ချက်သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆုသို့တက်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူမ၌သို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင်တက်ရောက်မည်ကိုဖော်ပြခြင်း (ပုံများနောက်လာမည့်အခန်းတွင် - နီကိုးလ် Prause porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆုတက်ရောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (XRCO, AVN)).
သူမ၏ထံမှ Prause ရဲ့မှားယွင်းသောအကောင့်၌တည်၏ ထုတ်ရန်လှုပ်ရှားမှု သူမ၏ပုံရိပ်ကိုသူမကပြောဆိုခဲ့သည် သူမသည် 2016 X-Rated Critics Organization (XRCO) ဆုအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သည် နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင် After Porn Ends-2 ၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားတွင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သည်။ Prause ကလဲလျောင်းနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမမှားယွင်းနေတဲ့ဒီပုံပြင်ကိုသူမအကာအကွယ်တစ်ခုလုံးကိုအနားယူနေပုံရသည်။ သူမ၏တွစ်တာအကန့်အသတ်များထဲမှတစ်ခု (တရားစွဲဆိုမှုများနှင့်အကောင့်မြောက်မြားစွာကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့်နေရာ) တွင်၊ Prause ကသူမအတွက်အကူအညီပေးရန်လာနေသောညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများနှင့်တစ် ဦး ချင်းများအားကြေငြာခဲ့သည်။
မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမဆိုပြသခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုပြသပါက၊ သူမသည်သူမ၏ beck နှင့်ခေါ်ဆိုခမှာအားလုံးကြီးမားတဲ့ porn ကစားသမားရှိပါတယ်။
၁/၁/၂၀၁၀ - လူသိများသောညစ်ညမ်းဖျော်ဖြေသူ / ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာပြောဆိုခြင်း Tim Woodman:
1/26/20 -“ Wicked Pictures” အား၎င်း၏ AVN ဆုများဖြင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသော twitter account တစ်ခုအားချီးမြှင့်ပါ။
“ လိင်လုပ်ငန်း” ကိုထောက်ပံ့ခြင်း (ပြည့်တန်ဆာ၊ အပြာစသည်)
နီကိုးလ်ခရော့စ်သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆု / ဖြစ်ရပ်များ (XRCO, AVN) သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟူသောအထောက်အထား
porn စက်မှုလုပ်ငန်းသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ Prause ၏နောက်ထပ်ပါ pic:
UPDATE: အထက်ဖော်ပြပါ ၄ နှစ်အရွယ် XRCO ဆုဆုဗီဒီယိုကိုဤ YBOP စာမျက်နှာပေါ်တွင်တင်ပြီးမကြာမီတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သံသယဖြစ်စရာမရှိ။ ဗီဒီယိုကိုဖယ်ရှားရန် Prause က XRCO မှတာဝန်ရှိသူများအားတောင်းဆိုခဲ့ပါသလား။ XRCO ကသူမကိုကူညီခဲ့သလား။ နောက်ဆုံးတွင် 2016 XRCO သို့တက်ရောက်ခြင်းအားချီးမွမ်းခြင်းသည် Hilton အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဖြစ်သည်။ XRCO ၏ဆုဗွီဒီယိုကို Diana Davison မှတရားစွဲဆိုမှုအား Prause အားတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် Diana Davison မှတင်ခဲ့သည်၊ သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ (Davison သည် Prause ကို 2016 XRCO Awards တက်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်သည်ဟုဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်)
ထပ်မံ၍ Prause သည် FSC သို့မဟုတ်“ porn industry” မှတိုက်ရိုက်ရန်ပုံငွေရရှိသည်ဟုမည်သူမျှမပြောဆိုပါ။။ တကယ်တော့သူကပင်သူတို့လျှင်, FSC တိုက်ရိုက်မဆိုဤကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုဖြစ်စေ၏ပါစေတစ်ဦးတည်းကသူတို့ကိုလူထုစေမယ်လို့အများဆုံးမဖြစ်နိုင်ပုံရသည် ကိုပြု မတည်ရှိ။ မဟုတ်ပါမည်သူမဆို Prause ဖြစ်ပါတယ် "အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်"သို့မဟုတ်", သူ့ကိုယ်သူညစ်ညမ်းထင်ရှားခဲ့ပါသည်" သူမမဟုတ်မမှန်သူမ၏အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက်အခိုင်အမာနှင့်အက္ခရာများရပ်တန့်နှင့်မှသူမ၏တုန့်ပြန်၌ရှိသကဲ့သို့ ဒွန်ဟီလ်တန်သည် MD အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအမှားယွင်းသောအခိုင်အမာမှတ်တမ်းတင်ကဏ္ဍများ:
အပ်ဒိတ်: In pornhub ထောက်ပံ့သူမ၏ချည် NoFap ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့် RealYBOP (Prause alias account) သည် Julie Bindel ကိုပစ်မှတ်ထားသော XBIZ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို Tweet လုပ်ခဲ့သည်။ RealYBOP က Julie Bindel သည် XRCO သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ Bindel သည်အများပြည်သူအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသော XBIZ ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလိမ်ညာမှုဖြစ်သည်။ စိတ်မကောင်းစရာမှာ RealYBOP ၏တွစ်တာတွင်သူမ၏မုသားကိုဖော်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး Bindel သည် XBIZ ဆုကိုဆွတ်ခူးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
context: ဂျူလီဘင်ဒဲလ်သည်ထင်ရှားသောညစ်ညမ်းမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ ပြည့်တန်ဆာဆန့်ကျင်ရေး၊ သူမ၏ဖိုင်ထဲမှာ သူမကိုဆန့်ကျင်သော Don Hilton အသရေဖျက်မှုအတွက်, Prause သည်သူမသည် porn ဆုများပြသခြင်းကိုတစ်ခါမျှမတက်ရောက်ခဲ့ဖူးဟုအခိုင်အမာပြောဆိုမှုများစွာဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ Prause ၏ Don Hilton ကိုအပြစ်တင်ရန်အတွက်“ တရားမျှတမှု” သည် Hilton မှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆု (Prause မှငြင်းဆိုသည့်) တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Prause နှင့် Ley သည်ဟီလ်တန်၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အားသိပ္ပံပညာနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန်ငြင်းဆိုခြင်းမရှိဟုနာတာရှည်ညွှန်းဆိုထားသည့်အတွက် Hilton (မျိုးတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်စာတမ်းများကိုရေးသားသူ) သူတို့၏သုတေသနဘက်လိုက်မှုများကိုထောက်ပြရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆခဲ့သည် (သုတေသနအထောက်အထားအပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ရန်) ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူမှုမီဒီယာတင်ဆက်မှုများသည် Prause ၏လိုလားသောဘက်လိုက်မှုများကိုသက်သေပြနေစဉ်ဟီလ်တန်သည်သူ၏တင်ဆက်မှုများ၌အချိန်ကုန်သက်သာစေသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Prause ၏တင်ပို့ချက်များသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆုများတက်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူမတွင်သို့မဟုတ်သူမရှေ့တွင်တက်ရောက်မည်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် (ဤစာမျက်နှာမှမျက်နှာပြင်များကိုရရှိသည်။ နီကိုးလ် Prause porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆုတက်ရောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (XRCO, AVN)).
RealYBOP ၏တွစ်တာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ XRCO ဆုများကိုမည်သူမဆို (ပါဝင်သောညစ်ညမ်းသောအမျိုးသမီးရေးဝါဒီများပါ ၀ င်သူများ) ကိုထင်မြင်စေရန်ဖြစ်သည်။ RealYBOP သည် Bindel သည် XRCO သို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ Prause တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးလုပ်နေသူများကို၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်း ၀ င်များအတွက်သီးသန့်သီးသန့်သိုမှီးထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။
RealYBOP၊ Ley နှင့် JamesF တို့သည်အသရေဖျက်မှုအဖွဲ့အဖြစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်လေ့ရှိကြောင်းသတိပြုပါ။
ယခု Prause ၏ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်တွစ်တာအကောင့်ရှိပြီဖြစ်သည် (@BrainOnPorn) သည်ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်အမြဲတားမြစ်ထားသည်။ သူမသည်သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်နှင့်အတူတူပင်မုသာစကားကိုတွစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည်။ ဤတွင်သူမက, အမြတ်ဖြစ်ပါသည်, ဤအချိန်သူမကတကယ်က XRCO အခါ - သူမ XBIZ တက်ရောက်ခဲ့သည်စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုကာ
အပိုင်း 2: နီကိုးလ် Prause "? PornHelps" (Twitter ပေါ်တွင် PornHelps က်ဘ်ဆိုက်, ဆောင်းပါးများအောက်တွင်မှတ်ချက်များ) Prause အဖြစ် outed ခဲ့သည်တစ်ချိန်ကဖျက်ပစ်အားလုံးအကောင့်ခဲ့ "PornHelps ။ "
နီကိုးလ် Prause ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့်ခဲ့သော "PornHelps," (@pornhelps) လို့ခေါ်တဲ့အသုံးပြုသူအမည်နှင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်မယ့် website ကိုအဖြစ် porn ၏ "အပြုသဘောဆောင်သော" သက်ရောက်မှုသတင်းပို့ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ "PornHelps" နာတာရှည် Prause လည်းမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရသောတူညီလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ badgered ။ တကယ်တော့, Prause တခြားနေရာသူမ၏သည်အခြားအထောက်အထားတွေကိုနှင့်အတူတွဲဖက်အတွင်း Twitter နဲ့အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကိုတိုကျခိုကျဖို့သူမ၏သိသာ alias ကို PornHelps အတူတက်ရှိနေသေးသည်လိမ့်မယ်။ တိုက်ခိုက်မှုညှိနှိုင်းသည့် Prause / PornHelps အချို့သည်ထိုအ Prause-စာမျက်နှာကဏ္ဍများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်:
ဇွန်လ, 2016: Prause နှင့်သူမ၏ SOCKS ရုပ်သေး PornHelps "သူတို့သိပ္ပံမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်" လေးစားဖွယ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် "Anti-porn အုပ်စုများ" ၏အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုကြသည်နှင့်
ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၆– PornHelps sock puppet“ PornHelps” အားအလက်ဇန္ဒားရော့ဒ်စ်အားသူသည်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအတုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ နီကိုးလ် Prause &“ PornHelps” သည်မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခံရသည် အချိန် မုသာစကားကိုနှင့် misquoting ၏အယ်ဒီတာ Belinda Luscombe
@pornhelps twitter အကောင့်နှင့် PornHelps ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Prause နှစ်ခုလုံးနောက်ကွယ်ရှိကြောင်းလူတိုင်းသိသွားသောအခါရုတ်တရက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းက“ PornHelps” သည်တကယ်ပင်နီကိုးလ်ပရာ့ဇ်ဖြစ်ကြောင်းသိသော်လည်းအောက်ပါ @pornhelps တွစ်တာမှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
Prause တစ် Kinsey grad တစ်ဦးအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်သူ့ကိုယ်သူခေါ်အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောအထက်ပါ 15 tweet ထက် 2016 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုကောလိပ်စတင်ကြပုံပေါ်ပါတယ်။ အတော်ကြာမှတုန့်ပြန် ကြော်ငြာ hominem ဿုံ Prause ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းမှတ်ချက်တွေအများအပြားထင်ဟပ်ထားတဲ့ "PornHelps" အားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု, "PornHelps" ၏မှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်ရင်ဆိုင်ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် https://www.psychologytoday.com/us/comment/887468#comment-887468: ဤနှင့်အခြားသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ
အထက်ပါ၏ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ စိတ်ပညာယနေ့တွင် အဆိုပါ PornHelps က်ဘ်ဆိုက်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့် Twitter အကောင့်တစ်ခုသဲလွန်စမပါဘဲပျောက်ကွယ် @pornhelps။ PornHelps မှကျန်ရှိနေသေးသောအရာများသည်ဆိုဒ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်မှတ်ချက်တွေများလွန်းသည် ဒီစွန့်ပစ် disqus accoun87 မှတ်ချက်များကို t ကို t ။ (စာမျက်နှာ ၈၀ ပါစာမျက်နှာမြောက်မြားစွာ Prause သည်ဂယ်ရီ Wilson အားအသရေဖျက်ရန်နှင့်နှောင့်ယှက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်).
PornHelps သည်အမှန်တကယ်ဂုဏ်ယူကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုလိုပါသလား။ အောက်ပါမှတ်ချက်များ၊ တွစ်များနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုများကယင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ PornHelps disqus အကောင့်က 87 အကြိမ်တင်ခဲ့သည်။
ဤတွင် Prause နှင့် Russell J. Stambaugh တို့သည် porn အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်တစ်ပြိုင်နက်မှတ်ချက်ပေးကြသည်။ Prause & Stambaugh သည်နီးစပ်သည့်မဟာမိတ်များဖြစ်ပြီးမကြာခဏမှတ်ချက်ပေးသည့်အပိုင်းများတွင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်တိုက်ခိုက်မှုများတွင်အတူတကွမှတ်ချက်ချလေ့ရှိသည်။
Prause ရဲ့နှောင့်ယှက်တပ်မဟာ၏ Prause, Stambaugh နှင့်3သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များကတစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာသေးမီညှိနှိုင်းတိုက်ခိုက်မှုဤအပိုင်းကိုအတွင်းမှတ်တမ်းတင်သည်: မေလ 30, 2018 - Prause မဟုတ်မမှန်သိပ္ပံလိမ်လည်မှု FTND စွပ်စွဲဖြင့်, သူသည်နှစ်ကြိမ် FBI ကမှဂယ်ရီ Wilson ကဖော်ပြခဲ့သည်ပြီဆိုလို။ (Addendum: Gary Wilson သည်လွတ်လပ်စွာသတင်းအချက်အလက်တောင်းခံမှုကို FBI သို့တင်သွင်းခဲ့ပြီး FBI က Prause လိမ်နေကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ Wilson အားအစီရင်ခံစာတင်ခြင်းမရှိပါ။ နိုဝင်ဘာလ 2018: FBI ကအသေရေဖျက်တောင်းဆိုမှုများပတျဝနျးကငျြနီကိုးလ် Prause ရဲ့လိမ်လည်မှုခိုင်မာသွား)
သုတေသီများပေါ်မှာဤ Prause / PornHelps ညှိနှိုင်းတိုက်ခိုက်မှုများ၏တာကဒီမှာရက်ပိုင်းသည်: ဇွန်လ, 2016: Prause နှင့်သူမ၏ SOCKS ရုပ်သေး PornHelps "သူတို့သိပ္ပံမကောင်းတဲ့ဖြစ်၏။ " လေးစားဖွယ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် "Anti-porn အုပ်စုများ" ၏အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုကြသည်နှင့် သို့သော်ကျွန်တော်တို့ကို Prause ကြောင်းအထောက်အထား re-ဆန်းစစ်ပါစေ "PornHelps ။ "
ဒီအကြောင်း tweet ထဲမှာနီကိုးလ် Prause တစ် Kinsey grad, လေ့လာမှုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်အဘို့အ posted (ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးကတည်းက Neuropsychopharmacology), မဟုတ်မမှန် "Anti-porn အုပ်စုများ" (က) စွဲမှ neuroscience လယ်ပြင်၌ထိပ်တန်းသုတေသီတွေအပါအဝင်ယင်း၏9သုတေသီများအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာနဲ့သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအသစ်ခဲ့ကြောင်း "မကောင်းတဲ့သိပ္ပံ။ " ဒီမှာပုံ Prause ရဲ့ tweet () တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းသော (လေ့လာမှုအဖြစ်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု), ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
Prause အထက်ပါ Tweet လုပ်ခဲ့သောတချိန်တည်းမှာပင်, "PornHelps" ဟုအဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအတွက်ပို့စ်တင်စတင်ခဲ့သည် စက္ကူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော PornHelps '' မှတ်ချက်အနည်းငယ်ရှုပါ။ ဘယ်လို PornHelps သုတေသနနည်းစနစ်နှင့်စာရင်းဇယားအကြောင်းကိုဤမျှလောက်သိကြပါသလဲ? (Prause ရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ stats ၌ရှိ၏):
ဒီမှာ PornHelps Prause ကြောင်းကိုပိုပြီးအတည်ပြုချက်ကိုပါပဲ။ Prause တစ်ဦးက NPR အင်တာဗျူးအောက်ရှိ PornHelps မှတ်ချက်များ porn ၏အခိုင်အမာအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်း Prause ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလှည့်ဖျားမှနီးပါးတူညီနေသောခေါင်းစဉ်:
နီးပါးတူညီ Prause ကိုးကားပြီးဤဆောင်းပါး - သူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းလှည့်ဖျားနှင့်အတူ:
အခုတော့အမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ Wilson ကတိုက်ခိုက်ခြင်း (PornHelps ကဲ့သို့) Prause တစ်အရသာ: porn မြှင့်တင်ရန်နှင့်သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်။ (မှတ်ချက်: PornHelps PT နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အခြားသူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်အလွန်အလုပ်များခဲ့ပါတယ်နှင့်သင်တန်း၏, တွစ်တာမှတဆင့်) ။
Wilson ၏နောက်သို့လိုက်နေသော Pornhelps သည်ထင်မြင်ချက်များစွာ (“ stalker”၊ “ massage therapist”,“ fake” စသည်ဖြင့်) တွင် Prause ၏စကားကိုထင်ဟပ်ပြသနေသည်။
အကျွမ်းတဝင်မကြည့်ပါ? Prause တစ် cyberstalker နှင့် (သူမ၏ sidekick ဒါဝိဒ်သည် Ley ထက်အခြား) တစ်ဦးအနှိပ်ကုထုံး Wilson ကခေါ်ဆိုသူကိုသာမှတ်ချက်ပေးသည်:
ဤတွင် PornHelps Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် - "Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Module (Prause et al ။, 2015)
Pornhelps တစ်ဦးညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း hack ကတစ်ခုရွားလှတွေအများကြီးသိတယ်!
Wilson ကအကြောင်းကိုဤမှတ်ချက်သည် Prause ရဲ့ 2016 Op-Ed အောက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် - Op-Ed: Anti-porn ကျောင်းကအစီအစဉ်ကိုသိပ္ပံဂေါ်။
တနည်းကား, Prause တစ် cyberstalker နှင့်အနှိပ်ကုထုံး (အခြား chum ဒါဝိဒ်သည် Ley) Wilson ကခေါ်ဆိုသူကိုသာမှတ်ချက်ပေးသည်။ Prause ရဲ့ Op-Ed ၏အမှန်တရား - Op-Ed: အတိအကျညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သိပ္ပံအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း (2016)
အောက်ဖော်ပြပါများသည် PornHelps ၏ Prause op-ed အောက်ရှိမှတ်ချက် ၂၀ ကျော်အနက်အချို့ဖြစ်သည်။ Gary Wilson ပြီးနောက် Prause ၏နံပါတ် ၂ စွဲသည် FTND ဖြစ်ပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာတင်ခဲ့သည်။ ဤထင်မြင်ချက်များသည် Prause ၏တွစ်တာများသည်သုတေသနပြုမှုကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့် FTND ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ PornHelps "discus" အကောင့် 20 မှတ်ချက်များတင်ခဲ့သည်
PornHelps Prause လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် tweets သောတူညီသြစတြေးလျလေ့လာမှုဖျောပွထားသ:
ဤတွင် PornHelps သည် Prause တွစ်တာသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များစွာကိုထင်ဟပ်ပြသည် - နှစ် ဦး စလုံးသည်ပြင်ပလေ့လာမှုများမှတူညီသောတွေ့ရှိချက်များကိုနာမည်ပေးသည်။
Prause / PornHelps ၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခု (David Ley နှင့်အတူပူးပေါင်းနေစဉ်) Wilson အားတိုက်ခိုက်ခြင်း။
ပိုများသောသက်သေအထောက်အထား။ ကျနော်တို့နှင့်အတူစတင်ရန် တစ်ဦး tweet ၏ရေးသားသူအားဖြင့် အချိန် "ပုံပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းporn နှင့် Virility ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု"Belinda Luscombe:
ဒီအလက်ဇန်းဒါးနှင့် Belinda နှစ်ဦးစလုံးသည်မိစ္ဆာဆရာတို့တောင်းဆို @pornhelps အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ @NicoleRPrause နောက်ဆုံးမှာခေါ်ခြင်းအတွက် chimed အချိန် သတင်းစာဆရာ Luscombe မုသာကိုသုံးသော (လာမယ့်အပိုင်း၌ သာ. ) ။ နောက်ကျောနှင့်ထွက်ကဒီမှာ post သိပ်အများကြီးတွိပါဝင်သော်လည်းအရှိဆုံးသောဤချည်များတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်: thread 1, thread 2, thread 3။ အောက်တွင်မဟုတ်မမှန်အလက်ဇန်းဒါး porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (အားလုံးအကြာတွင်ဖျက်ပစ်) ၏ကသူ့ပုံပြင်ကိုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြောင့်ဟုဆိုကာ @ pornhelps ရဲ့မတည်မငြိမ်-မြည် tweets တစ်နမူနာဖြစ်ပါသည်:
@luscombeland @nytimes "Brave"? သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်မယ့်ပြဿနာကိုအတု? သငျသညျမိမိအဇာတ်လမ်းမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတည်ပြုရန်ပျက်ကွက်
@GoodGuypervert @luscombeland ပုံကြီးချဲ့ ESP သည်သူ၏အမှု၌, သူတို့ကိုပိုက်ဆံစေသည်။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားတွေမရှိကောလိပ်အများအားဖြင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြ ... တစ်နည်းနည်းနဲ့ $$$ တယ်
@AlexanderRhodes & @luscombeland ၎င်းတို့၏ဥစ္စာရောင်းဖို့အတုထိတ်လန့်အတွက်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာ။
@AlexanderRhodes @luscombeland @GoodGuypervert uh-oh သူငယ်ရွယ်ကြောက်တယ်အမျိုးသားတွေကငွေကိုချွတ်လုပ်ကိုအတုဖမ်းမိတယ်သွားပြီအပြည့်အဝကြော်ငြာ-hominem ဘီစီပါပဲ။
@AlexanderRhodes @luscombeland @GoodGuypervert ထို့နောက်ငါသည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်များမဆိုတကယ်သင်တို့ဆီသို့ဖြစ်ပျက်ကြောင်းကိုသင်၏သက်သေပြ, အတုအမြတ်အစွန်းစောင့်ဆိုင်း။
အလက်ဇန်းဒါးဖြေကြား အကြိမ်ပေါင်းများစွာမရှိ resolution နဲ့။ နောက်ဆုံးမှာ Belinda အောက်ပါ Tweet လုပ်ခဲ့:
Pornhelps မုသာကပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကကိုမြင်လျှင်, တုံ့ပြန်: "ငါသည်သင်တို့ကိုမမှန်သောအစီရင်ခံဘို့ blackballed တယ်ကြားခဲ့ရတယ်။ " နောက်ဆုံးတော့ Prause ရဲ့ "NicoleRPrause" တွစ်တာအကောင့်ဆွဲလဲ Luscombe မုသာကိုသုံးသောတောင်းဆိုအတွက် (အောက်တွင်) ။ Hmm ... ဘယ်လို @NicoleRPrause ဒီတွစ်တာချည်အကြောင်းကိုငါသိ၏ခဲ့တာလဲ နီကိုးလ် Prause အကြံပြုခြင်းအထောက်အထားနောက်ထပ်နည်းနည်း @pornhelps အဖြစ် masqueraded ။
ဒီတူညီတဲ့တွစ်တာချည်ခုနှစ်တွင် Pornhelps (Prause သောသူသည်) Tweet လုပ်ခဲ့ နီကိုးလ် Prause တစ်ရုံထုတ်ဝေဒါဝိဒ်သည် Ley အင်တာဗျူးအကြောင်းကို။
အဆိုပါ Ley အင်တာဗျူးမှာတော့ Prause "porn စွဲ" နှင့် penile ဒဏ်ရာရ (Prause လည်းသူမဒေတာထုတ်ဝေရန်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်) အကြားမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုတိမ်အတည်မပြုရသေးသောဒေတာရှိသည်ဖို့ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ Prause နှင့် Pornhelps နှစ်ဦးစလုံးအလက်ဇန်းဒါးသည်မိမိတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-သွေးဆောင် penile ဒဏ်ရာများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. လိမ်လည်သည်ဟုဆိုခဲ့ကွောငျးသိရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အလက်ဇန္ဒားကိုလိမ်လည်သူလို့ခေါ်ပြီး @pornhelps တွစ်တာသုံးရက်အကြာမှာတော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိလား။ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် အလက်ဇန်းဒါး၏တိုင်ကြားချက်တစ်ခုမှ (သူသည်မိမိ၏လိင်တံကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှဒဏ်ရာရစေခြင်း) ကိုညွှန်ပြပါသလား။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များအရစစ်တမ်းကောက်ယူသူများ၏ငါးပုံတစ်ပုံသည်အလားတူဒဏ်ရာများခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်တဖန် Prause သည်သူမ၏အချက်အလက်များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့် (နားမလည်နိုင်လောက်အောင်) ငြင်းဆိုခြင်းဖြင့်အလက်ဇန္ဒားသည်လိမ်ညာသူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနေစဉ် မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို Prause ၏ဘလော့ဂ်တောင်းဆိုမှုများသည်သူမ၌“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မညစ်ညမ်းမှုကိုသူမဘာသာရပ်များတွင်အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ထောက်ခံမှုမရှိသေးပါ။ Ley ရဲ့ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့မှတ်ချက်တွေအပိုင်း).
နီကိုးလ် Prause & "PornHelps" မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲ အချိန် မုသာစကားကိုနှင့် misquoting ၏အယ်ဒီတာ Belinda Luscombe ။ Luscombe နှင့်အတူရှိခဲ့ပြီး အချိန် 1995 ကတည်းကမဂ္ဂဇင်း, 1999 အတွက်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာဖြစ်လာ။ (သူမ၏ကြည့်ရှုပါ ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာ နှင့်သူမ၏ အချိန် စာမျက်နှာ။ ) Luscombe, မတ်လအတွက်ရလဒ်ဖြစ်သောလူပျိုတို့အတွက်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်နှစ်သုံးစွဲ 31, 2016 အချိန် အဖုံးပုံပြင် "porn နှင့် Virility ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု။ "Prause နှင့် Ley နှစ်ဦးစလုံးဟာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါပြီ အချိန် နှစ်ဦးစလုံးအထဲတွင် featured နှင့်ကိုးကားခဲ့ကြသော်လည်းဆောင်းပါး, (အနည်းဆုံး) ။
စစ်မှန်တဲ့စွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်ပင်တည်ရှိရန်အသိအမှတ်ပြုကြသည်မဟုတ်နေစဉ်ကံမကောင်းစွာအများပြည်သူများအတွက်, များသောအားဖြင့် Prause နှင့် Ley အများစုခေတ်ရေစီးကြောင်း porn-စွဲဆောင်းပါးများအတွက် featured တစ်ခုတည်းသော "ကျွမ်းကျင်သူများက" ဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်ဒီအချိန်။ porn သုံးစွဲသူများ fMRI လေ့လာမှုများထုတ်ဝေခဲ့ကြသူနှစ်ဦးကမ္ဘာကျော်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်, ထိုအဘို့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည် အချိန် ဆောင်းပါး။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆီးရောဂါပါရဂူအဖြစ် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြသူအများအပြားသည်လုလင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ, ရိုးရှင်းစွာထားပါ အချိန် ဆောင်းပါးပိုပြီးဂရုတစိုက်ဒီဘာသာရပ်အပေါ်ကိုအခြားဆောင်းပါးထက်သုတေသနပြုနှင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာအဖြစ်မှန်နှင့်သိပ္ပံများ၏ (ထို့နောက်) လက်ရှိပြည်နယ်နှစ်ခုလုံးကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ. ပင် ပိုပြီးထောက်ခံမှု အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကြားဖြစ်နိုင်သော link ကိုများအတွက် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေထဲကရောက်လေပြီ။
တစ်နှစ်များအတွက်ဇာတ်လမ်းအလုပ်လုပ်အကြောင်းကို (အထက်ပုံ) Belinda ရဲ့အစောပိုင်း tweet တုံ့ပြန်တှငျကြှနျုပျတို့ @pornhelps ရှိသည်, tweeting အောက်ပါ:
Pornhelps အဘိဥာဏ်သည်: သူမ "တကယ်တော့အတွက်" သိတယ် Belinda ဇာတ်လမ်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး။ ဆယ်မိနစ်အကြာတွင် Prause tweets : Belinda သူမ၏ misquoted နှင့် "သူမ၏သတင်းရင်းမြစ်နှင့် ပတ်သက်. လိမ်လည်" ဟုဆိုကာ
အမြဲအဖြစ်, Prause မျှဥပမာနှင့်မျှမစာရွက်စာတမ်းများပေးပါသည်။ tagged ခံရဘဲ, ဘယ်လောက် Prause Belinda ရဲ့ tweet အကြောင်းကိုသို့မဟုတ် pornhelps ရဲ့ပြန်ကြားချက် @ ကိုသိခဲ့တာလဲ ဒီတစ်ခါလည်း Prause လွန်းအဘိဥာဏ်ရသနည်း
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု: ဒါဟာလဲလျောင်းနေသော Prause နှင့် @Pornhelps ဖြစ်ပါတယ်။ အမြားအပွားကိုအတည်ပြုရန်နိုင်သကဲ့သို့, Luscombe ဟာရှေ့တော်၌ထိုနှစျအတှငျး, ဂယ်ရီ Wilson က, ဂါယူဆပါသည်အလက်ဇန္ဒား Rhodes, နောဧဘုရားကျောင်း, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားသူများဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အချိန် အဖုံးဇာတ်လမ်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Luscombe နှင့်အတော်ကြာ အချိန် မဂ္ဂဇင်းတကယ်တော့-Checker တစ်ခုချင်းစီကိုအငျတာဗြူးရဲ့တောင်းဆိုမှုများ corroborate မှတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူယောက်ျား၏မိန်းကလေးကဲ့သို့ Wilson ကယခင်အလုပ်ရှင်, ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းလည်းအားပေးပြီးမှတောင်းဆိုမှုများကိုငြင်းပယ်သို့မဟုတ်အတည်ပြုပေးရန်ဟုမေးခဲ့သည် အချိန် ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်နီကိုးလ် Prause ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကအရေးဆိုမှုအသီးသီး, စာဖြင့်ရေးသားမကြာခဏ 2-3 ကြိမ်ပြုလေ၏။
ဥပမာအားဖြင့်, နီကိုးလ် Prause မဟုတ်မမှန်မှအခိုင်အမာ အချိန် မဂ္ဂဇင်း ဂါယူဆပါသည်ရေးသားဖို့ဆေးပညာဆရာဝန်အဖြစ် masqueraded ကြောင်း Prause & Pfaus ၂၀၁၅ ၏ဤသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု (တကယ်တော့ဆေးပညာဆရာဝန် / သုတေသီကရေးသား) ။ ပို. ပင်အံ့သြ, Prause ပြောသည် အချိန် ကြောင်း UCLA ရဲ့လုလင်ရဲ့ကွန်ပျူတာရန် "ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD" ဝေဖန်မှုကို (Editor ကိုမှပေးစာ) ခြေရာခံခဲ့သည်။ ယူဆပါသည်ရဖျက်ဖို့ဒီရို့ကားကြိုးပမ်းမှုအားလုံးအထက်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
စကားဝိုင်းမှ Belinda အဆုံးသတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက် အောက်ပါ tweets ဇူလိုင်လ 25 အပေါ်:
"PornHelps" tweets နှစ်ခုထက်ပိုသောမတည်မငြိမ်တုံ့ပြန်မှု (Update ကို - ကသိသာဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ် @pornhelps အကြာတွင် Prause မကြာခဏဤအကောင့်နှင့် Tweet လုပ်ခဲ့သောထိုသူတို့၏ twitter account ကိုဖျက်ပစ်):
အဘယ်သူမျှမ trolls ကျွေးမွေးဖို့တုံ့ပြန်။
အပိုင်း ၃။ နီကောလ်ပုံဥပမာသည်သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်သုတေသီများ / ပညာရေးဂျာနယ်များအားမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားကိုထောက်ပံ့ပေးသောဥပမာများ
ဤအပိုင်းသည်အတော်အတန်ကြီးသော်လည်းညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံသည့်အခါ၎င်းသည် Prause ရေခဲတောင်၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ Prause ၏အများအားဖြင့် porn လိုလားသူအားထုတ်မှုသည်သူမနှင့်သဘောမတူသူများကိုအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်နှောင့်ယှက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤကျယ်ပြန့်သောစာမျက်နှာများသည် Prause ၏ကြိုးပမ်းမှုအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ဤအပိုင်းသည် Prause ၏အခြားနယ်ပယ်တွင်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သုတေသနကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်သုတေသီများနှင့်ပညာရေးဂျာနယ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း။
Chronicles အဖြစ် ဒီမှာ နှင့် တခြားနေရာ ဒေါက်တာ Prause အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ် သူမ၏ကိုယ်ပိုင် နှင့် အခြားသူများကို သုတေသန။ ထပ်တလဲလဲအနည်းငယ်ချယ်ရီရွေးချယ် (နှင့်မကြာခဏချို့ယွင်းချက်) ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်လေ့လာမှုများ tweeting စဉ်များအပြင်သူမကနာတာရှည်, porn သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ် mischaracterizes ။ သငျသညျကိုယျအဘို့တရားစီရင်တော်မူလိုလျှင်ဒီစာမျက်နှာလေ့လာမှုများနှင့်စာပေအတော်ကြာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရာပေါင်းများစွာမှလင့်များပါရှိသည်: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်သုတေသနပြု၏လက်ရှိပြည်နယ်။ အောက်တွင်တွေ့ရမည့်အတိုင်း၊ Prause သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုမကြာခဏဖော်ပြသည်။ သင်တွေ့ရမည့်အတိုင်း၊ Prause ၏ ၄ ကြိမ်သည်များသောအားဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြပြီးမှားယွင်းစွာမှားယွင်းစွာပြောနေသည့်အချက်များမှာ -
လေ့လာချက်တိုင်းနီးပါးနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်သတင်းပို့ထားသဖြင့်ဤအခိုင်အမာများထက်အမှန်တရားမှမည်သည့်အရာမျှ ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင်ဤပြောဆိုမှုများအတွက် Prause ၏တစ်ခုတည်းသောအထောက်အပံ့မှာပြင်ပလေ့လာမှု ၄ ခု (သူမမှ ၂ ဦး၊ တေလာကိုဟွတ်မှ ၂ ခု) သည်သူတို့ဖြစ်ဟန်တူသည်။ Prause အခိုင်အမာတစ်ခုစီ၊ သူမကိုးကားထားသောလေ့လာမှုများနှင့်သုတေသနအမှန်တကယ်ပြောဆိုရာကိုတစ်ခုချင်းစီဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့။
Prause ကိုးကား: Kohut et al ။ , 2017 ။ မြင် "babyish အမျိုးသမီးများနေ့မှအမုန်းတရားပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုတကယ် Is ၏ဝေဖန်မှု? ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများတစ်ကိုယ်စားလှယ်အမေရိကန်နမူနာ "(2016), တေလာ Kohut, ဂျိုဒီအယ်လ် Baer, ​​Brendan Watts အတွက် Nonusers သန်းနောက်ထပ်ကျားသာတူညီမျှသဘောထားများကို Hold
ဘယ်လိုတေလာ Kohut ကသူ့ပုံမှန်မဟုတ်ရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့တာလဲ မိမိအလေ့လာမှုရှုမြင်သုံးသပ်ကြ သာတူညီမျှ အဖြစ်: (1) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဘို့ပံ့ပိုးမှု, (2) Feminist ဖော်ထုတ်ခြင်း, အာဏာရာထူးကိုင်ပြီး (3) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (4) ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အချိန်ပြည့်အလုပ်ရှိပါတယ်သည့်အခါမိသားစုဘဝကြုံတွေ့နေကြရသည်ကြောင်းယုံကွညျနှင့်ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက် (5) ပိုပြီးကျင်းပခြင်း အစဉ်အလာမိသားစုဆီသို့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားတွေ။ ပိုပြီးလစ်ဘရယ်ဖြစ်လေ့ရသောလောကလူဦးရေ, ဝေးရှိ ဘာသာရေးလူဦးရေထက် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်း။ ဤအစံရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်အဆုံးမဲ့သည်အခြား variable တွေကိုလျစ်လျူရှုအသုံးပြုပုံခဲရေးသားသူတေလာ Kohut သူ porn အသုံးပြုသူများအပါဝငျသောအရာကိုသူ့ရဲ့လေ့လာမှုရဲ့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူစံအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူအတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သိတယ် "သာတူညီမျှ။ " ထို့နောသူကအားလုံးကိုပတ်ချာလည်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဖြစ်မှန်: နီးပါးတိုင်းလေ့လာမှုအမျိုးသမီးများ၏လိင်အရအခွင့်အရေးသို့မဟုတ် "ကို un-သာတူညီမျှ" အမြင်များမှလင့်များ porn အသုံးပြုမှုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအထဲက Check - 25 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - ဤ 2016 Meta-analysis သည်ကနေဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချုပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ synthesize ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက် 1995 နှင့် 2015 အကြား peer-ပြန်လည်သုံးသပ်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဂျာနယ်များထုတ်ဝေသုတေသနအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 109 လေ့လာမှုများပါရှိသောကြောင့် 135 စာပေတစ်ဦးကစုစုပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းထိတွေ့မှုနှင့်ဤအကြောင်းအရာပုံမှန်အစည်းအဝေး, နေ့တိုင်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်အကျိုးဆက်များတစ်အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတသမတ်တည်းသက်သေအထောက်အထားများ, သာ. ကြီးမြတ် Self-objectification, လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်နှင့်ရန်ဘက်ပြုမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ပိုမိုထောက်ခံမှုပေးအဆိုပါတွေ့ရှိချက်များနှင့် အမြိုးသမီးမြားအပျေါအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံစိတ်။ ထို့အပြင်ဤအကြောင်းအရာစမ်းသပ်ထိတွေ့အမျိုးသမီးအရည်အချင်းကို, စာရိတ္တနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တခုလျော့နည်းသွားအမြင်ရှိသည်ဖို့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်နေသည်။
၂။“ Porn သည်ဆက်ဆံရေးအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။
Prause ကိုးကား: Kohut et al ။ , 2016 ။ မြင် “ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏စုံတွဲဆက်ဆံရေးအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပါဝင်သူ - သတင်းပေးသူများ၊ အောက်ခြေမှတက်သည့်သုတေသနများ” ၏ဝေဖန်မှု၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေ Fisher၊ လန်းကမ့်ဘဲလ်.
အဆိုပါ သုံး ဒီလေ့လာမှုနှင့်အတူအဓိကပြဿနာများနေသောခေါင်းစဉ်:
၁- ကောဟတ်၏လေ့လာမှုသည်အရည်အသွေးမဟုတ်ဘဲအရေအတွက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုအကဲဖြတ်သောမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုနှင့်မဆို porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
2 - ဒါဟာကိုယ်စားပြုနမူနာမဆံ့ခဲ့ပါဘူး လေ့လာမှုအများစုအရရေရှည်ဆက်ဆံရေးတွင်မိန်းမငယ်လူနည်းစုသည် porn ကိုအသုံးပြုကြသော်လည်းဤလေ့လာမှုတွင်အမျိုးသမီးများ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် porn ကိုသူတို့ဘာသာသုံးကြသည်။ ထို့အပြင်မိန်းမ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်မှုကိစ္စကိုအစမှ (အချို့ကိစ္စများတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက) အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုနှုန်းထားသည်ကောလိပ်ကျောင်းသားယောက်ျားများထက်ထိုနှုန်းထက်မြင့်မားသည်။ တနည်းအားဖြင့်သုတေသီများသည်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်၎င်းတို့၏နမူနာကိုလွဲချော်သွားပုံရသည်။ အဖြစ်မှန်လား။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကြီးမားဆုံးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုစစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်း) မှကဏ္alပေါင်းစုံမှအချက်အလက်များအရအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများ၏ ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ပြီးခဲ့သည့်လက“ ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်” သို့လာရောက်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ 95 မှဒေတာများ (ပိုမိုကြည့်ရှုပါ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး, 2014) ။ ဤနှုန်းသည်နိမ့်ကျနေပုံရသော်လည်း (၁) ၎င်းသည်လက်ထပ်ထားသောအမျိုးသမီးများသာဖြစ်သည် (၂) သည်အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က။ "
ဘာသာရပ် porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်နှင့်အပေါ် ramble နိုင်ရှိရာမေးခွန်းများကို "အဆုံးသတ်ဖွင့်လှစ်" အသုံးပြုသောအဆိုပါလေ့လာမှု 3- ။ ထိုအခါသုတေသီများ ramblings ဖတ်ပါနှင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြီးနောက်, အရာအဖြေကို "အရေးကြီးသော" တို့ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက် (လည်?) သူတို့ကိုတင်ဆက်ဖို့။ တနည်းအားဖြင့်လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်မဆို variable ကိုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမပတျသကျဘူး။ ထိုအခါသုတေသီများ porn ရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုပိုမိုထူထောင်, သိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်များနှင့်တိုက်ရိုက်မေးခွန်းများကိုအလုပ်ပေးသောညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာရှိသမျှအခြားလေ့လာမှုများ, ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့သည်းခြေခဲ့ ချို့ယွင်းချက်။ ဒီကယ့်ကိုသိပ္ပံလား? ဦးဆောင်ရေးသားသူရဲ့ က်ဘ်ဆိုက် နှင့်သူ၏ ရန်ပုံငွေရှာမှာကြိုးပမ်းမှု အနည်းငယ်မေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။
အဖြစ်မှန်: အဖြစ်မှန်မှာတော့ 70 ကျော်လေ့လာမှုများဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ (လေ့လာမှု ၁ နှင့် ၂ တွင်ဖော်ပြထားသော meta-analysis သည်လေ့လာမှု ၃ တွင် porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ၃ ပတ်ကြာဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလေ့လာမှု ၄ မှ ၈ အထိသည် longitudinal ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကမိန်းမများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမှုနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်းလေ့လာမှုအများစုသည် (ဤစာရင်းကိုကြည့်ပါ) arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ) ။ အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့အထီးပါဝင်သောအားလုံးလေ့လာမှုများကိုသိရအဖြစ်ချိတ်ဆက် porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
Prause ကိုးကား: သူမရဲ့တစ်ကိုယ်တော်, ချို့ယွင်းချက်ရှိသောပုံမှန်မဟုတ် EEG လေ့လာမှု: Prause et al ။, 2015.
ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause သည်ဤရလဒ်များကို "porn စွဲ debunk ။ " မလုပ်ပဲသူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတရားဝင်အဘယ်အရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကို vanilla porn ၏ပုံရိပ်များကိုမထင်မမှတ်ပြုသည်။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒါကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ ကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကိုထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့် EEG ဖတ်ခဲ့သောကြောင့်, ခဲရေးသားသူနီကိုးလ် Prause သူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှု porn စွဲမော်ဒယ် falsifies ဆိုပါတယ်။ Prause သူမ၏ EEG ဖတ်မဟုတ်ဘဲလေ့ထက် "cue-reactivity ကို" အကဲဖြတ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်။ Prause မှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်ရင်တောင်သူမအဆင်ပြေသူမ၏ "မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" အခိုင်အမာအတွက် gaping ပေါက်လျစ်လျူရှု: ရင်တောင် Prause et al ။ 2015 မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်း cue-reactivity ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖူး, 25 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24။ သိပ္ပံလေးနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်မလွယ်ကူသည့်တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုနှင့်အတူမသွားဘူး, သိပ္ပံသက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်အတူသွား
ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်) 2015: ဖယ်စာနယ်ဇင်းများတွင်အများအပြားကလက်ခံတောင်းဆိုမှုများကနေ, အဲဒါကိုအလေးအနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရအဖြစ် Prause ရဲ့ 1 ကြက်ဥလေ့လာမှု, peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းရဲ့ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ); 2) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲအဘို့အပြမရ; 3) မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲဘို့အတည်ပြုမပေး။ တစ်ဦးကခိုင်လုံသောစွဲ "ဦးနှောက်လေ့လာမှု" ရပါမည်:
အဆိုပါဘာသာရပ်များအမှန်တကယ် porn စွဲဖြစ်ကြသည်အာမခံမှအတည်ပြုမေးခွန်းနှင့်အင်တာဗျူးများကိုအသုံးပြုပါ။
porn သုံးစွဲသူများ Prause ရဲ့နှစ်ခု EEG လေ့လာမှုများဤအရာတစုံတခုကိုမျှပြုရသေးသူမကျယ်ပြန့်ကောက်ချက်ဆွဲငင်ခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်သူတို့ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို porn အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်လိင်စွဲအပေါ်ထုတ်ဝေတိုင်းမှ neuroscience-based လေ့လာမှု lists: 54 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 29 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
မှတ်ချက်: ဤ 2018 တင်ဆက်မှုမှာတော့ဂယ်ရီ Wilson က5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျအပါအဝင် Prause et al ။, 2015; Kohut et al ။ , 2016; နှင့် Kohut et al။ , 2017: porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
Prause ကိုးကား: ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 ။ ဒါဟာ ED နှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာမှာအားလုံးလေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, Prause သူမ၏အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြေရှင်းပေးသောအဘယ်သူအားမျှလေးကနေဒေတာတွေကိုစုရုံးရန်ပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက် data တွေကိုစက္ကူအခြေစိုက်ခံရဖို့အခိုင်အမာထားတဲ့အပေါ်အခြေခံလေးလေ့လာမှုများအတွက် data တွေကိုမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးအဖြစ်နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နေဖြင့်ဤစာတမ်း peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းပါပဲ။ အဆိုပါကှာဟအသေးစားကွာဟချက်မဟုတ်, ပလပ်မရနိုငျသောတွင်း gaping ။ ထို့အပြင်စက္ကူအတုအယောငျဒါမှမဟုတျသူတို့ရဲ့ဒေတာကမထောက်ပံ့ခဲ့ကြကြောင်းအတော်ကြာတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ဤဝေဖန်မှု ၂ ခုကိုဖော်ထုတ်ပြသခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုတိုင်းတာသည်ဟု Prause ၏ပြောဆိုချက်အပါအ ၀ င်၎င်းကိုပြောဆိုခြင်းတစ်ခုတည်းကိုမထောက်ခံနိုင်ပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အမှန်တကယ်စိုက်ထူခြင်းမရှိသဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုင်းတာခြင်းမရှိပါ။ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု" ဘယ်တော့မှအကဲဖြတ်ခဲ့သည်!
Prause & Pfaus 2015 စာတမ်းကဘာသာရပ်များအားညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်သည့်အခါသူတို့၏နှိုးဆွမှုနှုန်းကိုမေးမြန်းရန်ပြောကြားခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုတိကျစွာအကဲဖြတ်။ မရပါ။ ဒေါက်တာအီဆန်ဘာ့ဂ်၏အယ်ဒီတာထံပေးပို့သောစာ (အပေါ်နှင့်ဆက်စပ်မှု) ပါ ၀ င်သည့်အားနည်းချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အဓိကစိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ဒါကြောင့်အဘို့အဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အံ့ဩ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus လာသောအခါသုံးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' arousal အဆင့်ဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများအတွက်4အခြေခံလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများတစ်3မိနစ်ရုပ်ရှင်, တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ခု 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာမြဲမြံစွာတည်င့် ရုပ်ရှင် ပို. arousal ဓာတ်ပုံများထက်များမှာဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမတရားဝင်သုတေသနအဖွဲ့ကအုပ်စုတစ်စုကဤဘာသာရပ်များအတူတကွသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. တောင်းဆိုမှုများလုပ်လိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုထိတ်လန်င်သူတို့ရဲ့စက္ကူစာရေးဆရာများအတွက် Prause နှင့် Pfaus ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်အားလုံး4လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တောင်းဆိုကြောင်းဖြစ်ပါသည်:
Nicole Prause ၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုများတွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသကဲ့သို့၎င်းသည်မှားသည်။ ဤအချက်သည် Prause နှင့် Pfaus တို့၏စာတမ်းသည်“ နှိုးဆွမှု” ဖြစ်သည်ဟုမပြောနိုင်သည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ်များအားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်သင်တစ် ဦး စီ၏တူညီသောလှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုရမည်။ ဒေါက်တာ Isenberg လည်းဘယ်လိုမေးတယ် ချီးကျူးခြင်း & Pfaus အဆိုပါ 2015 အခြေခံလေ့လာမှုများသာ 14စကေးတစ်ခု 1 ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ9ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' arousal အဆင့်ဆင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်. တဦးတည်းတဦးတည်း0စကေးတစ်ခု7အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုလိင်စိတ်နိုးထ ratings သတင်းပို့ကြဘူး, 1 စကေးတစ်ခု7ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်တကြိမ် Prause နှင့် Pfaus နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဆိုကြသည်:
အခြေခံစာတမ်းများကိုပြအဖြစ်ဤကြေညာချက်လွန်း, မမှန်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Prause နှင့် Pfaus သူတို့ရဲ့စက္ကူယောက်ျားများတွင် "arousal" ratings အကဲဖြတ်ကြောင်းဆိုကြသည်မရဘူးဘာဖြစ်လို့အခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလေ့လာမှုဘာသာရပ်များ '' ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်တူညီသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေးအသုံးပြုရမည်။ porn အသုံးပြုမှုတိုးတက်မှုစိုက်ထူသို့မဟုတ် arousal, ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာမှအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, အပေါငျးတို့သ Prause-generated ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်နှင့်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်ကြ၏ သူမ၏သုတေသနများကမထောက်ပံ့.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂျင်မ် Pfaus ၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ဂျာနယ်e"အတွက်မိဘ၏ဂျာနယ်ဖြစ်ပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပွင့်လင်း Access ကို” - ထုတ်ဝေသူ Prause & Pfaus 2015။ ဂျင်မ် Pfaus သုံးစွဲ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုတိုက်ခိုက်နေ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏အယူအဆ။ co-စာရေးဆရာ နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ဘဲလျက် PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ စာရေးသူကိုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် နီကိုးလ် Prause ရှိပါတယ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး နှင့်တစ် ဦး လုပ်။ ပြီးလျှင်, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များအားတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes အတူတူ # 12, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, ဂါယူဆပါသည် #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
အောက်ကလေ့လာမှုများအပြင်, ဤစာမျက်နှာတွင်ဆောင်းပါးနှင့်ဗီဒီယိုများပါ ၀ င်ပြီးကျွမ်းကျင်သူ ၁၆၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
80 ကျော်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချဖို့ porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အထီးပါဝင်သောအားလုံးလေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
porn မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, လေ့သတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော်: အားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ, သွယ်ဝိုက်, လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပိုမိုညစ်ညမ်းဆက်သွယ်ထားသော။
porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်အတန်းပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှဆက်စပ်နေကြသည်မဟုတ်။ အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်: At အနည်းဆုံးလေ့လာမှု ၂၅ ခုတွင်လိင်နှင့် porn စွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစေသည်။
သမိုင်းဆိုင်ရာ ED နှုန်းထားများ: အခါ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပထမဦးဆုံး 1940s အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည် Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့သူတို့အား 1-30 အတွက် 3% ထက်လျော့နည်း 30 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ယောက်ျားအတွက် 45% ထက်လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။ လုလင်တို့သည်ပေါ် ED လေ့လာမှုများ, ဒီ 2002 အတော်လေးကျဲနေမြဲနေစဉ်6အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးလေ့လာမှု Meta-analysis သည် အဆိုပါ5၏6ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40% ၏2အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံဖော်ပြခဲ့သည်။
2010 ကတည်းကကိုးလေ့လာမှုများ: 2010 ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖေါ်။ ဤသူကားအ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)။ အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ 9% ကနေ 40% အရွယ်ရှိနေစဉ် 14 လေ့လာမှုများမှာတော့ 37 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ နုပျို ED နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမ variable ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးကနောက်ဆုံး 2006-10 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီ streaming porn (20) ၏ထွန်းကားထက်အခြား (ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းကိုချဖြစ်ကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု 20 ကတည်းကတက်သာ 40%, အထီး 4-1999 အတွက်အဝလွန်နှုန်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည် - ဒီလေ့လာမှုကိုတွေ့မြင်).
ဗြောင်လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး Prause က ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှုကိုလူတိုင်းအားအများပြည်သူသိရှိစေရန်လှည့်စားစေခဲ့သည်။ သံမဏိ et al။ , 2013.
မတ်လ 6th, 2013 ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွင် နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် အကြောင်းကို blog post: သံမဏိ et al။ , 2013 "ဟုခေါ်Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်။ " ကနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်အဖြစ်၎င်း၏ oh-ဒါ-မှတ်မိလွယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်လွဲမှားစေသောဖြစ်ပါသည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဒါမှမဟုတ် neuroscience အဲဒီမှာပေးအပ်သည်။ အဲဒီအစား, ဒါဝိဒ်သည် Ley ရဲ့, မတ်လ 2013 blog post: ကန့်သတ်သူ့ဟာသူတစ်ခုတည်းချို့ယွင်းချက် EEG လေ့လာမှုမှ - သံမဏိ et al။ , 2013။ Ley ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်သည်ထင်ရှား5လအတွင်း ရှေ့မှာ Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုတရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Prause ရဲ့ဂရုတစိုက်ကြိုးကိုင် PR စနစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလိင်စွဲ debunked ခဲ့ဟုဆိုကာအပေါငျးတို့သခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမီဒီယာလွှမ်းခြုံမှု (!) ။ တွင် တီဗီအင်တာဗျူး နှင့်ထဲမှာ UCLA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက် နီကိုးလ် Prause သူမ၏ EEG လေ့လာမှုအကြောင်းကိုနှစ်ခုလုံးလုံးမထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများကိုဖန်ဆင်း:
Hypersexuality (လိင်စွဲ) အကောင်းဆုံးအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နေပါတယ် "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။ "
သူတို့အားတွေ့ရှိချက်မအတွက်တကယ်ရှိပါတယ် သံမဏိ et al ။ 2013 ။ တကယ်တော့, လေ့လာမှုနီကိုးလ် Prause ပြောဆိုထားသည်၏ဆန့်ကျင်ဘက်အတိအကျဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရှစ်သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း သံမဏိ et al ။ သမ္မာတရားကိုဖော်ပြရန်: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013
အားလုံးသဘောတူ သံမဏိ et al ။ အမှန်တကယ်အောက်ပါအချက်များကိုတွေ့ရှိရ:
မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကိုကြားနေဓာတ်ပုံများကို (တွေကိုသူတို့ရဲ့စွဲလမ်း related ထိတွေ့တဲ့အခါမှာမူးယစ်ဆေးစွဲပြုပါအတိုင်းအတူတူ) ကိုဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပိုမို cue-reactivity ကို (ပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်) ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုအတိအကျစွဲတူ!
porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီခဲ့ နည်းသော တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ (ဒါပေမယ့်) porn မှ masturbate မှအလိုဆန္ဒကိုလျှော့ချမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအာရုံခံစားမှုနှင့် desensitization နှစ်ဦးစလုံး၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်။
"ကျနော့်စိတ်ထဲနေဆဲသူမသည်လိင်ကိစ္စပုံရိပ်တွေအဘို့အမြင့်မား P300 ဖတ်သတင်းပေးပို့ကြောင်းပေးထား, ဦးနှောက်ဟာသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်သူမ၏ဘာသာရပ်များ '' မူးယစ်ဆေးစွဲတူသောဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး '' ကြောင်းဆိုကြသည်အဆိုပါ Prause မှာရှုတ်စရာပါတယ်။ ရုံရွေးချယ်မှုဟာသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါ P300 spikes ပြသသူကိုစွဲလိုပဲ။ သူမည်သို့အမှန်တကယ်ရလဒ်ဆန့်ကျင်ဘက်သောကောက်ချက်ဆွဲနိုင်? "
မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များ၏ပုံစံ 2013 စတင်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်ဆက်လက်။
အောက်ပါ tweets နှင့်မှတ်ချက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သိပ္ပံပညာ၏ Pasuse ၏ဘက်လိုက်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။
၎င်းသည် Prause ၏ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်အညီညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစေ့တစောင်းသိမြင်စေသည်။ မှတ်ချက်။ ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများလေ့လာမှုသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များကိုတင်ပြထားသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးရလဒ်များကိုဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းကို Prause မရေးရသေးပါ။ https://twitter.com/NicoleRPrause/with_replies).
မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် - သိပ္ပံပညာကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြရန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့်ကိုသုံးမည့်အစား၊ Prause သည် 2019 နှင့် 2020 အတွင်းသူမ၏ alias shill account (@BrainOnPorn) ကိုသီးသန့်နီးပါးအသုံးပြုခဲ့သည်။
Prause ကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ် 60 စာတမ်းများမဟုတ်ရင်ပြောပါ.
နှစ်ပေါင်းမဆိုပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေခဲ့သူ Prause, တစ်ဦး Tweet အတွက်ပါမောက္ခ GAIL ထမင်းစားခန်းတိုက်ခိုက်:
ဤသည်အများပြည်သူစော်ကားမှုတစ်ဦး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် အပ်ချည် ဘယ်မှာ Prause scathingly (နောက်ပိုင်း Prause ခြင်းဖြင့်ဖျက်ပစ်) porn အဆိုတော်များ၏အလွဲသုံးစားမှုလေ့လာဖို့ကြိုးစားဘို့ဆွီဒင်အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား assailed ။
နောက်ထပ် tweet နှစ်ဦးစလုံးတောင်းဆို GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် The New ကိုမူးယစ်ဆေး (FTND) မုသာဝါဒီများနှင့် "Anti-လိင်တူချစ်သူ" နှင့် "Anti-မိန်းမ" Fight:
Prause ကသူမအတွက်သီးသန့်ခွဲခြားထားခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာချို့ယွင်းချက်ရှိခြင်း၊ EEG ကိုသူမအတွက်ထောက်ခံမှုအတွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ - ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ 2015 တစ်ဒါဇင်ကျော် porn စွဲ (ဧပြီ, 3) ထောက်ပံ့အာရုံကြောလေ့လာမှုများချန်လှပ်စဉ် 2016, (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ).
ဒါက tweet ကိုရီးယားအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Seok နှင့် Sohn (နေဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းလေ့လာမှုစိုးရိမ်PubMed ဂျီ-Woo Seok များအတွက်လေ့လာမှုများရည်ညွှန်း) - မီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှုနှင့်ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတို့တွင်သာလွန်ယာယီ gyrus အတွက်ပြောင်းလဲငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှု (2018) ။ Prause မဟုတ်မမှန် "စာသားမဆိုရှက်ကြောက်မထိန်းချုပ်မှု" ရှိခဲ့သည်ဖော်ပြထားသည်:
ကျွန်တော်သူမကိုပြောဆိုချက်ကိုအမှန်ပင်အလွန်ရဲရင့်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်မယ့်အမှန်တရားရမတိုင်မီ porn သုံးစွဲသူများ3Prause လေ့လာမှုများသူတို့ခဲ့တည်ထောင်ရန်ပြအပါအဝင်ဘာမှအများကြီးအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်အဖြစ်မဟုတ်ဒါပေမယ့်, တကယ်တော့, porn စွဲ (Prause et al ။, 2013, သံမဏိ et al။ , 2013, Prause et al ။, 2015) ။ အမှန်မှာ၊ ဤ Prause လေ့လာချက် ၃ ခုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ရောဂါအခြေအနေများ၊ အခြားစွဲလမ်းမှုများ၊ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ အခြားအတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုများ၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ ဘာသာရေး၊ အသက်၊ လိင်၊
အဖြစ်မှန်၌ Seok & Sohn, 2018 သည်လိင်စွဲလမ်းမှု (PHB) အတွက်ဘာသာရပ်များကိုအသေအချာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ PHB ကိုယခင်လေ့လာမှုများမှချမှတ်ထားသော PHB ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု၍ လက်တွေ့အင်တာဗျူးများကို အခြေခံ၍ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဆရာဝန်နှစ် ဦး ကသတ်မှတ်သည်။ Seok & Sohn သည်အမျိုးမျိုးသော variable များကိုလည်းထိန်းချုပ်သည်။ Seok & Sohn, 1 မှသည်
ကျနော်တို့အောက်ပါအချက်များကိုကိုအသုံးပြု PHB နှင့်ထိန်းချုပ်မှုသင်တန်းသားများအဘို့ဖယ်စံ: 35 ကျော်အသက်အရွယ် သို့မဟုတ် 18 အောက်မှာ; ထိုကဲ့သို့သောအရက်သို့မဟုတ်လောင်းကစားကဲ့သို့သောအခြားစှဲ စွဲ, ယခင်သို့မဟုတ်လက်ရှိစိတ်ရောဂါ, အာရုံကြောနှင့်ဆေးဝါး မမှန်, လိင်တူဆက်ဆံခြင်းလက်ရှိဆေးဝါး အသုံးပြု. တစ်သမိုင်း လေးနက်သောဦးခေါင်းဒဏ်ရာနှင့်ရှိခြင်းယေဘုယျ MRI contraindications (ဆိုလိုသည်မှာ၏ တစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတ္တုပြင်းထန် astigmatism, ဒါမှမဟုတ် claustrophobia) ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Seok & Sohn 2018 စိတ်ကျရောဂါအပါအဝင်မျိုးစုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကို (အဘို့အထိန်းချုပ်ထား) အကဲဖြတ်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမှ
PHB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြားတွင် comorbid သဘောထားတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း, Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI) (Beck et al ။ , 1996), Beck တော့ပူပန် Inventory (Bai) (Beck နှင့်စတီယာရင်, 1990), နှင့် Barrett ရဲ့ Impulse စကေး II ကို (bis-II ကို) စေရန်, Lee က (1992) ကအဆင်ပြေအောင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ bis-II ၏ရမှတ် Impulse ၏သက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားမယ့် covariate အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ bis-II ကို dichotomized '' ဟုတ်ကဲ့ "(35) သို့မဟုတ် '' အဘယ်သူမျှမ" (1) အဖြေတွေကိုနှင့်အတူ0မေးခွန်းများကိုပါဝင်ပါသည်။ စုစုပေါင်းရမှတ် Impulse ပိုမိုအဆင့်ဆင့်ညွှန်ပြပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်အတူ,0ထံမှ 35 ဖို့နေကြပါတယ်။ အားလုံးပါဝင်သူများ၏လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဇယား 1 အတွက်ပေးအပ်သည်။
ရိုးရှင်းစွာ ထား. , Prause လုံးလုံးလြားလြားလိမ်ညာ။
ဒီအကြောင်းတစ်ဦးက tweet လေ့လာမှုဝေဖန်သုံးသပ်ချက်အဘို့အ posted (ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးကတည်းက Neuropsychopharmacology), Prause မဟုတ်မမှန် "Anti-porn အုပ်စုများ" ဟုစွဲလမ်းမှ neuroscience လယ်ပြင်၌ထိပ်တန်းသုတေသီတွေအပါအဝင်ယင်း၏9သုတေသီများ () အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာနဲ့သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအသစ်ခဲ့ကြောင်း "မကောင်းတဲ့သိပ္ပံ။ " ဒီမှာပုံ Prause ရဲ့ tweet () တူညီသောပျေါမှာထငျရှား လေ့လာမှုအဖြစ်စာမျက်နှာ (ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု)ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ခါတိုင်းလိုအဖြစ်သူမ၏တောင်းဆိုမှုများကိုလုံးဝအခြေအမြစ်မရှိဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လေ့လာမှုရဲ့ ယခုတရားဝင်ထုတ်ဝေ လူအပေါင်းတို့သည်နားမလည်ခုခံပေမယ့်။ ဒုတိယအချက်မှာသူ့ရဲ့စာရေးဆရာများ 2016 အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာကွန်ဖရများအတွက်ဥရောပလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဒီကအရမ်းသုတေသနအတွက်ပထမဦးဆုံးဆုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တတိယအချက်စာရေးသူ Prause ရဲ့စိတ်ကူးယဉ် "Anti-porn အုပ်စုများ" နဲ့မျှဆက်နွယ်မှု (ရသော Prause ဘယ်တော့မှအမည်များ) ရှိသည်။
ဥပမာ, ခဲရေးသားသူဒေါက်တာဖြစ်ပါသည် မာတေယူချ် Gola, UC San Diego မှမှာပညာရှင်သွားရောက်ခြင်းနှင့်ထားပြီးသူ 50 သို့မဟုတ်ဒီတော့စာပမြေား နာမတော်သည်။ နောက်ထပ်စာရေးဆရာဖြစ်ပါသည် ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကမာ့ခ် Potenza MD, Ph.D,, အဘယ်သူသည် (Prause ရဲ့လိဂ်ထဲကလမ်း) ကကမ္ဘာ့ဉီးစွဲသုတေသီတဦးတည်းဖြစ်ဖို့အများကြီးအားဖြင့်စဉ်းစားသည်။ တစ်ဦးက PubMed ရှာဖွေရေး ဒေါက်တာ Potenza အားဖြင့် 460 လေ့လာမှုများကျော်ပြန်။
ဒီ tweet ထဲမှာဘာမှမပါဘူး။ လေ့လာမှုမှာ“ လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ” ကိုအကဲဖြတ်မထားဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်သူများကိုသာအကဲဖြတ်သည်။ ဤသည်မှာ Prause သည် porn အသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏ပထမ ဦး ဆုံး EEG လေ့လာမှုတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013
Prause စကားပြောအချက်များနှင့်အတူ AASECT ပေးပါသည်:
AASECT အသင်းဝင်များသည် Prause ၏တစ်ခုတည်းသောသက်သေသာဓကဖြစ်သောသူမ၏ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေတွင် ၁၃ ကြိမ်ဝေဖန်ခဲ့သည်ကိုမသိရပေ။
သံမဏိ et al။ , 2013 (ဝေဖန်မှု 8): ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013 ။ ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု.
Prause et al။ , 2015 (ဝေဖန်မှု 10): ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015။ ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု.
သို့သော်ထိုထက်မကရှိသည်။ Prause သည်သုတေသန၏အခြေအနေကို AASECT သို့တင်ပြခဲ့သည်။ အများစုမှာပညာရှင်များမဟုတ်သောကြောင့် AASECTers သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကြေငြာသည့်ကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ မဟုတ်ဘူး။ ပထမ ဦး စွာ AASECT သည်သိပ္ပံနည်းကျအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်အခိုင်အမာထောက်ခံမှုကိုဘာမျှမဖော်ပြခဲ့ပါ။ အဆိုပါစွဲမော်ဒယ်ထောက်ပံ့ 55 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ).
အာရုန်သည်မကြာမီဤသည်၌ဝန်ခံအဖြစ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ AASECT ရဲ့ကွှေးကျွောခွငျးမိုက်ကယ်အာရုန်နှင့်သိက္ခာမဲ့ "ပြောက်ကျားနည်းဗျူဟာ" ကို အသုံးပြု. အနည်းငယ်သည်အခြား AASECT အဖွဲ့ဝင်များကတဆင့်တွန်းပို့ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ post: analysis: ဘယ်လို AASECT လိင်စွဲလမ်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Created ခဲ့။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးထံမှကောက်နုတ်ချက် လိင်စွဲလမ်းပေါ်ဒီကုဒ်ဒါ AASECT ရဲ့ "ရာထူးအာရုန်၏ blog post: အကျဉ်းချုပ်:
နောက်ထပ်မုသား။ အဆိုပါ2အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က Prause နှင့် Valerie Voon ခဲ့ကြသည်။ porn စွဲအပေါ်မျိုးစုံဦးနှောက်လေ့လာမှုများထုတ်ဝေခဲ့သူ Voon, ကြည့်ရှု (သူမညစ်ညမ်း / လိင်စွဲရှိကွောငျးဖျောပွထားသညျ့ဘယ်မှာမျိုးစုံပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း / မှတ်ချက်အထုတ်ဝေထားပါတယ်: အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? 2017) ။
တိုက်ခိုက်ခြင်း ဒီ Valerie Voon ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု porn စွဲအပေါ်:
၁) Kuhn ဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများမဟုတ်သူများ (Voon's များဖြစ်သည်)၊ ၂) လေ့လာမှုနှစ်ခုသည် ဦး နှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ Prause ရဲ့ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကို porn အသုံးပြုမှုမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်သို့ပြောင်းရန်ကြိုးစားသည့်ဘုံနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ Prause ၏ပုံမှန်နည်းဗျူဟာဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်ရေးသားခဲ့သည်။ Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ပြဿနာ (2016) ဖြစ်ပါသည်ငြင်းဆိုသည်။
ASAP သိပ္ပံဗီဒီယိုအကြောင်းတစ်ဦးက tweet: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏သိပ္ပံ (SFW)
ချီးကျူးထောပနာ (၁)“ ဘာသာရေးပညာရှင်များ” ကိုမကိုးကားပါ။ ၂) သူ၌အာရုံကြောလေ့လာမှုတစ်ဒါဇင်မပါရှိပါ။ အားလုံး 40 neuro လေ့လာမှုများ ပင်ကို (porn စွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ Prause ၏ကိုယ်ပိုင် EEG လေ့လာမှု)
အခြားခေါ်ဆို porn / လိင်စွဲအပေါ်အာရုံကြောလေ့လာမှု မကောင်းတဲ့သိပ္ပံ, ထိုအာရုံကြောတွေ့ရှိချက်အဘို့အဘယ်အရာကိုမျှပေမယ့်ညစ်ညမ်းအပြစ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေ:
မှတ်ချက် - Prause ၏အကြီးအကျယ်ချို့ယွင်းချက်ရှိသော EEG လေ့လာမှုများသည်ဘာမျှမထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ သူမ သံမဏိ et al ။ , 2013 1) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်: လေးနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော (အထီး, အမြိုးသမီး, Non-လိင်ကွဲ); 2) ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည် စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စှဲအဘို့အပြမရ; 3) လေ့လာမှုခဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု; 4) မေးခွန်းခဲ့ကြသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲဘို့အတည်ပြုမပေး.
NBC သည် NBC ၏ရာထူးနှင့်ဆယ်စုနှစ် ၆ ခုသုတေသနနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းစာရေးသူအားဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ကြောင်း NBC သို့ပြောကြားခဲ့သည်
Prause အမြဲအထူးသဖြင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း, စွဲလမ်း၏အယူအဆတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ (Porn စွဲနေတဲ့အမူအကျင့်စွဲဖြစ်ပါသည်။ )
1) Porn အဖြစ်အခြားစှဲကဲ့သို့ဖြစ်၏ 40 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ ထုတ်ဖေါ်။
၂။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းမှလေ့လာခြင်းသည်“ အကျိုးအမြတ်အများဆုံး” ကိုမတွေ့ရှိပါ။
ယင်းကိုရည်မှတ်အမှားကိုအမှန် Gottman ရဲ့ဆောင်းပါး:
1) ကမှ neuroscience တက်နေ့စွဲဖို့ဖြစ်တယ်။
၂။ Porn ၏စုံတွဲများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
နီးပါး 60 လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့အထီးပါဝင်သောအားလုံးလေ့လာမှုများကိုသိရအဖြစ်ချိတ်ဆက်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများပိုကောင်း (သို့မဟုတ်ကြားနေ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှအမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနေစဉ်, အများဆုံး (ဒီစာရင်းကိုကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ်: arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ).
နီကိုးလ် Prause နှင့်ဒါဝိဒ် Ley တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်တော်မူပြီးမှ, porn-သွေးဆောင် ED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေကြသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုပြုလုပ်နေစဉ်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းစာရေးသူအားမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ နီကိုးလ် Prause ရှိပါတယ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး နှင့်တစ် ဦး လုပ်။ ပြီးလျှင်, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များအားတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes အတူတူ # 12, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, ဂါယူဆပါသည် #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
Prause သူမ၏ tweet များ၏ content နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့ဆက်စပ်လေ့လာမှု (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့ ED စေစဉ်းစားယောက်ျားအကြောင်းကိုမဟုတ်ခဲ့):
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုရည်မှတ် reality? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 42 လေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။ နီးပါး 75 လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ (အမျှဝေးကျနော်တို့အထီးပါဝင်သောအားလုံးလေ့လာမှုများကိုသိရအဖြစ်ချိတ်ဆက်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ ) porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။ အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)။ အထက်ပါလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 160 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
Prause ပိုသာဓက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများတိုက်ခိုက်ခြင်း။ Prause သူမ၏ကိုးကားတဲ့ Lay ဆောင်းပါးဆက်သွယ်:
Prause နဲ့ Jim Pfaus (အတူတကွ porn စွဲ debunk ဖို့အားနည်းကြိုးပမ်းမှု cobbledချီးကျူးခြင်း & Pfaus, 2015) ။ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 ED နှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာမှာအားလုံးလေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, Prause သူမ၏အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြေရှင်းပေးသောအဘယ်သူအားမျှလေးကနေဒေတာတွေကိုစုရုံးရန်ပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက် data တွေကိုစက္ကူအခြေစိုက်ခံရဖို့အခိုင်အမာထားတဲ့အပေါ်အခြေခံလေးလေ့လာမှုများအတွက် data တွေကိုမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးအဖြစ်နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နေဖြင့်ဤစာတမ်း peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းပါပဲ။ အဆိုပါကှာဟအသေးစားကွာဟချက်မဟုတ်, ပလပ်မရနိုငျသောတွင်း gaping ။ ထို့အပြင်စက္ကူအတုအယောငျဒါမှမဟုတျသူတို့ရဲ့ဒေတာကမထောက်ပံ့ခဲ့ကြကြောင်းအတော်ကြာတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ဤအ2ဝေဖန်မှုဖော်ထုတ်အဖြစ်က၎င်း၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့မပြုခဲ့:
ဆောင်းပါးသည် Prause ၏လှည့်ဖျားနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ဟုတ်ကဲ့တစ်ဦးကပ်ရောဂါလည်းမရှိ: ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
မာတင် Daubney porn သင်တို့သည်လူအတွက် ED ဖြစ်စေတဲ့ကပြောပါတယ်သူကို NHS လိင်ကျွမ်းကျင်သူ featuring အနေနဲ့ဆောင်းပါး tweets: ဘီဘီစီ: အွန်လိုင်း porn လွယ်ကူ access ကိုယောက်ျား၏ကျန်းမာရေး '' မထိခိုက်စေ '' သည် NHS ကုထုံးကပြောပါတယ်။ Psychosexual ကုထုံး Angela ဂရက်ဂိုရီ (2016) ။
porn စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ခံသူ @PornPanic tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင် Prause တိုက်ခိုက်မှုများ။
Next Prause ကလိင်ကုထုံးပညာရှင်များကို "သိပ္ပံပညာကင်းမဲ့ခြင်း" ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ယောက်ျားများသည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်စေခြင်းအားဖြင့် porn-induced လိင်ပြproblemsနာများကိုအောင်မြင်စွာကုသသောကြောင့်
တစ်ဦးမုသာနှင့်အတူ, Prause မှ ပို. :
Daubney ကသူသည်သူ၏အကြောင်းအရာများကို ၂၉ မျက်နှာပါသောအစီရင်ခံစာမှလူငယ်များကိုကုသပေးသည့်ဆရာ ၀ န်များမှရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Prause က“ ငါတို့” ကပြန်ပြောသည်ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015) လူနာများအားကုသပေးသည့်ဆရာ ၀ န်များထံမှအချက်အလက်များကိုလည်းကောက်ယူသည်။ အဲဒါမုသားပဲ။ လူနာမရှိဘူး၊ အားလုံးကလက်ကမ်းကြော်ငြာတွေကနေစုဆောင်းတာ! မှ ချီးမွမ်း & Pfaus, 2015:
Nontreatment-ရှာကြံယောက်ျား (N ကို = 280) နာရီတွင်၎င်းတို့၏အပတ်စဉ်ပျမ်းမျှအား VSS ကြည့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုရပ်ရွာထဲတွင်နှင့် Pocatello, အိုင်ဒါဟိုနှင့်သည် Albuquerque, နယူးမက္ကစီကိုစိတ်ပညာသင်တန်းများအနေဖြင့် Flyer များကစျေးဝယ်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ထပ်။ ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သောအခြားလေ့လာမှုလေးခုမှ Prause & Pfaus အတွက်ဘာသာရပ်များနှင့်အချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောထားသည်။
နှစ်ရာရှစ်ဆယ်လူတို့သညျပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာတို့ကကောက်ယူလေးကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်ခဲ့။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုထုတ်ဝေသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာရှိပါတယ်ပြီ [33-36],
လေးပါးလေ့လာမှုများ (၏မှတ်ချက်ချ, အဘယ်သူအားမျှအဖြစ်လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4) porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်။ တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုသာ 47 ယောက်ျားတို့အတွက် erectile လည်ပတ်ရမှတ်များ, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ခဲရေးသားသူ Prause Tweet ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လေ့လာမှုအကြောင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, သင်သိရ 280 ဘာသာရပ်များ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း, သောသူတို့သည်ခဲ့ "အိမ်မှာအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ။ " သို့သော်လေးပါးအခြေခံလေ့လာမှုများသာပါရှိသောခဲ့ကြသည် 234 အထီးဘာသာရပ်များ။ 280 သတင်းပို့ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်အတိုင်းဤလေ့လာမှုရဲ့စားပွဲတင် 1 အတွက်တစ်ချိန်ကပုံပေါ်နေချိန်တွင် "ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်ဆက်ဆံမှုမိတ်ဖက်," ဒါနံပါတ်များ 262, 257, 212 နှင့် 127 လုပ်ပါ။ သို့သျောလညျးဤနံပါတ်များကိုအဘယ်သူအားမျှကိုသာ4အခြေခံလေ့လာမှုများအစီရင်ခံဘာမှနှင့်ကိုက်ညီ 47 ယောက်ျား ယင်းစိုက်ထူမေးခွန်းလွှာကိုယူ။
အဟောင်း Tracy Clark က-Flory ဆောင်းပါး
“ အခြေအမြစ်မဲ့သောထိတ်လန့်ခြင်း” အကြောင်းဘာမှမပြောပါ။
Prausea"ကိုသိပ္ပံပညာရှင်" Paula ခန်းမခေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုအပေါ်ခန်းမရဲ့အမြင်များကိုဂေါ်:
လူသိများ "သိပ္ပံပညာရှင်"? အဲဒီတောင်ကိုမှန်ကန်စကားလုံးမဟုတ်ဘူး။ Prause ရဲ့ tweet Paula ခန်းမဂျာနယ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ porn စွဲ၏ဤကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု (အပေါ်တစ်ဦး coauthor အဖြစ်စာရင်းသွင်းပြီးနောက်တစ်ဦးကတစ်လလျှင် လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း): compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က, 2016။ Prause သည် Hall ကိုဂရုမစိုက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူမသည်ဆောင်းပါးအတော်များများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုမှပြသခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခန်းမ၏ရေးသားသူဖြစ်ပါတယ် porn / လိင်စွဲလမ်းအပေါ်3စာအုပ်များ.
Dan Savage သည် Gail Dines များကိုသတ်ခဲ့သည်ဟုပြောခြင်း (သူသည်သုတေသနနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်) Prause သည် ED အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအပြစ်တင်ရန်မည်မျှကြာသည်ကိုသတိပြုပါ။
“ ညစ်ညမ်းသောအရာမှန်သမျှ” Prause နှင့် Ley ၏စစ်တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ငိုသည်။ ကြည့်ပါ - Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်ပြဿနာ (2016) ဖြစ်ပါသည်
Prause ကြောင့်သူမပြင်းထန်စွာလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ၏သဘောတရားများကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ 2014 Prause ၏နွေရာသီမှာတော့သူမ၏ SPAN Lab က website တွင်အောက်ပါအသိပေးစာတင်လိုက်တယ်။ သငျသညျ Prause (ကနေရာလေးကိုဟိုက်ပါလင့်ခ်များပါဝင်သည်) ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့မှ၎င်းတို့၏ကုသအစီရင်ခံရန်လိင်စွဲကုသခံနေရအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်
ဤသည်ကိုလည်းအဖြစ်သိက္ခာမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပြီး, အဆိုပါ DSM နှင့်ရောဂါများအတွက် ICD မစ်ငွေကြေးပြန်လည် diagnoses နှစ်ဦးစလုံး။ အမှု၌မည်သူမဆိုဒီလွဲချော်, Prause ဒီ tweet အတူကတက်နောက်တော်သို့လိုက်:
တစ်ဦးကတစ်လလျှင်အကြာတွင် Prause ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံလိင်စွဲကုထုံးအစီရင်ခံရန်နောက်တဖန်ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသတိပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာလွတ်လပ်ပြီးလွယ်ကူပါတယ်!
Prause တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်မှာညွှန်ကြားထား tweets နှင့်အတူရပ်တန့်မထားဘူး။ သူမသည် ups သူမ၏ဂိမ်း, မဟုတ်မမှန်လိမ်လည်ကုထုံး၏ psychotherapists စွပ်စွဲ။ ဒီအထူးသဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (1) diagnoses ကြောင်းပေးထားတစ်စိတ်ပညာရှင်များအတွက်မဟုတ်ဘဲမဆင်မခြင်မဟုတျပါဘူး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ICD-10 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ် နှင့် DSM အလိုလို (2) ပုဒ်မ F52.8 ခိုင်လုံသော, ငွေကြေးပြန်လည်ရောဂါအဖြစ်အလွန်အကျွံလိင် drive ကို၏အဖြေရှာတဲ့တရားဝင်မှုအသိအမှတ်ပြု? တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင် Prause မှားနှင့် unethical ပြုမူသည်။
Prause နှင့်သူမ၏စျေးကြီး PR စနစ်ကုမ္ပဏီတခု မီဒီယာများတွင်ဆောင်းပါးများအားမရမှာအလွန်အောင်မြင်ဖြစ်ကြသည်။ ထဲမှာ Daily သတင်းစာ Dot ဆောင်းပါး၊ Prause သည်ကမ္ဘာ့ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? မတည်ရှိပါဘူး
YBOP လုံးဝ dismantles Daily သတင်းစာ Dot ဆောင်းပါး: "သင် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ပူဖြစ်သင့်သလဲ" Debunking - အနေဖြင့် နေ့စဉ် Dot ရဲ့ Claire Downs (2018) ။
Prause, Ley နှင့်များ၏ Justin Lehmiller Playboy မဂ္ဂဇင်းသည်အပြာစွဲစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများကို“ ဖယ်ထုတ်” ရန်ပူးပေါင်းလေ့ရှိသည်။ ဒါ ဧပြီလ 2018 blog post: Justin Lehmiller အသုံးပြုပုံ Prause နှင့် Ley အားဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ Tweet လုပ်ခဲ့ပြီ။ ဥပမာတစျခု:
ထိုသို့မည်သူမဆိုအံ့သြမနေသင့် Playboy စာရေးဆရာ Lehmiller Prause ၏ရင်းနှီးသောမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီး, မှာသူမ၏ featured ဘဲလျက် မိမိအဘလော့ဂ်ပို့စ်များ၏အနည်းဆုံးဆယ်ခု။ porn အသုံးပြုမှုကိုအဘယ်သူမျှမပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်များနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ / ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မတည်ရှိပါဘူး: ဤနဲ့တခြား Lehmiller ဘလော့ဂ်များအတူတူပင်မှားယွင်းသောဇာတ်လမ်းများရှည်။ YBOP အတုအယောင်အဖြစ် Lehmiller ဆောင်းပါးဖျောထုတျ: (2018) "လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်အတွက်ထအပေါ်တကယ်ပဲသည် Erectile အလုပ်မဖြစ်" ကို Justin Lehmiller ရဲ့ Debunking
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အမေရိကန်ရေတပ်မှဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုများဖြစ်ကြပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာညီလာခံတွင်အချက်အလက်များကိုတင်ပြခဲ့သည်။ လေ့လာမှု porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) တို့အကြား link ကိုရှုမြင်
သူတို့ဟာဘယ်သူ့ကိုမှဖုံးကွယ်မထားဘူး (Prause ကဒီညီလာခံကိုမတက်ခဲ့ဘူး) ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်နှစ် ဦး သည် MDPI စာရွက်တွင်ရှိနေပြီး Prause ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်ကြိုးစားနေသည် - 2015 မှစ. 2018 မှတစ်ဆင့်: အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ (။ ပန်းခြံ et al, 2016) ရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြန်ရုပ်သိမ်း
ရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးပြီးမယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ Prause အပါအ ၀ င်ဆရာဝန် ၇ ယောက်စလုံးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပျဉ်ပြားများသို့၎င်းတို့ထံစာရွက်ပေါ်တွင်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပျဉ်ပြားများသည် Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောနှောက်ယှက်မှုများကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
Prause ကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကနေ ၁၅ နှစ်အတွင်းမှာအသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားတွေအတွက် ED နှုန်းမတိုးဘူးလို့ဆိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကဒီအပြောင်းအလဲအတွက်အကောင့်လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လို့ပဲ။ Prause ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ“ ညစ်ညမ်းသောအရာမှန်သမျှ” ဖြစ်သည်။
Prause လဲလျောင်းနေသည်။ အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
သမိုင်းဆိုင်ရာ ED နှုန်းထားများ: အခါ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပထမဦးဆုံး 1940s အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည် Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့သူတို့အား 1-30 အတွက် 3% ထက်လျော့နည်း 30 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ယောက်ျားအတွက် 45% ထက်လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။ လုလင်တို့သည်ပေါ် ED လေ့လာမှုများ, ဒီ 2002 အတော်လေးကျဲနေမြဲနေစဉ်6အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးလေ့လာမှု Meta-analysis သည် အဆိုပါ5၏6ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40% ၏2အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ 6th လေ့လာမှု 7-9% ၏ကိန်းဂဏန်းများကဖော်ပြခဲ့သည်ပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့မေးခှနျးကို5သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မရနိုင်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရန်ဘူး ရှည်ကြာသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: "သင်သည်အမှုရောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိခဲ့ ဘယ်အချိန်မဆို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်? "
2006 အခမဲ့, streaming porn ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များရဲ့အဆုံးမှာမျဉ်းကြောင်းပေါ်သညျ လာ. ချက်ချင်းလူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ ဤ အခြေခံကျကျ porn စားသုံးမှု၏သဘောသဘာဝကိုပြောင်းလဲ။ သမိုင်း၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ကြည့်ရှုမည်သည့်ချောင်းမြောင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session တစ်ခုအတွင်းမှာလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူမြင့်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2010 ကတည်းကကိုးလေ့လာမှုများ: 2010 ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကိုးလေ့လာမှုများ erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖေါ်။ အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ 9% ကနေ 40% အရွယ်ရှိနေစဉ် 14 လေ့လာမှုများမှာတော့ 37 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ နုပျို ED နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမ variable ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးကနောက်ဆုံး 2006-10 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီ streaming porn (20) ၏ထွန်းကားထက်အခြား (ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းကိုချဖြစ်ကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု 20 ကတည်းကတက်သာ 40%, အထီး 4-1999 အတွက်အဝလွန်နှုန်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည် - ဒီလေ့လာမှုကိုတွေ့မြင်) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်မကြာသေးမီခုန်မြောက်မြားစွာ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့် arousal ဖို့ "porn စွဲ" ၏ထုတ်ဝေရန်နှင့်တိုက်ဆိုင်။
ယခုသူသည် US ရေတပ်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်များအား ၂၀၁၇ အမေရိကန် Urological Association Conference တွင်အချက်အလက်များကိုတင်ပြသူဟုခေါ်ဆိုသည်။လေ့လာမှု porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) တို့အကြား link ကိုမြင်သည်။ သူမသည် ၃ နှစ်ကြာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ 2015 မှစ. 2018 မှတစ်ဆင့်: အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ (။ ပန်းခြံ et al, 2016) ရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြန်ရုပ်သိမ်း.
ဒါဟာညီလာခံမှာသေး-to--ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကိုဒေတာတင်ဆက်ဖို့ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ Prause ကအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုတော်မူပြီ။ ဒီအထဲက Check: မတ်လ 6th, 2013 ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွင် နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် အကြောင်းကို blog post: သံမဏိ et al။ , 2013 "ဟုခေါ်Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်။ " ကနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်အဖြစ်၎င်း၏ oh-ဒါ-မှတ်မိလွယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်လွဲမှားစေသောဖြစ်ပါသည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဒါမှမဟုတ် neuroscience အဲဒီမှာပေးအပ်သည်။ အဲဒီအစား, ဒါဝိဒ်သည် Ley ရဲ့, မတ်လ 2013 blog post: ကန့်သတ်သူ့ဟာသူတစ်ခုတည်းချို့ယွင်းချက် EEG လေ့လာမှုမှ - သံမဏိ et al။ , 2013။ Ley ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်သည်ထင်ရှား5လအတွင်း ရှေ့မှာ Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုတရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ တလအကြာ (ဧပြီ 10th) စိတ်ပညာယနေ့တွင် ယင်း၏ unsubstantiated တောင်းဆိုမှုများနှင့်အခြားမည်သူမဆိုမှသူမ၏အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုများကို Prause ရဲ့ငြင်းဆန်ပတျဝနျးကငျြအငြင်းပွားစရာများကြောင့်အယ်ဒီတာများအတည်မပြုရသေးသော Ley ရဲ့ blog post: ။
အဆိုပါ Ley နှင့် Prause PT blog post: Prause EEG လေ့လာမှုအကြောင်းကိုနီးပါးအရာအားလုံးအတု: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013
Prause သည်အထက်ပါ US ရေတပ်ညီလာခံတင်ဆက်မှုကိုအလွန်စွဲလမ်းခဲ့ပြီးသူမမြင်တွေ့ခဲ့သည့်အချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (စာနယ်ဇင်းကောင်စီ) ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ သူမ၏“ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်” သည်ရေတပ်၏အစီရင်ခံစာနှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း (သူမအားဖြုတ်ချပစ်လိုက်ခြင်း) -
ဤတွင်တစ်ဖန်၊ Prause မှတီထွင်ထားသော“ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ” မဟုတ်ပါ၊ ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။ 90 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ (အမျှဝေးကျနော်တို့အထီးပါဝင်သောအားလုံးလေ့လာမှုများကိုသိရအဖြစ်ချိတ်ဆက်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ ) porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
Prause မဟုတ်မမှန်4အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများအနေဖြင့်သူမ၏အတူတကွ cobbled, ကိုက်ညီမှု data တွေကိုပြဆိုပါတယ် causation (ချီးကျူးခြင်း & Pfaus, 2015) ။ အကြွင်းမဲ့အာဏာဒဏ်ဍာရီ။
Prause နဲ့ Jim Pfaus ။ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 ED နှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာမှာအားလုံးလေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, Prause သူမ၏အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြေရှင်းပေးသောအဘယ်သူအားမျှလေးကနေဒေတာတွေကိုစုရုံးရန်ပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက် data တွေကိုစက္ကူအခြေစိုက်ခံရဖို့အခိုင်အမာထားတဲ့အပေါ်အခြေခံလေးလေ့လာမှုများအတွက် data တွေကိုမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးအဖြစ်နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နေဖြင့်ဤစာတမ်း peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းပါပဲ။ အဆိုပါကှာဟအသေးစားကွာဟချက်မဟုတ်, ပလပ်မရနိုငျသောတွင်း gaping ။ ထို့အပြင်စက္ကူအတုအယောငျဒါမှမဟုတျသူတို့ရဲ့ဒေတာကမထောက်ပံ့ခဲ့ကြကြောင်းအတော်ကြာတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ဤအ2ဝေဖန်မှုဖော်ထုတ်အဖြစ်က၎င်း၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့မပြုခဲ့:
အမျိုးသမီးနောမိ Wolf မှာယူခြင်း။ Prause ကမှားယွင်းစွာဖော်ပြသည်မှာ porn သွေးဆောင်ခြင်းကို ED ပြိုကွဲစေသော“ စမ်းသပ်လေ့လာမှု” ၃ ခုရှိသည်။ မရှိ။
အဖြစ်မှန်မှာ7၏ဤစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး 45 လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်။ ဤရွေ့ကား porn-သွေးဆောင် ED အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းတစ်ခုတည်းသောစမ်းသပ်လေ့လာမှုများဖြစ်ကြသည်။
Quora အပေါ်ချီးမွမ်း - မတိုင်မီ သူမဂယ်ရီ Wilson ကနှောင့်ယှက်ဘို့ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်:
နောက်တစ်ခါ Prause က ED ကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့“ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ” လို့မှားယွင်းစွာဖော်ပြထားတယ်။ သူမဘာမှမပြောပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူး။
အဖြစ်မှန်မှာ6၏ဤစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး 28 လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်။ ဤရွေ့ကား porn-သွေးဆောင် ED အကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းတစ်ခုတည်းသောတည်ဆဲစမ်းသပ်လေ့လာမှုများဖြစ်ကြသည်။
Prause tweets တစ်ဦး ဂေါကလူကြီး သူမ 40 အောက်မှာလူ ED နှုန်းထားများတိုးမြှင့်ကြပြီမဟုတ်ဟုကိုးကားသည်အဘယ်မှာရှိဆောင်းပါး:
Prause သူမ၏တောင်းဆိုမှုများအတှကျအဆိုထောက်ခံမှုကိုးကားရန်ပျက်ကွက်ပါဘူးမသာ, ပညာရှင်တွေရဲ့ (Prause ED တခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သည်နှင့်ကုသမပါဘူး) မဟုတ်ရင်ယုံကြည်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
အတော်များများကယုံကြည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ထို့အပြင်ခွန်အားမရှိခြင်းအဖြစ်လူသိများ (ED), လူပျိုတို့ပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်လာနေသည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု ဗြိတိန်အမျိုးသား ၂၀၀၀ အနက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အခက်အခဲရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအများအပြားပိုပြီးလုလင်တို့သည် ED ၏စောဒကသူတို့ကိုလာမယ့်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့ပါ။ "ငါသည် 30 နှစ်ပေါင်းလူနာကုသခဲ့ကြ, ကြှနျုပျတို့ရန်အသုံးပြုသည်ထက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပိုပြီးလုလင်တို့သည်မြင်လျှင်နေမသံသယရှိပါတယ်" ဟုအဆိုပါဒေါက်တာဒေါက်ဂလပ်ဗေ့ခ်ျကပြောပါတယ် အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျအရေးစင်တာ, Harley လမ်းနှင့်မန်ချက်စတာအခြေစိုက်။ “ မကြာခဏဆိုသလို၊ ဒီလူတွေဟာကျန်းမာသန်စွမ်းနေပုံရတယ်။ ပါးလွှာတယ်၊ လေ့ကျင့်တယ်၊ ငယ်တယ်၊ မင်းက 'ဘာကြောင့်ဒီလူတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတာလဲ။ ' "
အဖြစ်မှန်? အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
နောက်တဖန်၊ porn သွေးဆောင်မှု ED ကိုပြိုကွဲစေသော“ စမ်းသပ်မှု” လေ့လာမှုများမရှိပါ။ Prause ကလေ့လာမှုများအရ porn သည် ED သို့မဟုတ် anorgasmia ကိုမဖြစ်စေကြောင်းသက်သေပြသည်။ မဟုတ်ပါ, အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုအနုတ်လက္ခဏာသက်သေပြနိုင်သကဲ့သို့။
မဟုတ်ပါ၊ ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းကိုမြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုနှင့်တသမတ်တည်းဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဤတွင်“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးသောသူမ၏မထောက်ခံသောစကားပြောမှုကိုပြိုကွဲစေသောလေ့လာမှုများစာရင်းဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးလေ့လာမှု ၂၅ ခုတွင်လိင်နှင့် porn စွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစေသည်။
Prause ၏ link နှင့်ပတ်သက်ပြီးအောက်ပါလျှို့ဝှက်စကားပြောနေသူတိုင်းနှင့်ချယ်ရီရွေးချယ်သည့်လေ့လာမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်သည်။ YBOP ၏ကျယ်ပြန့်သောဤချီးမွမ်းရေးသားချက်ကိုဝေဖန်မှုသည် - "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က.
ယောရှု Grubbs နှင့် Gola ကလာမည့်လေ့လာမှုသိက္ခာချဖို့ကြိုးစားနေ။
နောက်တဖန်၊ porn သွေးဆောင်မှု ED ကိုပြိုကွဲစေသော“ စမ်းသပ်မှု” လေ့လာမှုများမရှိပါ။
Quora အပေါ် Prause (မတိုင်မီညစ်ညမ်းထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေ porn မဆိုအကြံပြုချက်များတိုက်ခိုက်နေ သူမဂယ်ရီ Wilson ကနှောင့်ယှက်ဘို့ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်) ။ Prause က“ လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်” (သူမသည်“ အပြာစာပေရုပ်ပုံ” အစားထိုအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုသောတစ် ဦး တည်းသောလူသားဖြစ်သည်) ၏ဆိုးကျိုးများသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုသည်
Prause မျှလေ့လာမှုများ, အဘယ်သူမျှမ Meta-analysis သည်ကိုးကား, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမက fib တစ်ချောင်းပြောနေတာပဲ.
တဦးတည်းသောကျောက်များနှင့်ငှက်နှစ်ကောင်: သူမသည် porn စွဲ debunked ရှိသည်ဟုဆိုပါတယ် 1); နှင့် 2) သူမ၏နှင့်အတူသဘောမတူသူမည်သူမဆိုတစ်ဦး misogynist ဖြစ်ပါသည်:
အင်ဖို - ဂရပ်ဖစ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်မည်သူမဆိုသူ၏ misogyny သည်သူ၏တစ်ခုတည်းသောသက်သေသာဓကဖြစ်သည် Gary Wilson က“ Miss” ကိုမတော်တဆစာရိုက်လိုက်ပြီး Prause ကို Wilson ရဲ့လိင်တံအရွယ်ကိုမေးခဲ့တယ်။
YBOP နှင့် Gary Wilson ၏ TEDx ပြောဆိုမှုများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် porn သည် ED သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုကိုမဖြစ်ပေါ်စေဟုဆိုသည်။
Prause သည်သူမကိုအသရေဖျက်မှုအတွက်တားမြစ်ခြင်းမခံရမီ Gary Wilson နှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ထပ်မှတ်ချက် ၃၀ ရှိခဲ့သည်။ စကားမစပ် Gary ၏ TEDx ဟောပြောချက်ဖြစ်သော“ The Great Porn Experiment” (30) အတွက်ပြည့်စုံသောပင်ကိုယ်အထောက်အပံ့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Quora တွင်, porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED debunk ဖို့ကြိုးစားနေ (Prause ထို့နောက်အားလုံး Quora ကျော်ကဒီအဖြေကိုပို့စ်တင်, 10 ကြိမ် commented):
Prause ကသူမသည် Frankenpaper မှ "disproving" porn-induced erectile dysfunction ၏ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုဖြုတ်ချခြင်းအပေါ်သူမ၏တုန့်ပြန်မှုကိုကိုးကားသည်။ ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD (2015) က peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်။ အကယ်၍ သင် Prause သည်ဂျာနယ်များသို့သွားမည့်အဆုံးများကိုမြင်လိုလျှင်၊ Prause & Pfaus ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည် Richard A. Isenberg (“အနီရောင် Herring: Hook, လိုင်းနှင့် Stinker")
အပြည့်အဝရက်တွင်ဖော်ထုတ် ချီးကျူးခြင်း & Pfaus: အဘယ်အရာကိုမျှသံသယရှိလေ့လာမှုအတွက် Up ကိုထည့်: လူငယ်ဘဝတွင်စိတ်ကျအောကျခံ '' ED လက်ဝဲ Unexplained - ဂါယူဆပါသည် (2015) က
နောက် Quora post တစ်ခုတွင်ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါမရှိဟုဆိုထားသည်။ သူမတွင်ဒေတာမရှိကြောင်းသက်သေပြနေသည် (သူမမရှိ) ဟုမှားယွင်းစွာပြောခဲ့သည်
တကယ်ဘာမျှပေမယ့်သူမကိုမထောက်ပံ့ဝါဒဖြန့်နှင့်အတူအကူအညီလိုအပ်သူတွေကို၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း, Quora တရားဝင်အဘယ်အရာကိုသုတေသီ trolls မလဲ
ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ငါတို့အားလုံးအတွက်အလွန်အမင်းအပြုသဘောဆောင်သည်ဟုပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြနေစဉ် Quora တွင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အစီအစဉ်ကိုထောက်ပံ့သည်
Prause သူမ၏ချယ်ရီ-ကောက်ယူစတေးလျလေ့လာမှုတစ်ခုချိတ်ဆက်: သြစတြေးလျအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile: ကျန်းမာရေးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2016) ၏ဒုတိယအချက်သြစတြေးလျလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်။ အတိတ်ကာလ၌, Prause သင်တန်းသားများကိုသာ 2% porn ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့ခံစားခဲ့ရကြောင်းအခိုင်အမာသိရသည်။ အမှန်မှာ၊ အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၃၀ ကြားရှိယောက်ျားနှင့်မိန်းမ ၁၇% သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။
porn ကြည့်ရှုသူများသည်သာတူညီမျှဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Prause ၏ပြောဆိုချက်ကို Prause ပူးပေါင်းသူတေလာကိုဟွတ်ကတစ်ကိုယ်တည်းလေ့လာမှုတွင်သာဖော်ပြခဲ့သည်။ "အမြိုးသမီးမြားမှအမုန်းတရား Making" babyish အကြောင်းကိုတကယ် Is "၏ဝေဖန်မှု? ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများတစ်ကိုယ်စားလှယ်အမေရိကန်နမူနာ "(2016) တွင် Nonusers သန်းနောက်ထပ်ကျားသာတူညီမျှသဘောထားများကိုကိုင်ထားပါ။
တေလာ Kohut frame သာတူညီမျှ အဖြစ်: (1) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဘို့ပံ့ပိုးမှု, (2) Feminist ဖော်ထုတ်ခြင်း, အာဏာရာထူးကိုင်ပြီး (3) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (4) ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အချိန်ပြည့်အလုပ်ရှိပါတယ်သည့်အခါမိသားစုဘဝကြုံတွေ့နေကြရသည်ကြောင်းယုံကွညျနှင့်ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက် (5) ပိုပြီးကျင်းပခြင်း အစဉ်အလာမိသားစုဆီသို့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားတွေ။ ပိုပြီးလစ်ဘရယ်ဖြစ်လေ့ရသောလောကလူဦးရေ, ဝေးရှိ ဘာသာရေးလူဦးရေထက် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်း။ ဤအစံရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်အဆုံးမဲ့သည်အခြား variable တွေကိုလျစ်လျူရှုအသုံးပြုပုံခဲရေးသားသူတေလာ Kohut "ဟုသူကပါဝငျသောအရာကိုသူ့ရဲ့လေ့လာမှုရဲ့မဟာဗျူဟာကျကျရွေးကောက်သောစံနှုန်းများအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူ porn အသုံးပြုသူများကိုအတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သိတယ်သာတူညီမျှ။"ထိုအခါသူကအားလုံးကိုပတ်ချာလည်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဖြစ်မှန်မှာတော့ Kohut ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုတွေ့မြင် (နီးပါးသည်အခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများကဆန့်ကျင်နေကြ ကျော် 25 သဘောထားတွေလိင်အရအခွင့်အရေးမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများ, objectification နှင့်လျော့နည်း၏ဤစာရင်း သာတူညီမျှ). စာပေ၏ဤ 2016 ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှတစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015.:
အမျိုးသမီးများ၏လိင် objectifying ပုံဖော်ခြင်းအမျိုးသမီးများ၏အခြားသူတွေ '' ဆွဲဆောင်မှုပေါ်နှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အမျိုးသမီးရဲ့အမြင်များပေါ်တွင်ဤအကြောင်းအရာကိုမှထိတွေ့မှု၏အလားအလာသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေပြုစုပျိုးထောင်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာအတွက်မကြာခဏဖြစ်ပျက်မှုရှိပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ synthesize ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက် 1995 နှင့် 2015 အကြား peer-ပြန်လည်သုံးသပ်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဂျာနယ်များထုတ်ဝေသုတေသနအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပါရှိသောကြောင့် 109 စာပေတစ်ဦးစုစုပေါင်း 135 လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းထိတွေ့မှုနှင့်ဤအကြောင်းအရာပုံမှန်အစည်းအဝေး, နေ့တိုင်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်အကျိုးဆက်များတစ်အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတသမတ်တည်းသက်သေအထောက်အထားများ, သာ. ကြီးမြတ် Self-objectification, လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်နှင့်ရန်ဘက်ပြုမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ပိုမိုထောက်ခံမှုပေးအဆိုပါတွေ့ရှိချက်များနှင့် အမြိုးသမီးမြားအပျေါအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံစိတ်။ ထို့အပြင်ဤအကြောင်းအရာစမ်းသပ်ထိတွေ့အမျိုးသမီးအရည်အချင်းကို, စာရိတ္တနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တခုလျော့နည်းသွားအမြင်ရှိသည်ဖို့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်နေသည်။
၎င်းသည် Prause - ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုင်များတွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်အတူလှည့်ဖြားခြင်း၊ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောအခြားလေ့လာမှုအားလုံးကိုချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Prause porn အသုံးပြုမှုကိုလွှမ်းမိုးသောအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသူမ၏အခိုင်အမာအရေးဆိုမှု (စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်) ကိုထောကျပံ့ဖို့3စာတမ်းများကိုးကား:
၁) Ley & သူမ၏ ၂၀၁၄ ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (စာပေကိုစစ်မှန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ) အောက်ဖော်ပြပါသည် Ley & Prause ၏“ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” တွင်ပါ ၀ င်သည့် shenanigans များအားလုံးကိုဖော်ပြသည့်စက္ကူ ၃ ၏ရှည်လျားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose: အဆိုပါဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထားသည်။ ၎င်းသည်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုံးဝကိုဖျက်သိမ်းပြီးသူတို့ရည်ညွှန်းထားသည့်သုတေသနနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစွာတင်ပြမှုများစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Ley ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောရှုထောင့်က porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြသောလေ့လာမှုများအားလုံးအားချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ "ရည်မှန်းချက်" ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရေးသားရန်ရည်ရွယ်နေစဉ် Ley & Prause သည်ရာနှင့်ချီသောရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုများကိုချန်လှပ်ထားခြင်းသည်ဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများဖြစ်သည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများအားလုံးနီးပါးသည်သူတို့ကိုးကားထားသောသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုများနှင့်ပင်ဆက်စပ်မှုရှိကြသည်။
2) တေလာ Kohut ရဲ့ "အမြိုးသမီးမြားမှအမုန်းတရား Making" တကယ်ပဲအကြောင်းကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Is "? ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများတစ်ကိုယ်စားလှယ်အမေရိကန်နမူနာ "(2016) တွင် Nonusers သန်းနောက်ထပ်ကျားသာတူညီမျှသဘောထားများကိုကိုင်ထားပါ။ အထက် Debunked ။
၃။ Taylor Kohut ၏ပုံသဏ္itativeာန်ကွာခြားသောစာရွက်ကိုဤနေရာတွင်နှံ့နှံ့စပ်စပ်ဖြိုခွဲထားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏စုံလင်သောဆက်ဆံရေးအပေါ်ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပါဝင်သူ - သတင်းပေးမှု၊ “ အောက်မှ -Up” သုတေသန (၂၀၁၆)၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေ Fisher၊ Lorne Campbell ၏ကန ဦး တွေ့ရှိချက်များ။ (ကြိုးပမ်းမှုမှ) တန်ပြန်ဖို့ဒီတေလာ Kohut လေ့လာမှုနောက်ကွယ်မှရည်ရွယ်ချက်ကခဲ့သည် ဆက်ဆံရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်နီးပါး 60 လေ့လာမှုများ? ဒီလေ့လာမှုနှင့်အတူနှစ်ဦးအဓိကပြဿနာများနေသောခေါင်းစဉ်:
ဒါဟာကိုယ်စားလှယ်နမူနာဆံ့မခံပါဘူး။ အများဆုံးလေ့လာမှုများရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောလူနည်းစုဒီလေ့လာမှုမှာ, porn ကိုအသုံးပြုပြသသွားရမည်အကြောင်း အမျိုးသမီး 95% မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် porn ကိုအသုံးပြု။ နှင့် အမျိုးသမီး 83% (နှစ်ပေါင်းအချို့ကိစ္စများတွင်) အကြားဆက်ဆံရေး၏အစအဦးကတည်းက porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူများသည်နှုန်းထားများကောလိပ်-အသက်ယောက်ျားအတွက်အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများထက်ပိုမိုမြင့်မားများမှာ! တနည်းအားဖြင့်သုတေသီသူတို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ရလဒ်ထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ရဲ့နမူနာ skewed ရှိသည်ဟုပေါ်လာပါသည်။ အဖြစ်မှန်? အကြီးဆုံးကနေ cross-section ဒေတာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုယ်စားလှယ် အမေရိကန်စစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း) ထိုအစီရင်ခံတင်ပြ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးသာ 2.6% သည်လွန်ခဲ့သောလတွင်တစ်ဦး "ညစ်ညမ်း website မှာ" သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးမြင်ဘို့ 2000, 2002, 2004 (ထံမှဒေတာများ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး, 2014).
အဆိုပါလေ့လာမှုဘာသာရပ် porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်နှင့်အပေါ် ramble နိုင်ရှိရာမေးခွန်းများကို "နောက်ဆုံးသူ့ကိုဖွင့်လှစ်" ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါသုတေသီများ ramblings ဖတ်ပါနှင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, အချက်ကိုပြီးနောက်အဘယ်အဖြေကို "အရေးကြီးသော" နှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက် (လည်?) သူတို့ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်မဆို variable ကိုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမပတျသကျဘူး။ ထိုအခါသုတေသီများ porn ရဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုပိုမိုထူထောင်, သိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်များနှင့်တိုက်ရိုက်မေးခွန်းများကိုအလုပ်ပေးသောညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာရှိသမျှအခြားလေ့လာမှုများ, ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့သည်းခြေခဲ့ ချို့ယွင်းချက်။ ဒီကယ့်ကိုသိပ္ပံလား? ဦးဆောင်ရေးသားသူရဲ့ က်ဘ်ဆိုက် နှင့်သူ၏ ရန်ပုံငွေရှာမှာကြိုးပမ်းမှု အနည်းငယ်မေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။
အမှန်တကယ်တွင်လေ့လာမှု ၆၀ နီးပါးသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် (လေ့လာမှု ၁ နှင့် ၂ စာရင်းတွင် meta-analysis၊ လေ့လာချက် ၃ တွင် porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ၃ ပတ်ကြာဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ၄ မှ ၈ အထိလေ့လာခဲ့သည်။ ) longitudinal ဖြစ်ကြသည်။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကမိန်းမများတွင်လိင်မှုကိစ္စစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန်အမျိုးသမီးများအားပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်းလေ့လာမှုအများစုသည် (ဤစာရင်းကိုကြည့်ပါ) arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ) ။ အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့အထီးပါဝင်သောအားလုံးလေ့လာမှုများကိုသိရအဖြစ်ချိတ်ဆက် porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
Quora တွင်, porn အသုံးပြုမှုကိုဖနျအများစုအပြုသဘောဖြစ်ပါသည်:
ယခင်အပိုင်းအတွက် debunked အတူတူ Non-အရေအတွက်, ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှု ကိုးကား. : ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏စုံလင်သောဆက်ဆံရေးအပေါ်ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပါဝင်သူ - သတင်းပေးမှု၊ “ အောက်မှ -Up” သုတေသန (၂၀၁၆)၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေ Fisher၊ Lorne Campbell ၏ကန ဦး တွေ့ရှိချက်များ။
Quora တွင်သူမကသောလောကဓာတ်ကိုပြောတယ် သူမ၏တည်းသော, ချို့ယွင်းချက်, 2015 လေ့လာမှု debunked porn စွဲ:
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အားသူမတုန့်ပြန်မှုကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းသည်ဘာမျှမဟုတ်ပါ Matuesz Gola ရဲ့ သူတို့ရဲ့ 2015 EEG လေ့လာမှုဝေဖန်ဆန်းစစ် (Prause et al။ , 2015) ။ အဆိုပါ YBOP ဝေဖန်မှု Prause et al dismantles ။ : လိုင်း, အရေးဆိုမှုဖြင့်ပြောဆိုချက်ကို, ကားအညွှန်းအားဖြင့်ကိုးကားခြင်းဖြင့်လိုင်း အယ်ဒီတာမှပေးစာ: များ၏ဝေဖန်မှု "Prause et al ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" (2016),
Quora တွင်၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း။ ဓာတ်ခွဲခန်းများမှလေ့လာချက်များအရ“ လိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများသည်စွဲလမ်းစေသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ အားလုံးအာရုံကြောလေ့လာမှုများစွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့.
အဖြစ်မှန်? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 27 လေ့လာမှုများ။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး5လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
Quora တွင်, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများတိုက်ခိုက်ခြင်း။
သူမကိုးကားအဆိုပါ3လေ့လာမှုများ Prause မလုပ်ပဲအဘယ်အရာကိုမတှေ့:
1) ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 (အထကျဖျောပွထားသ). ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ဤအ2ဝေဖန်မှုဖော်ထုတ်အဖြစ်၎င်း၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့မပြုခဲ့:
2) Prause ကြောင်းပြောဆိုထားသည် Landripet & Štulhofer, 2015 porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကြားမျှဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ် ဒီ YBOP ဝေဖန်မှု နှင့် စာပေ၏သုံးသပ်ချက်ကို။ Landripet & Štulhofer၏စာတမ်းကသူတို့တင်ပြသောထူးခြားသောဆက်စပ်မှုသုံးခုကိုချန်လှပ်ထားသည် ဥရောပညီလာခံ (သူတို့ရဲ့စိတ္တဇထံမှကောက်နှုတ်ချက်):
တိကျတဲ့ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများများအတွက် preference ကိုအစီရင်ခံသိသိသာသာ (သို့သော် ejaculatory မဟုတ်သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ-related) erectile နှင့်အတူအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်နွယ်ခဲ့ကြသည်။
Prause & Pfaus 2015 ကဲ့သို့ဤစာတမ်းသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာပေများတွင်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည် အပေါ်မှတ်ချက်: Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Is? Gert မာတင် Hald, Ph.D အားဖြင့်
3) ဒီလာမယ့်စက္ကူကယ့်ကိုသူမသည်အဘယ်အရာများအတွက် Prause ဖျောထုတျကိုးကားပြီး: Sutton, Stratton, Pytyck, Kolla, & Cantor, 2015 ထိုကဲ့သို့သော paraphilias နှင့်နာတာရှည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်အဖြစ် hypersexuality မမှန်များအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခု (ပျှမ်းမျှအသက် 41.5) ဖြစ်ခဲ့သည်။ 27 သူတို့ (ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ) masturbated အဓိပ္ပာယ် "ကိုရှောင်ကြဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ," တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီသို့မဟုတ်တစ်ပတ်ကိုထက်ပို7နာရီအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ compulsive porn အသုံးပြုသူ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုသတင်းပို့ (မကြာခဏညစ်ညမ်းသွေးဆောင် ED အတွက်ရှေ့ပြေး) ။ ကျန်ရှိနေသေးသောအမျိုးသားများ၏ ၃၈% သည်မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသနည်း။ လေ့လာမှုကမပြောနိုင်ပါ၊ ထို့အပြင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုမှုများကိုစာရေးသူများမှလျစ်လျူရှုထားကြသည်။ အဓိကအချက် - Prause သည်လိင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများမဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသက်သေပြသည့်အနေဖြင့်အတင်းအဓမ္မညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ ၇၁% သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြသည့်လေ့လာမှုတစ်ခု၏ကိုးကားချက်ဖြစ်သည်။
Quora, သူမ၏တည်းသော, ချို့ယွင်းချက်လေ့လာမှု debunked ဟု porn စွဲတွင် (Prause et al ။ , 2015):
သူတို့ရဲ့တည်းသော, ပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတရားဝင်အဘယ်အရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်? ၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014)ပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရာ။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015 သောဤစာရင်းထဲတွင် #13 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမြိုးသမီးမြားတှငျပိုမို porn အသုံးပြုမှုကို porn မှ ဦး နှောက် activation နှင့်ဆက်နွယ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း ၁၀ ခုကဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီမှု) တွင်အရှိန်လျော့လျော့ခြင်း / လေ့ကျင့်မှုကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူသည် ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
ဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင့်, နည်းသော သာ. ကြီးမြတ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော vanilla porn (ဓာတျပုံ) မှဦးနှောက်ကို Activation ပြုလုပ်အဖြစ်စာရင်းဖြစ်ပါတယ် supporting နာတာရှည် porn ကိုချသုံးကြောင်းအယူအဆလိင်စိတ်နိုးထထိန်းညှိ။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , နာတာရှည် porn အသုံးပြုသူများကိုအပြိုင်ဟို-hum porn (၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များအငြိမ်ပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ပျင်းခဲ့သည် Kuhn & Gallinat ။ , 2014) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, စွဲလမ်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုသည်းခံစိတ်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ သည်းခံစိတ်ထပ်ခါတလဲလဲသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်သောမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့လျော့နည်းသွားတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက် EEG ဖတ်မှုနိမ့်ကျသောကြောင့် ဦး ဆောင်ရေးသားသူနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကသူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုမှားယွင်းစေသည်ဟုဆိုသည် Prause ကသူမ၏ EEG ဖတ်ချက်များသည်လေ့ကျင့်ခြင်းထက်“ cue-reactivity” ကိုအကဲဖြတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Prause မှန်တယ်ဆိုရင်တောင်သူမကသူမရဲ့ "အတု" အခိုင်အမာအတွက်ကွာဟနေတဲ့အပေါက်ကိုလျစ်လျူရှု: မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသူမ၏ပြောဆိုချက်ကိုအကြောင်းကို Prause et al ။ 2015 26, မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်း cue-reactivity ကိုရှာတွေ့ အခြား အာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27။ သိပ္ပံလေးနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်မလွယ်ကူသည့်တည်းသော, ပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုနှင့်အတူမသွားဘူး, သိပ္ပံ (သူမ၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့မ) သက်သေသာဓကများသဘောအရဆိုလျှင်နှင့်အတူတတ်၏။
ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သည် Prause အပေါ်အခြေခံပြီးတင်သည် တစ်ယောက်တည်း၊ ချို့ယွင်းချက်ရှိသော ၂၀၁၅ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင်သူသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကို“ ပြိုကွဲပျက်စီးစေခဲ့သည်” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်:
တကျိပ် ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015။ စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ - အားလုံး Prause အမှန်တကယ် desensitization သို့မဟုတ်လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူသည်။
Ley's ၏စာအုပ်ဟောင်း Tweeting ။
အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများအတွက်, အစား porn ၏, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအပြစ်တင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်:
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်ပြဿနာ (2016) ဖြစ်ပါသည်
Prause et al ။, 2015, အမှန်တကယ် porn စွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ပေးသောနောက်တဖန်!
အရာတစ်ခု debunk မထားဘူး
ဆောင်းပါး၏အဓိကအငြင်းပွားမှုမှာပိုမိုများပြားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မုဒိမ်းမှုနည်းပါးစေသည်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းအခိုင်အမာမှားသည် မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့် (2018) လျစ်လျူရှု
Pamela Anderson တို့ဖွငျ့အပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှု Daily Beast, porn-related သတင်း၏တစ်ရက်အတွင်းကောင်တာဆောင်းပါးများကိုထုတ်ချပေး၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ်ထားတဲ့:
ပြဿနာ, တွေ့ရှိချက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်နီးပါး 80 လေ့လာမှုများ။ ဒီရယူပါ: အထီးပါဝင်သောအားလုံးလေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ )
ဤ လုပျသငျ ဆောင်းပါးသည်ဤ2ဆောင်းပါးများအတွက် NHS လိင်ကုသနှင့်ဆရာဝန်များတန်ပြန်ရန်ထုတ်ဝေခဲ့သည်:
ညစ်ညမ်းစာပေသည် PCES ဟုခေါ်သောသံသယရှိသည့်ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ညစ်ညမ်းမှုသည်သင်နှင့်မတူပါ၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ဖူးသမျှတွင်အဆိုးဝါးဆုံးသောလေ့လာမှုဖြစ်သည်ဟူသောအဆိုကိုထောက်ခံရန်အတွက်ဆောင်းပါးတွင်လေ့လာမှုတစ်ခုသာကိုးကားထားသည်။ YBOP သည်သုတေသီများ၏ရလဒ်ကိုရရှိရန်မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုသေချာစွာဖော်ထုတ်သည် - ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (2008), Hald GM က, Malamuth မိုင် (ထို PCES) ၏ self-ခံစားသက်ရောက်မှု
ဒီမှာ: ဂယ်ရီ Wilson က (7 မိနစ်ဗီဒီယိုကိုတင်ဆက်) အားဖြင့် "babyish စားသုံးမှု Effect စကေး," ၏ဝေဖန်မှု
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 45 လေ့လာမှုများပါရှိသည်.
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? နီးပါး 80 လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်.
NHS ကျွမ်းကျင်သူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပါ၊ သို့သော်သူမသည်လူနာများကိုမဆက်ဆံပါ။
ဤနေရာတွင်လုံးလုံးလျားလျားဖျက်သိမ်းလိုက်သောတေလာ Kohut ၏ပုံပျက်အရည်အသွေးရှိသောစက္ကူကို အသုံးပြု၍ NHS ကျွမ်းကျင်သူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏စုံလင်သောဆက်ဆံရေးအပေါ်ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပါဝင်သူ - သတင်းပေးမှု၊ “ အောက်မှ -Up” သုတေသန (၂၀၁၆)၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေ Fisher၊ Lorne Campbell ၏ကန ဦး တွေ့ရှိချက်များ။
Kohut ရဲ့လေ့လာမှုရဲ့နောက်ကွယ်ကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ညစ်ညမ်းမှုကိုအဆက်အသွယ်များအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်လေ့လာမှု ၈၀ ကျော်၊ အရည်အသွေးလေ့လာမှုနှင့်အတူ။ ဒါက Prause တွစ်တာလုပ်ဖို့လိုတာပါ။
ခွေးကလေးများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းသည် streaming porn ကိုကြည့်ခြင်းထက်ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဟုသူမ၏ပြောဆိုချက်ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး မျှသဘောမတူပါ။ Don Hilton, MD သည်ဤနှင့်အခြားအခြေအမြစ်မရှိသောပြောဆိုသောအချက်များကိုပြတ်ပြတ်သားသားရေးသားခဲ့သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းဆုံးနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း။ “ သူတို့” (ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်လေ့လာမှုများကိုထုတ်ဝေသောအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များ) သည်တူညီသောလူကိုတွယ်တာခြင်းမရှိ။ သူမသည်မှားယွင်းသော "ဆုလာဘ် = စွဲ" ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။
ရှင်းရှင်းရယ်စရာစွဲအားဖြင့်သွေးဆောင်လေးပါးကိုအဓိကဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ဖော်ပြထားကြသည်အဖြစ် ဂျော့ခ်ျအက်ဖ် Koob နှင့် Nora ဃ Volkow သူတို့ရဲ့မှတ်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ Koob အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက် (NIAAA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပြီး, Volkow မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (NIDA) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါထုတ်ဝေခဲ့သည် ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်: စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ် (2016) မှ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ လိင်စွဲရှိကွောငျးက၎င်း၏အဖွင့်စာပိုဒ်ထဲမှာဖော်ပြနေချိန်တွင်အဆိုပါစက္ကူ, မူးယစ်ဆေးများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အဓိကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြထားတယ်:
ကျနော်တို့ neuroscience စွဲ၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ဆက်လက်ကောက်ချက်ချ။ ဤဒေသရှိ neuroscience သုတေသနပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အစားအစာမှဆက်စပ်အပြုအမူစှဲ (ဥပမာများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်သစ်ကိုအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းမသာ, လိင်နှင့်လောင်းကစားဝိုင်း) ... ။
Volkow & Koob စက္ကူတွင်စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုလေးမျိုးကိုဖော်ပြထားသည်။ အသိ, 2) Desensitization, 3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality), 4) ချွတ်ယွင်းနေစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4သည့်ကြားတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောအများအပြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ:
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက် (သည်းခံစိတ်အတွက်ရရှိလာတဲ့) desensitization သို့မဟုတ်လေ့သတင်းပို့လေ့လာရေး: 1,